ညစောင့် – Grab Love Story
၂၀၁၆ခုနှစ်မှ စ၍ အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့်ရော၊ ပြည်တွင်းရှိ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပါ နှစ်ကာလ သိပ်မကြာလိုက် အရှိန်အဟုန်ကြီးစွာနှင့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ၏ အကူအညီဖြင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံး အလိုက် စီမံကိန်းကြီးများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာရာ လုပ်သားတိုင်း အဆင့်အတန်းရှိသော အလုပ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လာကြသည်။ ထိုသို့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသလို၊ တိုင်းပြည်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သော သယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုလည်း စည်းစနစ်ကျကျနှင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲလာခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ သယံဇာတများ မပြုန်းတီးအောင် ထိန်းချုပ်လာခဲ့ရာတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးစားပေးလာခဲ့သည်။ ဟိုးအရင်ကလို ဓါတ်ငွေ့များကို ထုတ်ယူ၍ သူများနိုင်ငံသို့ ရောင်းစားမည့်အစား၊ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို တည်ထောင်ပြီး ပိုလျှံသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုသာ ပြန်ရောင်းချမည်ဆိုသော ဦးတည်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုလမ်းစဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လာခဲ့ရာ သုံးနှစ်ခန့်အကြာတွင် ကြီးစွာသော အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ကြုံခဲ့ရသည်။
ထိုသည်ကား အခြားမဟုတ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ ပခုက္ကူမြို့ ရဲ့ မလှမ်းမကမ်း အကွာတွင် ယူရေနီယံ ဓါတ်သတ္တုကြောကို ရှာဖွေ့တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကြီးများသာမက၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ ထိုသတင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပို၍ အရေးပေးလာကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ ကမ်းလှမ်းမှုများ ရောက်ရှိလာကြရာ၊ ထိုအထဲမှ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီကို ရယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော နူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုကို ပခုက္ကူမြို့ နားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ နူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုမှ ရရှိသည့် စွမ်းအင်ဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသည် မြို့ရွာများ မပြောနှင့်၊ ကျေးလက်ဒေသများပါ မကျန် ၂၄နာရီ မီးမှန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း ယခင်အခါက ဆောင်ထားလေ့ရှိသည် အင်ဗက်တာများနှင့် ဘက်ထရီအိုးများကို အမှိုက်သိမ်းကားများထံ အပ်နှံကြသည်။ မီးအားမြှင့်စက်များကို ပြတိုက်ပို့ဖို့ ကြံစည်ကြသည်။ ကွန်ပျူတာများတွင် သုံးလေ့ရှိသည့် ယူပီအက်စ်များကို ထိုင်ခုံများ၊ ကုတင်များ ထောက်ကျိုးလျှင် ခုဖို့အတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ရေခဲသေတ္တာများတွင် သုံးလေ့ရှိသည့် ဆော့ဖ်ဂတ်များကိုမူ ကလေးအငိုတိတ်အောင် ပြသည့် အရောင်ပြေး မီးလုံးလေးများသဖွယ် ကစားစရာဖြစ်အောင် ဖန်တီးကြသည်။
ဤသို့လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖိုမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ယူသုံးစွဲသော နိုင်ငံများရဲ့ စာရင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရလေတော့သည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၂၆ခု … ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ …
မှန်ထဲတွင် ပေါ်နေသည့် မိမိပုံရိပ်အား ကိုမြင့်မောင်သေချာပြန်ပြီးကြည့်သည်။ ခုနလေးတင်မှ သေချာကျနစွာ Gillette ကိုသုံးပြီး ရိပ်ထားသဖြင့် သူ့ပါးပြင်နှစ်ဖက်စလုံးသည် စိမ်းမြပြီး ပြောင်ရှင်းနေသည်။ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေး ထူလပျစ်တွေနှင့် စာရင်တော့ နဲနဲပိုကြည့်ကောင်းသည့် အသွင်ပေါက်နေသည်။ ကိုယ့်ဟာကို သဘောကျသွားသည့် အလျောက် အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ချွန်ထုတ်၍ တေးသွားတစ်ခုအလိုက် လေချွန်မိသည်။ ပြီးနောက် မှန်တင်ခုံဘေးက ပလတ်စတစ်ခြင်းလေးထဲတွင် ရှိသည့် ဘီးကို ကောက်ယူ၍ သူ့ဆံပင် ဘိုကေကို အကြောင်းလေး ဖြစ်သွားအောင် ဖီးလိုက်သည်။ စိတ်တိုင်းကျသည် အထိ ဖီးပြီးမှ ဘီးကို ပြန်ချ၍ မှန်ကို ပြန်ကြည့်ရာ သူ့နှုတ်မှ ထွက်နေသည့် လေချွန်သံတီးလုံးက ရပ်သွားသည်။
“သေစမ်းကွာ … ဒီဆံပင်တွေက ဆိုးထားတာမှ မကြာသေးဘူး .. ချက်ချင်း ပြန်ဖြူနေပြန်ပြီ”
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ရေရွတ်ပြီးနောက် ကိုမြင့်မောင် ကြည့်မှန်ထဲက ပုံရိပ်ကို ဆက်ကြည့်မနေတော့ဘဲ အိမ်ရှေ့ဘက်သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းက တိုင်တွင်ချိတ်ထားသော ဆိုင်ကယ်သော့တွဲနှင့် ဦးထုပ်ကို ဆတ်ခနဲ ဖြုတ်ယူလိုက်ပြီးနောက် အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာခဲ့သည်။ နှုတ်မှမူ
“မြင့်မောင် .. မြင့်မောင် .. သိပ်လှချင်မနေစမ်းနဲ့ .. မင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကရော အလှပြင်ဖို့ လိုနေလို့လား .. ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိစမ်းပါ”
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမသလိုနဲ့ မကျေမချမ်း ပြောပြီးနောက် ကိုမြင့်မောင် တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့တွင် ထိုးရပ်ထားသည့် ယမဟာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့ ခွထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို ဆောင်းကာ တရကြမ်း မောင်းထွက်လာခဲ့သည်။ ပခုက္ကူမြို့ ရဲ့ မိန်းလမ်းမကြီး တလျှောက် သူ့ဆိုင်ကယ်အိတ်ဇောမှ တဒီးဒီး မြည်သံက ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်သည်။
ကိုမြင့်မောင် အနေဖြင့် သူ့လုပ်သက်လေးနှစ်အတွင်း အလုပ်ကို နောက်ကျဖူးသည်ဟူ၍ တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသေးပါ။ ဒီစံချိန်ကိုတော့ သူအမြဲ ထိန်းသိမ်းရပေလိမ့်မည်။ ဒါကလည်း သိပ်ခက်ခဲသော ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကိုမြင့်မောင်အား အလုပ်မသွားဖို့ရန် နောက်ကနေ၍ လိုက်လံဆွဲထားမိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင်သည်ကား အသက်၎ဝကျော်လာပြီဖြစ်သော လူပျိုကြီးတစ်ယောက်သာ …။
ကိုမြင့်မောင်သည် ပြည့်စွမ်းအားလို့ အမည်ပေးထားသော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသော နူးကလီယားဓါတ်ပေါင်းဖို စက်ရုံတွင် ညစောင့်အဖြစ် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်မှာ စက်ရုံစလည်ပတ်ကတည်းကဖြစ်သည်။ ဒီမတိုင်ခင်က ကိုမြင့်မောင်သည် ပခုက္ကူမြို့ ပေါ်က မီးသွေးဖုတ်သည့် အလုပ်ရုံတွင် ကြီးကြပ်သူ အလုပ်သမားခေါင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့မြို့နှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် နူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖို ရှိလာပြီးနောက် သူတို့လို မီးသွေးဖုတ်သည့်သူ မပြောနှင့်၊ မီးစက်ရောင်းသည့် သူတွေတောင် အလုပ်ပြောင်းလုပ်ရသည်ဖြစ်ရာ သူလည်းပဲ ထိုအထဲတွင် အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူက တခြားသူတွေထက်စာလျှင် ကံကောင်းသည်ဟု ပြောရမည်။ ပြည့်စွမ်းအား စက်ရုံမှုး ဖြစ်သူရဲ့ ထောက်ခံချက်နှင့် ညစောင့်အဖြစ် အလုပ်ရခဲ့လို့ ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ထဲသမား ဖြစ်သော ကိုမြင့်မောင်အတွက် ဒီလစာက လောက်ငှသည်ဟု ပြောလျှင် ပြောလို့ရပါလိမ့်မည်။
တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီအလုပ်က ကိုမြင့်မောင်အတွက် သက်သောင့်သက်သာ ရှိလွန်းလှပါသည်။ နောက်ပြီး သူတစ်ယောက်ထဲ ညစောင့်အဖြစ် လုပ်ရသည်ဟူ၍လည်း မဟုတ်ပါ။ သူနှင့်တွဲလျှက် သစ်ထွန်းဆိုသည့် ချာတိတ်တစ်ယောက် ရှိသည်။ သူကသာ ချာတိတ်လို့ ခေါ်ပေမယ့် သစ်ထွန်းကလည်း သူ့အသက်နှင့်သူတော့ ငယ်သည်ဟူ၍ ပြောလို့မရ။ အသက်၂၅နှစ်ကို ကျော်လာပြီမှန်း ဟိုတစ်နေ့ကတင် သူ့မွေးနေ့အဖြစ် စင်တင်စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို နှစ်ယောက်သား သွားခဲ့ကြလို့ မှတ်မိနေသေးသည်။ သူ့လိုမျိုး တစ်ကောင်ကြွက်ဖြစ်သည့် သစ်ထွန်းသည် သူ့အား ခင်တွယ်နေပြီး တခြားမှာတောင် အလုပ်သွားမရှာဘဲ ညစောင့်ဖြစ် သုံးနှစ်တိတိ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေသည်။
တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ သစ်ထွန်း တခြားနေရာသို့ ထွက်မသွားသည်ကိစ္စက သူ့အားခင်တွယ်ယုံတွင် မကဘဲ၊ အလုပ်က အေးဆေးရေသာခိုလို့ ရနေလို့ဟု ပြောလျှင်လည်း ရနိုင်သည်။ ကိုမြင့်မောင်သိသလောက် ပြည့်စွမ်းအားစက်ရုံတစ်ခုလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လုံခြုံရေးစနစ် အားလုံးသည် Automatic System များသာ။ ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့် တံခါးမကြီးများ၊ သတ္တုရှာဖွေစက်၊ CCTV၊ အချက်ပေး Alarm စနစ်၊ အားလုံး .. အားလုံးသည် သိကြသည့်အတိုင်း ကွန်ပျူတာနှင့်သာ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူနှင့် သစ်ထွန်း လုပ်ရသည့် အလုပ်က ထူးထူးခြားခြားရယ်လို့ မဟုတ်။ Reactor (နူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖို)နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ဝင်ရာ မိန်းတံခါးမကြီးဘေးနားရှိ လုံခြုံရေးခန်းလေးထဲတွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး CCTV screen ကို ကြည့်နေယုံသပ်သပ်သာ ဖြစ်ရှာသည်။
တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို့စက်ရုံထဲတွင် လာရောက်လုယက်ပြီး ယူစရာ ပစ္စည်းရယ်လို့ ကိုမြင့်မောင်အနေနဲ့ကတော့ ဘာဆိုဘာမှ စဉ်းစားလို့မရပါ။ စက်ရုံက လွင်တီးခေါင်ထဲတွင် ရှိယုံမက၊ ရောက်ဖို့ကလဲ လမ်းမကြီးကနေ သပ်သပ် လမ်းခွဲလေးအတိုင်း တော်တော်မောင်းလာရသေးသည်။ ဒီတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လုပ်သက်တလျှောက် လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်မှတ်ရရ ဆောင်ရွက်ဖူးတာဆိုလို့ ပခုက္ကူ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်က ရွာသူရွာသားတွေ မြေသိမ်းခံရလို့ဆိုပြီး ဆန္ဒလာပြတာရယ် (ဒါကလဲ NGO အမည်ခံအဖွဲ့တွေက မြှောက်ပေးလို့ ဖြစ်မှန်း သူက ပခုက္ကူမြို့သားမို့ သိနေသည်)၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုလား ဘာလား ညာလား မသိတဲ့ လူတစ်စု ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုင်ပြီး စက်ရုံရှေ့ လာအော်တာရယ်၊ ဒီလောက်ပဲ သူကြုံဖူးပါသည်။
ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်နေကြနေရာတွင် ထိုးထားခဲ့လိုက်ပြီးနောက် ကိုမြင့်မောင် သူ့နေရာလေးဖြစ်သော Security Room ဆီသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ဒီနေ့က ခရစ်စမတ်နေ့ ဖြစ်သဖြင့် တော်တော်များများက ခွင့်ယူကြ၊ ခရီးသွားကြနှင့်မို့ စက်ရုံဝင်းထဲတွင် လူအတော်ရှင်းနေသည်ကို ကိုမြင့်မောင် သတိထားမိသည်။ လုံခြုံရေးအခန်းထဲတွင်တော့ သစ်ထွန်းက သူ့ထက်စော၍ အထဲမှာ ရောက်နှင့်နေသည်။
“ဟေး .. အကိုကြီး .. ညတုန်းက ဘောပွဲကြည့်လိုက်သေးလား” (မော်နီတာများ တင်ထားရာ ခုံပေါ်ကို ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ဆန့်တင်ထားရင်း ပျင်းရိပျင်းတွဲပုံ ပေါက်နေသော သစ်ထွန်းက သူ့ကို လှမ်းမေးသည်)
“ကြည့်တယ် .. မန်ယူကတော့ နည်းပြထပ်လဲဦးမှာလား မသိပါဘူးကွာ” (ဆိုင်ကယ်သော့ကို သူထိုင်ရာခုံရဲ့ ရှေ့က အံဆွဲထဲ လှမ်းထည့်ရင်း ကိုမြင့်မောင် ဖြေလိုက်သည်)
“ဟုတ်တယ်နော် .. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မသိဘူးဗျ … မော်ရင်ဟိုကလဲ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် နှစ်နှစ်ပဲ ခံလား မသိဘူး .. သူ့ခန့်လိုက်တဲ့ ဒုတိယနှစ်မှာ ဖလားရတယ် .. ပြီးတော့ ဇယားအောက် ထိုးကျသွားလို့ ဂွာဒီယိုလာ ရောက်လာတယ် .. အခုအတိုင်းဆို ဂွာဒီယိုလာလဲ ပျားတုတ်နေပြီ”
“ဟုတ်လား .. အကိုကြီးက လောဘကြီးတာကိုး .. ဒါပေမယ့် ရှုံးလဲ ပြသနာ မရှိပါဘူး .. အကိုကြီးမှာ စားမယ့်အပေါက်က တစ်ပေါက်ပဲ ရှိတာ”
“ဟီး … ဟီး”
မျက်နှာကြီးစူပုပ်ပြီး ကိုမြင့်မောင်က သစ်ထွန်းအား လှမ်းဆဲလိုက်ပေမယ့် ဟိုကောင်က မဖြုံပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တစ်နေ့ ၁၂နာရီ အနည်းဆုံး တွေ့နေကြရသည့် သူတို့နှစ်ယောက်သည် ညီရင်းအစ်ကိုလိုတောင် ဖြစ်နေသည် မဟုတ်လား။ သူ့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်နေသည့် သစ်ထွန်းရဲ့ စားပွဲပေါ်က ခြေထောက်အား လှမ်းကန်ဖို့ ပြင်သည်။ ထိုအချိန်၌ တီဆိုသည့် လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရသဖြင့် နှစ်ယောက်သား မော်နီတာ ရှိရာသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်။
သူတို့ရှိရာ နူးကလီးယားစက်ရုံရဲ့အဓိက ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ဝင်ရာ မိန်းတံခါးပေါက်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြူလွှသည့် Lab Coat ကို ဝတ်ပြီး ရပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရင်ဘတ်ကြယ်သီးများ စေ့မထားမှုကြောင့် အမျိုးသမီးချော ဝတ်လာသည့် အောက်ခံ ရင်စေ့ရှပ်အင်းကျီအဖြူရောင်နှင့် အနက်ရောင် ရုံးဝတ်စကပ်တိုလေးကို သေချာစွာ မြင်နေရသည်။ ထို့အပြင် CCTV ကင်မရာ ဆင်ထားသည့် အနေအထားကလည်း အမြင့်နေရာမှ ဖြစ်သဖြင့် မော်နီတာပေါ်က မြင်ကွင်းတွင် ခပ်ဟဟဖြစ်နေသော အင်းကျီအောက်မှ ရင်သားနှစ်မွှာရဲ့ အပေါ်ပိုင်း မို့မို့အသားလေးတွေနှင့်အတူ၊ စကပ်အသား ကင်းလွတ်နေသော သွယ်လျပြေပြစ်သော ခြေတန်ဝင်းဝင်းလေးများကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် တွေ့နေရပြန်သည်။ ကိုမြင့်မောင့် ဂလုခနဲ တံတွေးတစ်ချက် မျိုချလိုက်သည်။ ပြီးမှ
“ဒေါက်တာဝင့်သူ .. ကျေးဇူးပြုပြီး Access Card ကို Scanner ပေါ်တင်ပေးပါ”
အင်တာကွန်းမှ တဆင့်လှမ်းပြောလိုက်သည့် ကိုမြင့်မောင် စကားအဆုံးတွင် ဒေါက်တာဝင့်သူဟု ခေါ်သော ခပ်ချောချော အမျိုးသမီးသည် ကုတ်အင်္ကျီထဲမှ ကတ်ပြားတစ်ခုကို ထုတ်ယူသည်။ မိန်းတံခါးကြီးရဲ့ ဘေးနားက ဘောင်တွင် တပ်ထားသော Scanner ရှေ့ သို့ ကတ်ကို ဝှေ့ယမ်းပြီး ပြလိုက်သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုကြောင့် သူမရဲ့ ရင်သားမို့မို့တွေ အင်္ကျီအောက်မှ ယိမ်းခါသွားသည်။
“သောက်ကျိုးနဲ နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး … ဝင့်သူလေးကတော့ ပိုပိုပြီးတော့ Hot လာတယ် ဟ .. သစ်ထွန်းရ”
“ဟုတ်တယ် .. အကိုကြီး” (ကိုမြင့်မောင် စကားကို သစ်ထွန်းက ခပ်တိုးတိုးနှင့် ထောက်ခံလိုက်ပြီး ရုတ်တရက် ခြောက်သွေ့ လာသလို ဖြစ်သည့် နှုတ်ခမ်းတွေအား လျှာနှင့်သပ်သည်)
တီခနဲ လျှပ်စစ်အသံထပ်ကြားလိုက်ရပြီးနောက် ဒေါက်တာဝင့်သူရပ်နေရာ ရှေ့ က သံလိုက်ဓါတ်သုံးသော့ (Magnetic Lock) က ပွင့်ပြီး မိန်းတံခါးမကြီး ပိတ်ထားရာမှ ဟသွားသည်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် အနက်ရောင်လေးကို စီးထားသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူ ကြွကြွရွရွလေး အထဲသို့ လျှောက်လှမ်းဝင်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင်တို့ ရှိရာ Security အခန်းသို့ အဖြတ်တွင် မှန်နောက်ဘက်မှ မြင်နေရသည့် သူတို့အား ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် အပြုံးနှင့် လှမ်းပြုံးပြရင်း နှုတ်ဆက်သည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ယောက် ရှုံးနိုင်လှသည့် မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးအား ကိုမြင်မောင်နှင့် သစ်ထွန်း အငမ်းမရကြည့်ရင်း ဖြစ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း ဘာဆိုဘာမှ ပြန်မပြောမိဘဲ ငုတ်တုတ်မေ့နေကြသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူက သူတို့ကို တစ်ချက်သာ ကြည့်ပြီး ဆက်မကြည့်တော့ဘဲ ဓါတ်ခွဲခန်းရှိရာသို့ လျှောက်သွားသည်။ တိတ်ဆိတ်နေသည့် ကော်ရစ်တာတလျှောက် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မှ ထွက်သည့် အသံကိုသာ စည်းချက်ကျကျ ကြားနေရသည်။ ကိုမြင့်မောင်နှင့် သစ်ထွန်းတို့ရဲ့ ဆာလောင်နေသည့် အကြည့်များကမူ ကုတ်အင်္ကျီဖုံးထားသည့်တိုင် အရိပ်အယောင်လေး လှမ်းမြင်နေရသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ တင်သားဖြိုးဖြိုးများကို မျက်စိတစ်ဆုံး လိုက်ကြည့်နေသည်သာ …။
“တကယ်ဗျာ .. ဒီလိုမျိုး ထူးချွန်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်မှာ ဒီလောက်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ကို ထင်မထားဘူး” (ဒေါက်တာဝင့်သူ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်သွားသည့်နောက် သစ်ထွန်းက ထောင်မတ်လာသည့် သူ့လီးကို ဘောင်းဘီထဲ နေရာပြန်ချရင်း မစားရဝမခမ်း ညည်းသည်)
“ဟရောင် .. ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ပြော .. မင်းပြောနေတာ ငါ့ဇနီးလောင်းနော်” (ကိုမြင်မောင့်က ပြန်နောက်ရင်း သစ်ထွန်းအားစသည်)
မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီး ပြောလိုက်သည့် သစ်ထွန်းစကားကြောင့် ကိုမြင့်မောင်အတွေးက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခန့်တုန်းက စက်ရုံသို့ လူကြုံလာပို့သည့် အဖြစ်အပျက်ဆီသို့ ရောက်သွားသည်။ စက်ရုံထဲက ဝန်ထမ်းအရာရှိတစ်ယေက်ဆီ ပစ္စည်းလာပို့သည်ဆိုသော ကောင်မလေးသည် ရှိလှမှ အသက်၁၈နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမည်။ သို့သော် သူမကိုယ်ပေါ်ရှိ အတိုင်းအထွာတွေက ၁၈နှစ်မက။ ချောတာကလည်း တော်တော်လေး ချောသည့်အထဲပါသည်။ နောက်ပြီး သူတို့စက်ရုံတွေရဲ့ လုံခြုံးရေးအထာတွေကိုလည်း သေချာမသိ။ ကိုမြင့်မောင်အတွက်ကတော့ ဒါမျိုးအကြိုက်ပေါ့။
ခပ်တည်တည်နှင့် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီး ကောင်မလေးရဲ့ တင်တွေရော၊ ရင်တွေပါ ဟိုစမ်းဒီစမ်းနှင့် ငါးမိနစ်လောက် စေ့စေ့စပ်စပ် လက်ကစားခဲ့သည်။ တော်သေးသည်။ ကောင်မလေးကလည်း အူတူအတလေးမို့လို့လား မသိ။ ကိုမြင့်မောင် ရုပ်တည်ကြီးနှင့် သူမကိုယ်အား ကိုယ်တွယ်နေသည်ကို ငြိမ်ခံခဲ့သည်။ ကိုမြင့်မောင်အဖို့တော့ မေ့လို့မရသည့် နေ့တစ်နေ့ပင်။
အခု သစ်ထွန်းက ပြန်ပြောင်းပြောလိုက်တော့ ကိုမြင့်မောင် ကောင်မလေးနေရာတွင် ဒေါက်တာဝင့်သူကို အစားထိုး မြင်ယောင်လာသည်။ သူမရဲ့ ဖြိုးမောက်တဲ့ ရင်တွေနှင့် တင်သားဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကို နှိုက်ကာ ကိုင်လိုက်ရရင် ဖြင့် … ရှလွတ် ..။ အင်း … ဒါပေမယ့် ဉာဏ်ကောင်းလို့မှ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရထားတာပဲ။ သူ့ရဲ့ ဒီအကြံအဖန်က ဒေါက်တာဝင့်သူနှင့်ဆို အောင်မြင်မှာ မဟုတ်။ ဟူးခနဲ သက်ပြင်းတစ်ခုကို ခပ်ကျယ်ကျယ် မှုတ်ထုတ်ရင်း စားပွဲပေါ်တွင် ရှိနေသော အားကစားဂျာနယ်တစ်ခုကိုသာ ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
ဒေါက်တာဝင့်သူ ရောက်လာပြီးနောက်တော့ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှထပ်မဖြစ်တော့ဘဲ ပျင်းစရာကောင်းလှသည့် ညတစ်ညက အလိုလို ရောက်ရှိလာသည်။ ည၈နာရီထိုးလောက်အရောက်တွင် သစ်ထွန်းက ထိုင်နေရာမှထသည်။ အကိုကြီး .. ကျနော် နဲနဲ patrol လှည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင်သာ အပိုအလုပ်တွေဟု တိုးတိုးလေး ရေရွတ်ရင်း ထိုင်ရာမှ မထဘဲ ကျန်ခဲ့သည်။ တကယ်လည်း ဒီလိုမျိုးကိစ္စက အပိုအလုပ်တွေပါ။ သူတို့ စက်ရုံတည်ရှိရာနေရာတွင် မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး ရောက်လာသည်ဆို၍ ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တစ်မြီးမှ ရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား …။
သစ်ထွန်းတစ်ယောက် သူ့မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့် ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် ဆုံလည်ထိုင်ခုံရဲ့ နောက်ကျောကို ကျကျနနမှီလိုက်သည်။ ကိုယ်ကိုလျော့လျော့ရဲရဲ အနေအထား ပြင်ဆင်လိုက်ပြီး၊ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းအား ရှေ့ စားပွဲခုံပေါ် ဆန့်တင်ရင်း ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကာ စိတ်မှန်းလေးကြံဖို့ ပြင်လိုက်သည်။ မျက်စိမှိတ်ထားသည့် သူ့အတွေးအာရုံထဲတွင် ဒေါက်တာဝင့်သူတစ်ယောက် တူးပိစ်ဘီကီနီအဝါရောင်လေး ဝတ်ကာ (မွ) ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို စု၍ လုပ်ပြနေသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်က ထိုင်ခုံဘေး တွဲလွဲကျနေရာမှ တဖြေးဖြေး ရွေ့ပြီး ပေါင်ဂွကြားကို အုပ်မိလိုက်စဉ်တွင် တီခနဲ အသံကျယ်ကြီးကို မိန်းဂိတ်တံခါးဝဆီမှ ကြားလိုက်ရသည်။
“ဟိုက် .. ဧည့်သည်ပါလား !!”
CCTV မော်နီတာပေါ်တွင် တွေ့လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ကိုမြင့်မောင် အံ့သြသွားယုံမက၊ မျက်လုံးများပင် ပြူးကျယ်ကုန်သည်။ အချိန်အခါမဟုတ် ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်က ရိုးရိုးတောင် မဟုတ်။ ဝတ်ထားစားထားတာ ပျံလန်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။ အမျိုးသမီးမှ တော်တော်ကြီးကို တောင့်ဖြောင့်သည့် မိန်းမဆိုတာ စကရင်ထဲမှနေ၍ လှမ်းမြင်နေရသည်။ နှာတံပေါ်ပေါ်၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်နှင့် အတော်ချောသည့် အမျိုးသမီးသည် အပေါ်ဘက်တွင်တော့ ဖြူလွလွကိုယ်ကျပ် ဘလောက်စ်ကို ဆက်ဆီကျစွာ ဝတ်ဆင်ထားပြီး၊ အောက်ဘက်တွင်တော့ သွယ်လျဖြောင့်စင်းသည့် ခြေတန်များကို မြင်နိုင်သော သားရေစကပ်အကျပ်အနက်နှင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ တကိုယ်လုံးတွင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနေရာက အဖြိုးအမောက်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ကိုမြင့်မောင် အမြဲသွားရည်ကျနေရသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ နို့ကြီးများထက်တောင် ပို၍ ကြီးမည့်ဟန်ရှိသည်။
အချက်ပေးခံရသည့်နှယ် အလိုလို ထောင်မတ်လာသည့် လီးကို ဘောင်းဘီထဲ အဆင်ပြေအောင် နေရာပြန်ချရင်း စားပွဲပေါ်ရှိ မိုက်ကရိုဖုန်းခွက်မှ ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ကိုမြင့်မောင် လှမ်းပြောသည်။
“ကျမ နာမည် လင်းလင်းထက်ပါ .. ဒေါက်တာဝင့်သူနဲ့ တွေ့ဖို့ ချိ်န်းထားလို့ပါ”
လင်းလင်းထက်ဆိုသည့် အမျိုးသမီးရဲ့ အပြောကြောင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် တင်ထားသော ဧည့်သည်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ကိုမြင့်မောင် သွားကြည့်သည်။ ဟုတ်သားပဲ။ ဒေါက်တာဝင့်သူက ဒီနေ့အတွက် ဧည့်သည်နေရာတွင် လင်းလင်းထက်ဆိုပြီး ရေးထားသည်။ ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာတော့ အတိအကျ ပြောမထား။ ကိုမြင့်မောင် စာအုပ်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး အင်တာကွန်းရှိရာသို့ ပြန်လျှောက်လာသည်။
“အခုပဲ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်မယ် … အထဲကို လျှောက်ဝင်လာခဲ့ပါ”
စားပွဲခုံပေါ်တွင် ရှိသော ကွန်ထရိုးပင်နယ်ခလုတ်မှ အနီရောင်အလုံးတစ်ခုကို ဖိချပေးလိုက်သောအခါ လင်းလင်းထက်ရှေ့ က တံခါးမကြီးက ဂျီးခနဲ အသံနှင့်အတူ ဟသွားသည်။ ပွင့်သွားသည့် တံခါးပေါက်ဆီသို့ လင်းလင်းထက် လျှောက်သွားသောအခါ အလတ်စားကျွဲကောသီးတစ်လုံးကို ထက်ပိုင်းဖြတ်ကာ တင်ထားသလား ထင်ရသည့် နို့ကြီးတွေက အထက်အောက် လှုပ်ခါပြန်သည်။ ဤမြင်ကွင်းကြောင့် လီးက ဘောင်းဘီထဲမှ တစ်ချက် ထခုန်သည်။ သို့သော် ကိုမြင့်မောင် သူ့လီးကို ဂရုမစိုက်နိုင်အားဘဲ အထဲဝင်လာသည့် လင်းလင်းထက်နှင့်တွေ့ရန် Security Room ထဲမှ အပြင်ကို ထွက်လိုက်သည်။
“မလင်းလင်းထက် .. ဒီဘက်မှာ ရှိတဲ့ အနီရောင်မျဉ်းပေါ်ကို ကြွပါ”
အမျိုးသမီးက သူ့ကို မေးခွန်းထုတ်သလို မျက်လုံးလေး လှန်၍ ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ကိုမြင့်မောင် ညွှန်ပြသည့် ကြမ်းပြင်တွင် မျဉ်းနီတားထားသည့် ဘက်ကိုလျှောက်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင်က နောက်ကလိုက်လာရင်း
“ပြည့်စွမ်းအား စက်ရုံမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ လုံခြုံရေးစည်းကမ်းတွေ အတိုင်း ကျုပ် ခင်ဗျားမှာ လက်နက် ဒါမှမဟုတ် ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေ ပါမပါစစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
ဟန်ကိုယ်ဖို့ဆိုပြီး ပြောလိုက်သည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားကြားတော့ လင်းလင်းထက်က မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကို မြင့်ရင်း (ဖောက်ခွဲပစ္စည်း .. ဟုတ်လား) ဟု မယုံသင်္ကာဟန်နှင့် မေးခွန်းထုတ်သည်။
“ဟုတ်တယ် .. မလင်းလင်းထက် .. နဲနဲတော့ ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကျုပ်တို့ စက်ရုံကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဗုံးခွဲမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက အမြဲတမ်းရနေလို့ပါ .. စိတ်မရှိပါနဲ့”
ရုပ်တည်တည်နှင့် ဖောလိုက်ရင်း ကိုမြင့်မောင် စိတ်ထဲ နတ်မင်းကြီးတွေ၊ နတ်မင်းလေးတွေကို အပြေးအလွှား တမိသည်။ ပြီးခဲ့သည့် တစ်ခေါက်တုန်းက ဒီဒိုင်ယာလော့နှင့် ပစ္စည်းလူကြုံလာပို့သည့် ကောင်မလေးကို ကောင်းကောင်းနှိုက်လိုက်ရသည်။ အခု ထိုကောင်မလေးထက် ဆယ်စနီးပါးသာမည့် လင်းလင်းထက်ကြောင့် သူ့စိတ်တွေက တအားကို တက်ကြွနေသည်။ ဘလောက်စ်ကျပ်ကျပ်ထဲမှ ရုန်းထွက်နေသလို ဆူဖြိုးစွာရှိနေသော နို့ကြီးတွေအား တအားစိုက်မကြည့်မိအောင် မနည်း သတိထားနေရသည်။
“အကြမ်းဖက်သမား ??” (လင်းလင်းထက်ရဲ့လှပစွာ ပြင်ဆင်ထားသော မျက်ခုံးမွေးတန်းလေးက ကော့တက်သွားသည်)
“ဟုတ်တယ် .. မလင်းလင်းထက် သိမှာပါ .. ဒီဟာ နူးကလီးယား ပါဝါပလန့်ဆိုတော့လေ”
“အော် .. ဒီလိုလား” (ကိုမြင့်မောင်အပြောကို လင်းလင်းထက်က လက်ခံလိုက်ဟန်ရှိသည်)
သူ့အကြံအောင်မြင်တော့မည်ဆိုပြီး ရင်ထဲ အပျော်ကြီးပျော်နေသည့် ကိုမြင့်မောင် အင်္ကျီလက်နှစ်ဖက်ကို အနည်းငယ် မတင်ရင်း လင်းလင်းထက်နားဆီသို့ တိုးလာသည်။ သူ့အပြုအမူကို ကြည့်ရင်း လင်းလင်းထက်က လက်ဝါးလေးဖြန့်၍ ထောင်ပြသည်။
“ခန .. ဟို .. ဟိုလေ .. သတ္တုရှာဖွေရေးစက်လား .. အဲဒါမျိုး .. လက်ကိုင်နဲ့ဟာ မရှိဘူးလား”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အကြည့်က ခပ်လှမ်းလှမ်းက နံရံတွင် ချိတ်ထားသော လက်ကိုင်နှင့် သတ္တုရှာဖွေရေးစက် (Metal Detector) ဆီသို့ အကြည့်ရောက်သည်။ သူမြင်သလို လင်းလင်းထက်ကလည်း မြင်နေမှန်း သိသည်။ သို့သော် အခုအချိန်မှတော့ သူ မလျှော့နိုင်ပါ။ ဒီလောက် မောင်းတင်ထားပြီးမှတော့ ရအောင်ကို ကြိုးစားမှ ဖြစ်မည်။ ခပ်တည်တည်နှင့်ပင်
“ဒါပေမယ့် အဲဒီဟာက လောလောဆယ် ပျက်နေလို့ .. Manually ပဲ ကျုပ်ရှာရမှာ .. အဲဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ မလင်းလင်းထက်ကို အထဲ ဆက်ဝင်ခွင့်ပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး”
“အိုး .. ဒါဖြင့် ပြီးတာပဲလေ .. ရှာတော့” (လင်းလင်းထက်က ပုခုံးတစ်ဖက် တွန့်ပြသည်)
“ကျေးဇူးပြုပြီး မလင်းလင်းထက် .. လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ထားပေးပါ” (စွင့်ကားနေသည့် တင်သားတွေကို မျက်စိကစားရင်း ကိုမြင့်မောင် နောက်ဘက်ကနေ ချဉ်းကပ်သည်)
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က အရင်ဆုံးအနေနှင့် ဆန့်တန်းထားသည့် လင်းလင်းထက်ရဲ့ လက်ဖျားလေးများကို ဟန်ကိုယ့်ဖို့ ဆိုပြီး စစမ်းသည်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုမြင့်မောင် ကိုင်တွယ်ကြည့်ချင်သည်က ဒီနေရာတွေ မဟုတ်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဆူဖြိုးမောက်ထွက်နေသည့် နေရာနှစ်နေရာ .. အရှေ့ဘက်ရှိ မို့ဝန်းနေသည့် နို့လုံးကြီးတွေနှင့် နောက်ဘက်ပိုင်းရှိ တင်းမာမောက်တက်နေသည့် တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီးများကိုသာ။
ကိုမြင့်မောင် လက်နှစ်ဖက်က သူမရဲ့ လက်တွေကနေတဆင့် နံစောင်းနှစ်ဖက်ထံသို့ ဆင်းသက်လာသည်။ ရင်ဘတ်နေရာကို အဖြတ်တွင် နို့အုံတွေရဲ့ အရင်းပိုင်းကို ဘရာပေါ်မှ အနည်းငယ်စမ်းမိသည်။ သူ့လက်က မဆိုစလောက်လေး တန့်ခနဲ ဖြစ်သည်။ ပြီးမှ ခါးသွယ်သွယ်လေးဆီသို့ ဆက်သွားပြီး တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို မသိမသာစမ်းရင်း ပေါင်တန်တွေအား ခပ်မြန်မြန်ပွတ်ကြည့်သည်။
စကပ်စလွတ်နေသည့် ခြေတန်ဖြိုးဖြိုးများအား ကိုမြင့်မောင်လက်က စမ်းသပ်သလိုနှင့် အသာအယာကိုင်တွယ်ပေမယ့် လင်းလင်းထက်ထံမှ တစ်စုံတစ်ခု ထူးခြားဟန်မပြပါ။ ဘာအဝတ်အစားမှ ဖုံးကွယ်ထားသည် မဟုတ်လို့ ဒီနေရာတွေက စမ်းသပ်ဖို့ မလိုမှန်း လူပြိန်းတစ်ယောက်တောင် သိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သူမကတော့ ဘာဆိုဘာမှ မပြောပါ။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်သည့် အနေအထားနှင့် ရှိနေသော ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးလေး မသိမသာလှန်ကြည့်သည်။ လင်းလင်းထက်က ခြေတန်နှစ်ဖက်ကို မဆိုစလောက် ကားထားသဖြင့် သူ့နေရာက ကြည့်လျှင် ဝင်းမွတ်နေသည့် ပေါင်တန်များရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို မြင်နေရသည်။ ကိုမြင့်မောင် သူ့လက်တွေကို မီနီစကပ်တိုလေးအောက် ထိုးထည့်ပြီးသာ ပေါင်တန်အတွင်းသားတွေကို စမ်းသပ်ချင်တော့သည်။ မဖြစ်သေးဘူး .. မြင့်မောင် .. လောဘမကြီးစမ်းနဲ့ .. အဓိက တားကတ်နေရာပဲ သွားစမ်းပါ …။
ခြောက်သွေ့လာသည့် သူ့နှုတ်ခမ်းအား လျှာဖြင့်သပ်ရင်းမှ ကိုမြင့်မောင် သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို စကပ်အောက်နားစပေါ် တင်လိုက်သည်။ အပေါ်ဘက်သို့ မသိမသာ ရွှေ့ သွားရင်း တင်သားအိအိကြီးများ ထိမိသည်တွင် လက်ဖြင့် ညှစ်ကြည့်သည်။ လင်းလင်းထက်က နောက်ဘက်လှည့်ပြီး သူ့ပါးများ ဖြန်းခနဲ ရိုက်လိုက်မလားလို့ ကိုမြင့်မောင် ထင်ထားပေမယ့် ထိုသို့ မဖြစ်ပေ။ ငြိမ်ခံနေသည့် လင်းလင်းထက်ကြောင့် ကိုမြင့်မောင် အတင့်ရဲလာပြီး နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ဖင်သားကြီးတွေကို ပြောင်လက်နေသည့် စကပ်ပေါ်မှ ညှစ်ကာကိုင်သည်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုးတွေ .. လက်ထဲ စီးနေတာပဲ … ကျန်းမာရေးကောင်းလှချည်လား ..
လင်းလင်းထက် ခေါင်းက နောက်ဘက်သို့ စောင်းငဲ့ကြည့်လာသဖြင့် ကိုမြင့်မောင် သူ့လက်တွေကို တင်ပါးတွေပေါ်မှ ကမန်းကတန်းရုတ်ရင်း ဆင်ခြေပေးလိုက်သည်။ လင်းလင်းထက်က သူ့ကို ဘာမှ မပြောဘဲ ရှေ့ဘက် ပြန်လှည့်သွားသည်။ ဒီလိုပြန်လှည့်သွားလို့သာ တော်တော့သည်။ မဟုတ်လျှင် ဘောင်းဘီအောက်မှ ခပ်ဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေသည့် လီးကို လင်းလင်းထက် တွေ့သွားမှာ သေချာလှပါသည်။
ဘောင်းဘီသားကို မတရားကန်ထောက်နေသည့် လီးအား နေရာ အမြန်ပြန်ချပြီး ကိုမြင့်မောင် လင်းလင်းထက်ရဲ့ နောက်ဘက်သို့ သိသိသာသာ ကပ်လိုက်သည်။ သူ့နှာဝနှင့် လင်းလင်းထက်ရဲ့ ဦးခေါင်းက နီးကပ်သွားရာ သင်းပျံ့ သည့် မွှေးရနံ့ကို နီညိုရောင်ဆိုးထားသည့် ဆံနွယ်ပျော့ပျော့လေးတွေထံမှရသည်။ မသိမသာ ခိုးရှူလိုက်ရင်း ကိုမြင့်မောင် နောက်ဆုံးပစ်မှတ်ကို ရအောင် စကားဆိုသည်။
စကားဆုံးသည်နှင့် ကိုမြင့်မောင် လက်နှစ်ဖက်က လင်းလင်းထက်ရဲ့ နို့ကြီးများကို နောက်ဘက်မှနေ၍ ပင့်ကာ ကိုင်လိုက်သည်။ လင်းလင်းထက် ကိုယ်ကလေးက မဆိုစလောက် တွန့်သွားသည်။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ရာတော့ ထုတ်ပြောခြင်း မရှိ။ ကိုမြင့်မောင်အတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့။ သူ့လက်က နို့အုံတွေရဲ့ အောက်ပိုင်းကို စမ်းကာ ကိုင်ထားရင်းမှ မသိမသာ လက်ကိုဖြန့်လိုက်သည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ နို့ကြီးတွေက တကယ်ကို ကြီးမားလှသည်။ ကိုမြင့်မောင် လက်ဝါးဖြန့်ပြီး အုပ်ကိုင်သည့်တိုင် အကုန်လုံးကို မထိ။ အိအိစီးစီး ရှိသည်ကလည်း တကယ်ကို ရှိလှသည်။ အောက်ခံဘရာကလည်း lace အမျိုးအစား ဖြစ်ပုံရသည်။ မာခေါက်ခေါက် မဟုတ်ဘဲ ခပ်ပျော့ပျော့အသား ဖြစ်သဖြင့် နို့အုံသားတွေကို အဝတ်မပါဘဲ ကိုင်နေရတာနှင့် မခြား။ နို့သီးခေါင်းလေးများတောင် စမ်းမိသေးသည်။
အလိုမကျဟန်ဖြင့် လှမ်းပြောလိုက်မှုကြောင့် အတွေ့နောက်ကောက်ကောက်ပါနေသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စိတ်ကူး ဆပ်ပြာဗူးဗောင်းလေး ပေါက်သွားရှာသည်။ နို့အုံပေါ် တင်ထားသည့် သူ့လက်တွေကို မဖယ်ချင်ဖယ်ချင်နှင့် လွှတ်လိုက်ရသည်။
“ရှင် မသိပေမယ့် ကျမ သိတယ် .. အထဲမှာ နို့ကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိဘူးးး ” (လင်းလင်းထက်က မကြည်သလို မျက်ထောင့်နီနှင့် ကြည့်ရင်း ပြန်ဖြေသည်)
“အော် .. ဟုတ်ဘူးလေ .. ကျုပ်က သေချာအောင် ပြောတာပါ .. တတ်နိုင်ရင် ဘလောက်စ်ကို နဲနဲဖွင့်ပြပါလား”(ကိုမြင့်မောင်က မချိုမချဉ်ရုပ်နှင့် ရှင်းပြသည်)
“ကဲ .. ဒါပဲမှတ်လား .. ရှင်တို့ လုံခြုံရေးစနစ်ကလဲ လွန်လွန်းတယ်”
ဘဝင်မကျဟန်ဖြင့် လင်းလင်းထက် ပြောလိုက်ပေမယ့် ကိုမြင့်မောင် အဆိုအတိုင်း လိုက်လျောစွာဖြင့် သူမရဲ့ ဘလောက်စ်အင်းကျီ အပေါ်ပိုင်းက ကြယ်သီးနှစ်လုံးကို စဖြုတ်သည်။ နို့ကြီးတွေက ဆူဖြိုးလှသည့်အပြင် တင်းကျပ်စွာ စည်းနှောင်ထားခြင်း ခံရရာ ကြယ်သီးပြုတ်သွားသည်နှင့် ပြိုးခနဲ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မျက်လုံးများ ပုဇွန်တစ်ကောင်လို ပြူးကျယ်သွားသည်။ တံတွေးကို ဂလုခနဲတောင် မျိုချမိသလား မသိ။
“နဲနဲ စမ်းကြည့်မယ် ဗျာ .. အထဲမှာ ဗုံးတွေဘာတွေ ရှိနေမှာစိုးလို့”
“ဘာ !!! .. တော်ပီ .. ဘာမှ မရှိဘူးဆိုတာ အရှင်းကြီး ရှင်မြင်နေတာပဲ .. ကျမကို အထဲ ဝင်ခွင့်ပေးတော့ .. ချိန်းထားတာ နောက်ကျနေပြီ”
လင်းလင်းထက်က လေသံမာမာနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်လာသည့်အတွက် ကိုမြင့်မောင် အလျှော့ပေးလိုက်ရသည်။ တကယ်တော့ ဒီလောက်ထိ လှုပ်ရှားခွင့်ရသည်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရဦးမည် မဟုတ်လား။ သွားလို့ရပါပြီဆိုပြီး ခွင့်ပြုလိုက်သည်တွင် လင်းလင်းထက် သူ့ကို တစ်ချက်မျှ လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ ဓါတ်ခွဲခန်းဘက်သို့ ဦးတည်ကာ လျှောက်သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင်သာ လင်းလင်းထက်ရဲ့ လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် ယမ်းခါသွားသည့် တင်သားတွေကို ငေးမောရင်း ကျန်ခဲ့ရှာလေသည်။
ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီ ဂွကြားကို နင်းကန်၍ ထောက်နေသည့် လီးအား အဆင်ပြေအောင် ပြန်နေရာချရင်း ကိုမြင့်မောင် လုံခြုံရေးအခန်းထဲသို့ လေးကန်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် ပြန်ဝင်လာရှာသည်။ ကိုယ့်ခုံမှာကိုယ်ပြန်ပြီး ထိုင်ချလိုက်စဉ်တွင် မျက်စိက စားပွဲပေါ်ရှိ မော်နီတာများထံသို့ အကြည့်ရောက်သည်။ ထိုရောအခါ စက်ရုံအပြင်ဘက်ဝင်းကို ရိုက်ပြသော CCTV နှစ်ခုအား ပြသနေသည့် စကရင်ပေါ်တွင် ဘာမှ မပေါ်ဘဲ အဖြူအမည်း အစက်အပြောက်များသာ ပေါ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
“ဟ .. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ??”
အိမ်က တီဗီတွင် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လျှင် လုပ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း ကိုမြင့်မောင် လက်သီးဆုပ်ပြီး မော်နီတာကို ထုကြည့်သည်။ ပုံမှန်ဆို ဒါမျိုး ထုရိုက်လိုက်လျှင် မော်နီတာက တဂျီးဂျီးမြည်ပြီး မြင်ကွင်းက ပြန်ပေါ်လာတတ်သည်။ သို့သော် အခုတော့ ဒီလိုမျိုး မရ။ ငါလခွေး … သောက်ပြသနာပဲ …
မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး အပြင်ဘက်တွင် ပက်ထရိုလှည့်နေသော သစ်ထွန်းအား ဝေါ့ကီတော်ကီနှင့် ခေါ်ရန် ပြင်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် မိန်းတံခါးမကြီး ရှိရာသို့ ရိုက်ပြထားသည့် စီစီတီဗီ မြင်ကွင်းက ဖြတ်ခနဲ ပျောက်သွားပြန်သည်။
“စောက်ကျိုး .. နဲ!!”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ဆဲဆိုရေရွတ်သည့် အသံတောင် မဆုံးလိုက် .. ဂျိန်းဆိုသည့် အသံက ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်သည်။ ထိုအသံနှင့်အတူ မိန်းတံခါးမကြီးကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် သံလိုက်သော့ (Magnetic Lock) က ပျောက်သွားပြီး တံခါးကြီး ပွင့်ထွက်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် ဘာဖြစ်တာလဲလို့ ခေါင်းပြူပြီး အခန်းထဲက ကြည့်မည်အပြု တံခါးနောက်ကွယ်မှ ပေါ်လာသည့် လူနှစ်ယောက်ကြောင့် လန့်ဖြန့်သွားသည်။
“အိုး .. ရှစ် !!”
ဒရကြမ်းပြေးဝင်လာသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲတွင် ရှိနေတာက မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်သေနတ် တစ်လက်စီ။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ခေါင်းထဲတွင် အန္တရာယ်အချက်ပေး ခေါင်းလာင်းသံများ ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီးသည်။ ရုတ်တရက် ထူပူပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ။ သတိရလို့ ဘောင်းဘီတွင် ချိတ်ထားသည့် သေနတ်ကို ထုတ်မည်အပြု ပြောက်ကြားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော လက်နက်ကိုင် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်က လုံခြုံရေးအခန်းထဲ တမဟုတ်ချင်း ရောက်လာသည်။ သူ့အား သေနတ်တွေနှင့် ထိုးချိန်ရာ ကိုမြင့်မောင် အခန်းအလယ်ရှိ သံစားပွဲကြီး ဟိုဘက်ခြမ်းသို့ ဒိုင်ဗင်ပစ်ထိုးရင်း အမြန်ပုန်းလိုက်ရသည်။
“ဟေ့လူ .. မသေချင်ရင် သေနတ်ကို ချပြီး စားပွဲနောက်ကထွက်ခဲ့”
ခပ်မာမာနှင့် အမိန့်ပေးသည့် အသံက အခန်းထဲရောက်လာသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အနက် တစ်ယောက်ဆီမှ ထွက်လာသည်။ အသံလာရာသို့ မသိမသာ ချောင်းကြည့်တော့ ထိုအမျိုးသမီးသည် ရွှေအိုရောင် ဆံပင်နှင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာက တော်တော်ကိုချောပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ကိုလည်း ကိုမြင့်မောင် အန္တရာယ်ကြားမှ သတိပြုမိသေးသည်။
“နှစ်ခါ ပြောမနေဘူး .. အခု ချက်ချင်း ထွက်ခဲ့”
ညာဘက်ခြမ်းရှိ ရွှေအိုရောင် ဆံနွယ်ပိုင်ရှင်အား ရှိုးနေသည့် ကိုမြင့်မောင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ အသံထွက်လာရာသို့ လှမ်းကြည့်တော့ သူ ပုန်းနေရာ နေရာသို့ သေနတ်ပြောင်းနှင့် ချိန်ထားသည့် ရန်သူတော် အမျိုးသမီးနောက်တစ်ယောက်ကို တွေ့ပြန်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးကမူ ညာဘက်က တစ်ယောက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ခေါင်းကဆံနွယ်တွေကို အနီရောင်ဆိုးထားသည်။ ဆံပင်အရောင်သာ ဤသို့ကွဲပေမယ့် မျက်နှာပေါက်ကျပုံက နှစ်ယောက်စလုံး ခပ်ဆင်ဆင်ရှိလှသည်။ ရွှေအိုရောင်လိုပင် မိန်းမချောလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုထူးခြားတာက ထိုညီအစ်မလို နှစ်ယောက်သည် ခုနကတွေ့လိုက်ရသော လင်းလင်းထက်လို ရင်သားတွေ ထွားသည်။ ဝတ်ထားသည့် ပြောက်ကြားဝတ်စုံအောက်မှ မောက်ကာ ထွက်နေသည်။ နို့ကြီးဂိုဏ်းကများလား မသိ …။
“တောက် !! .. ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ် .. ချကွာ”
ဘာမဟုတ်သည့် မိန်းမနှစ်ယောက်ကို အရှုံးပေးရရင်ဖြင့် ရာဇဝင်ရိုင်းပေတော့မည်။ ကိုမြင့်မောင် မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပင် တွေးပြီး ပစ္စတိုသေနတ်ကို စားပွဲစွန်းပေါ် တင်သည်။ သို့သော် အမျိုးသမီးတွေက လျှင်လှသည်။ ပစ္စတိုပြောင်းဝ ပြူထွက်လာသည်နှင့် ရိုင်ဖယ်ခလုတ်ကို ဖြုတ်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ တဝေါဝေါ တဒိုင်းဒိုင်းနှင့် ကျည်ဆန်တွေက ကိုမြင့်မောင်ရှိရာ ပြေးဝင်လာသည်။ သူကွယ်ထားသည့် စားပွဲကြီးကို တဒေါက်ဒေါက်နှင့် မှန်သလို၊ စားပွဲပေါ်က စာရွက်တွေ၊ အခြားသော ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုလည်း ထိမှန်သည်။ အကုန်လုံး မွစာကျဲကုန်သည်။
ကိုမြင့်မောင် သူ့ပစ္စတိုကို တစ်ချက်ကလေးမှ ပစ်ချိန်မရ။ ခေါင်းတောင်မှ မပြူရဲဘဲ အသာဝပ်နေရသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ အခြေအနေ မဟန်မှန်းသိသဖြင့် ကိုယ်ကိုကုန်းပြီး နောက်သို့ အသံမကြားအောင် တစ်လှမ်းချင်း ရွှေ့ သည်။ ကိုမြင့်မောင် အကြံက သူ့နောက်တွင် ရှိနေသော မလွယ်ပေါက်ကနေ ဓါတ်ခွဲခန်းဘက်သို့ ပြေးရန်ဖြစ်သည်။
ရိုင်ဖယ်သံတွေ တဒက်ဒက်နှင့် ဆူညံနေသည်။ ဖင်တရွှေ့ ရွှေ့ နှင့် သွားနေသော ကိုမြင့်မောင် အပေါက်ဝနားသို့ ရောက်စပြုပြီ။ ဟိုဘက်ခြမ်းမှ အဆက်မပြတ်ထွက်နေသည့် ကျည်ဆံတွေ ခနရပ်သည်။ အခွင့်ကောင်းကို အသုံးချပြီး ပစ္စတိုဖြင့် ဆွဲပစ်ရင်း ပြေးမည်ပြုစဉ်တွင် နောက်ဘက်မှ စကားသံတစ်ခုကိုကြားရသည်။
“သေနတ်ချလိုက်စမ်း .. လူစွမ်းကောင်းကြီး”
အံ့သြတကြီးနှင့် ကိုမြင့်မောင် လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ လင်းလင်းထက်ကို ဒေါက်တာဝင့်သူနှင့် အတူ တွေ့ရသည်။ ရိုးရိုးတန်းတန်းတော့ မဟုတ်။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ လက်တစ်ဖက်အား နောက်ပြန်လိမ်ကာ ဖမ်းထားသလို၊ သူမရဲ့ လည်တိုင်အားလည်း ပစ္စတိုတစ်လက်နှင့် ထောက်ထားသည်။ လှပချောမွေ့သည် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ မျက်နှာလေးသည် သွေးဆုတ်ကာ ဖြူဖတ်ဖြူလျော် ဖြစ်နေသည်။
“ချလေ .. ဒေါက်တာဝင့်သူ သေသွားစေချင်လို့လား”
“အိုကေ .. အိုကေ”
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုမြင့်မောင်အား နှစ်ခါ မပြောလိုက်ရပါ။ ကိုင်ထားသည့် သေနတ်ကို ချက်ချင်း သူ့ရှေ့က ကြမ်းပြင်ပေါ် ချသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ခေါင်းပေါ်မြှောက်တင်ရင်း ပုန်းနေရာမှ ဖြေးညှင်းစွာ ထသည်။ လင်းလင်းထက် လက်ထဲက ပစ္စတိုရော၊ ပြောက်ကြားမနှစ်ယောက်ရဲ့ရိုင်ဖယ်များကပါ သူ့ကို သေချာစွာ ချိန်ထားသည်။
“ခင်ဗျားဆီမှာ ဘယ်လိုလုပ် သေနတ် ရှိနေတာလဲ”
သူ့အနားသို့ တိုးကပ်လာသည့် လင်းလင်းထက်အား ကြည့်ရင်း ကိုမြင့်မောင် နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် မေးမိသည်။ သို့သော် လင်းလင်းထက်ဆီမှ လှောင်ပြောင်ဟန်ဖြင့် ပြန်ဖြေစကားကို ကြားရသောအခါ သေစမ်းဟဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းကောင်းကြီး ကျိန်ဆဲမိသည်။
“ရှင် .. ကျမ လက်ကိုင်အိတ်ကိုမှ မရှာတာ .. ရှင့်လက်တွေရော .. မျက်လုံးတွေရော တခြားဟာနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာလေ”
စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားသည့် ကိုမြင့်မောင်အား လင်းလင်းထက်က မခိုးမခန့်နှင့်ကြည့်ရင်း သေနတ်ပြောင်းဖြင့် နံရံဘက်ဆီသို့ ပြသည်။ သူမလက်ဖြင့် ချုပ်ထားသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူအားလည်း ကိုမြင့်မောင်ရှိရာသို့ တွန်းထုတ်လိုက်သည်။ အခုလို ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်နေတာတောင် ကိုမြင့်မောင်သည်မူ ဗီဇကိုတော့ မဖျောက်နိုင်။ တွန်းလိုက်သည့်အရှိန်ဖြင့် ပုံပျက်ပန်းပျက် ရောက်လာသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်းထိန်းလိုက်သည်။ သူ့ရဲ့ လက်တွေက ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ တင်ပါးတွေနှင့် စက္ကန့်ပိုင်းလောက် မိတ်ဆက်သွားသေးသည်။
“နီနီ ကွန်ပျူတာကိုကြည့် .. ထိန်းချုပ်စနစ်ကို Disable လုပ် .. ၀ါဝါ ငါတို့ပစ္စည်းတွေ သွားယူ”
နီနီ ဆိုပြီး အခေါ်ခံရသည့် မိန်းမက ဆံပင်အနီရောင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ၀ါဝါကတော့ ရွှေအိုရောင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ နာမည်အရင်းတွေတော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါ။ ထို့အပြင် သူတို့သုံးယောက်တွင် လင်းလင်းထက်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ သူမထံမှ အမိန့်သံကြားသည်နှင့် ဟိုနှစ်ယောက်က ဟုတ်ကဲ့ .. မလင်းလို့ သံပြိုင်ဖြေပြီး ချက်ချင်းပင် လှုပ်ရှားကြသည်။ ၀ါဝါတစ်ယောက် အခန်းထဲက ပျောက်သွားပြီး နီနီက Main Computer ရှေ့တွင် ထိုင်ခုံကိုဆွဲ၍ ထိုင်သည်။
လင်းလင်းထက်က သူမလက်ထဲရှိ ပစ္စတိုသေနတ်ပြောင်းကို တည့်မတ်စွာ ချိန်ထားရင်း ကိုမြင့်မောင်ရှိရာသို့ တစ်လှမ်းချင်း တိုးကပ်လာသည်။ ပုံမှန်သာဆိုလျှင် မျဉ်းဖြောင့်တစ်တန်းတည်းပေါ် လျှောက်သလို ကနွဲ့ကလျနှင့် လျှောက်လာသည့် သူမရဲ့ အသွင်က ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ကာမစိတ်ကို နှိုးဆွမှာ အမှန်ပင်။ အခုတော့ မည်းပြောင်နေသည့် သေမင်းတမန် သေနတ်ပြောင်းဝကြောင့် ကိုမြင့်မောင် ကျောရိုးထဲ စိမ့်လာသလို ခံစားရသည်။
သေနတ်ပြောင်းဝကို သူ့နှလုံးသားနေရာ တည့်မတ်စွာ ချိန်ထားရင်း ကျန်သည့်လက်နှင့် လင်းလင်းထက်က ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မေးအား ပင့်၍ကိုင်သည်။ မေးခွန်းထုတ်သလို ကြည့်နေသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မျက်လုံးအိမ်တည့်တည့်ကို လင်းလင်းထက်က စိုက်ကြည့်ရင်း မေးစေ့ ကိုင်ထားသည့်လက်က သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ လျှောဆင်းသွားသည်။
“ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ကျမကတပြန် ရှင့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေ ရှိမလား စမ်းဦးမှ”
နွဲ့တဲ့တဲ့နှင့် ပြောလိုက်သည့် လင်းလင်းထက်စကားကြောင့် ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးသူငယ်အိမ်တောင် နဲနဲ ကျယ်ချင်သွားသည်။ လင်းလင်းထက် လက်က သူ့ဗိုက်ကို ကျော်ပြီး ဆီးစပ်ကို ဖြတ်ကာ ပေါင်ဂွကြားကို ဆုပ်ကိုင်လာသည်တွင်တော့ နှုတ်ကနေ အင်းခနဲပင် ထုတ်ညည်းဖြစ်သည်။
“အိုး … ဒီမှာ လက်နက်ကြီး ရှိနေတာပဲ .. ခိ ခိ”
ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်မှန်း မသိသည့် ရယ်သံနှင့် လင်းလင်းထက် ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး ရယ်နေသည်။ ကိုမြင့်မောင်ကတော့ လီးရော၊ ဂွေးဥတွေပါ မိန်းမချောတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း ခံရမှုကြောင့် ဘယ်လိုနေရမှန်း မသိ။ ကောင်းတာပဲ ပြောရမလား၊ နာတာပဲ ပြောရမလား မသိသည့် ခံစားချက်နှင့် နေရထိုင်ရခက်နေသည်။ လင်းလင်းထက်က သူမလက်ကို သူ့ဂွကြားမှ မခွာဘဲ ဆက်ကိုင်ထားရင်း တစ်ချက်နှစ်ချက် ဆုပ်ဆုပ်ညှစ်သည်။ စိတ်ထိန်းထားသည့်ကြားမှ ကိုမြင့်မောင် လီးက မာတက်လာသည်။
“မလင်း .. အခြေအနေ မကောင်းဘူး”
လင်းလင်းထက် လက်က သူ့လီးပေါ်မှ ရုတ်သွားပြီး နီနီကို လည်ကလေး စောင်းကြည့်ရင်း မေးသည်။ ကိုမြင့်မောင်အား သေနတ်ဖြင့် ချိန်ထားသည်ကိုတော့ မလွတ်။ ဒီအမျိုးသမီး ကြည့်ရတာ တကယ်ကို ၀ါရင့်သေနတ်သမား ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
“ကွန်ပူတာမှာ စကရင်ဆေ့ဗာတက်နေပြီ … ပတ်စ်ဝေါ့ ရမှ ဖြစ်မယ်”
လင်းလင်းထက် ခေါင်းက ကိုမြင့်မောင်ဘက် ပြန်လှည့်လာသည်။ မြွေဟောက်တစ်ကောင်လို အေးစက်စက်အကြည့်နှင့် သူ့ကို ကြည့်ရင်း သေနတ်ပြောင်းကို ခါပြသည်။
“ပြောစမ်း .. ပတ်စ်ဝေါ့က ဘာလဲ”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အဖြေကြောင့် လင်းလင်းထက် မျက်နှာက ကြောက်စရာကောင်းအောင် တင်းမာသွားပြီး သေနတ်ပြောင်းဝနှင့် သူ့နဖူးကို လှမ်းထောက်သည်။ အေးစက်နေသည့် သံပြောင်းရဲ့ အတွေ့ကြောင့် နဲနဲမာချင်သလို ဖြစ်သည့် သူ့လီးက အလိုလို ပျော့ကျသွားသည်။ ကိုမြင့်မောင် စိတ်ထဲ ဖျားဖျားလို့ အလိုလို ရေရွတ်မိသည်။
“ကျုပ် တကယ် မသိဘူး”
ဖန်းခနဲ သေနတ်သံများ ထွက်လာပြီလားလို့ ကိုမြင့်မောင် ကြောက်ကြောက်ရွံ့ ရွံ့ တွေးသည်။ တော်သေးသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ မောင်းကွင်းကို ကိုင်ထားသည့် လက်ညိုးကလေး လှုပ်ရှားသွားတာ မတွေ့။ မကျေမချမ်း တောက်တစ်ချက် ခေါက်ရင်း သေနတ်ပြောင်းကို နဖူးမှ ပြန်ခွာသည်။ ကိုမြင့်မောင် သက်ပြင်းတစ်ခုကို မသိမသာ အသံမမြည်အောင် မှုတ်ထုတ်ရသည်။
“နီနီ .. မင်း hack လို့ မရဘူးလား .. မင်းပြောတော့ ပတ်စ်ဝေါ့အတွက် ပြသနာ မရှိဘူးဆို”
နီနီက မျက်နှာမကောင်းစွာဖြင့် ခေါင်းခါပြသည်။
“Screensaver တက်နေရင် ကျမ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး .. bypass tools တွေလဲ သုံးလို့မဖြစ်ဘူး .. ပုံမှန်ဆို ဒီဟာက မိနစ်၉၀ ဘာမှမထိဘဲ မကိုင်ဘဲနေမှ ပေါ်ရမှာ .. ရထားတဲ့ သတင်းအရဆိုရင် အစောင့်တွေက အနည်းဆုံး နာရီဝက်တစ်ခါတော့ system diagnostics ဖြစ်ဖြစ်၊ camera test ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကိုလုပ်ရမှာ .. အခုတော့ ဒီငတတွေက ညတစ်ပိုင်းလုံး ကွန်ပျူတာကို ထိတောင်မှ မထိဘဲ ထိုင်နေတာ ဖြစ်ရမယ်”
နီနီရဲ့ဖြေရှင်းချက် အဆုံးတွင် လင်းလင်းထက်က စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စွာနှင့် ကိုမြင့်မောင်ကို လှမ်းကြည့်သည်။ ကိုမြင့်မောင်ကတော့ သူ့မဟုတ်သလိုပင် လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြန့်ကာ ထောင်ပြီး ပုခုံးကို တွန့်ပြသည်။
“system ကို ပြန် restart လုပ်လို့ မရဘူးလား .. နီနီ” (လင်းလင်းထက်က အကြံပေးပြန်သည်)
“မရဘူး မလင်း .. shutdown လုပ်လိုက်တာနဲ့ emergency team ချက်ချင်းရောက်လာလိမ့်မယ်”
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စွာနှင့် လင်းလင်းထက် ကျိန်ဆဲရင်း သေနတ်ပြောင်းကို ကိုမြင့်မောင်ဘက်ကနေ ဘေးချင်းယှဉ်ကာရှိနေသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူဘက်လှည့်သည်။
“ပတ်စ်ဝေါ့ ပေး ..”
“ကျုပ် တကယ်မသိတာ … ခင်ဗျား ဘော်ဒါပြောသလိုပဲ .. ကျုပ် shift တစ်ခုလုံး ကွန်ပျူတာကို ထိတောင် မထိဘူး” (နီနီရဲ့ စကားကို နင်းပြီး လိုက်ပြောနေပေမယ့် ကိုမြင့်မောင်စိတ်ထဲ ဒေါက်တာဝင့်သူအတွက် အတော်ကို စိတ်ပူနေပါသည်)
“ပတ်စ်ဝေါ့ ပေးမလား .. သူ့ကို အသေခံမလား” (လင်းလင်းထက်ဆီမှ တင်းမာသည့် ခြိမ်းခြောက်သံကို ထပ်ကြားရသည်)
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မျက်နှာအား လင်းလင်းထက်က စူးစမ်းသလို သေချာစွာ စိုက်ကြည့်သည်။ သူမစိတ်ထဲ သူ့စကားအား ယုံရမလား၊ မယုံရမလား ဝေခွဲမရ။ ထို့နောက်တွင်တော့ လင်းလင်းထက် တစ်ခုခုကို စဉ်းစားသလို ငြိမ်သွားသည်။ ခနနေတော့ လက်ထဲကိုင်ထားသည့် သေနတ်ပြောင်းအား အောက်ဘက်သို့ နိမ့်ချလိုက်သည်။ သူမနောက်ဘက်ရှိ စားပွဲပေါ်တွင် သေနတ်အား လှမ်းတင်လိုက်ပြီး ကိုမြင့်မောင်နားသို့ မခို့တယို့နှင့် ချဉ်းကပ်လာသည်။ မျက်နှာသည်လည်း အစောကလို မဟုတ်ဘဲ ပျော့ပြောင်းနေပြီး၊ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကမူ စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်လို ညို့ မြူနေသည်။ သူမ စိတ်ထဲ ကိုမြင့်မောင်အား အကြမ်းကိုင်လို့ မရလို့ တွက်လိုက်ဟန်ရှိသည်။
လူချင်းထိစပ်ဖို့ ဘယ်လောက်မှ မလိုတော့သဖြင့် ကိုမြင့်မောင်စိတ်တွေ တော်တော်လှုပ်ရှားသွားရသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ထင်ရှားသော အမှတ်အသားဖြစ်သည့် နို့အုံကြီးတွေကို ငုံ့မကြည့်ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးနေရသည်။ ဒါတောင် မျက်ဆံလေးက အောက်ဘက်သို့ ရွေ့ ပြီး ကြည့်မိသေးသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ဘလောက်စ်က အဖြူရောင်အပါးစားမို့ အထဲမှာ ရှိနေသည့် အနီရောင်ဘရာလေးရဲ့ ပုံရိပ်က ထင်းခနဲ ဖြစ်နေသည်။ မောက်မို့နေသော နို့ကြီးတွေကမူ တကယ်ကို အားရစရာကောင်းအောင် ထွားလှသည်။ ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးအိမ်ကို ကမန်းကတန်း အပေါ်ဘက်ရောက်အောင် ပြန်တင်ရသည်။ သို့သော် လင်းလင်းထက်က သူ့မျက်နှာကို တရံမပြတ် လိုက်ကြည့်နေလို့ ကိုမြင့်မောင် အတွေးက ဘယ်ကိုရောက်နေမှန်းသိသည်။ နှုတ်ခမ်းထောင့်လေး ကွေး၍ ဆက်ဆီကျစွာ ပြုံးသည်။
လင်းလင်းထက်ရဲ့ မျက်နှာက ကိုမြင့်မောင်ရှိရာသို့ တိုးကပ်လာပြီး သူ့ပုခုံးကိုကျော်ကာ နားရွက်တစ်ဖက်ဆီသို့ သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေး ရောက်ရှိသွားသည်။ လူချင်းစတွေ့တုန်းက ရခဲ့သည့် သင်းပျံ့ သည့်မွှေးရနံ့က ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အနံ့အာရုံကို ပြန်လည်၍ နှိုးဆွလာပြန်သည်။ လင်းလင်းထက် နှာတံဝမှ လေနွေးနွေးလေးက သူ့နားဆီသို့ လာထိသည်။ ပြီးနောက် ခုနတုန်းက ခြိမ်းခြောက်သံများနှင့် တခြားစီဖြစ်သည့် နူးညံ့ငြင်သော လေသံနှင့် သူ့အား ဖြောင်းဖြသည်။
“ကျမတို့နဲ့ ရှင်လက်တွဲပါလား .. ရှင့်အတွက် အကျိုးမယုတ်စေရပါဘူး”
လင်းလင်းထက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးများက သူ့လည်ဂုတ်ရှိ ဆံစအချို့ ကို နမ်းရှိုက်သလို ထိတွေ့သွားသောအခါ ကိုမြင့်မောင် တကိုယ်လုံး ရှိန်းခနဲ ဖိန်းခနဲဖြစ်သည်။ လူချင်း ပူးကပ်နေတာ မဟုတ်သည့်တိုင် ကြီးမားဆူဖြိုးလှသည့် နို့ကြီးတွေကြောင့် သူ့ရင်ဘတ်နှင့် လင်းလင်းထက်ရဲ့ စနေနှစ်ခိုင် ထိပ်ပိုင်းက ထိတွေ့သလို ဖြစ်နေရာ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်များ တစတစ ဝေ၀ါးလာသည်။ တကိုယ်လုံးရှိ သွေးတွေက ပေါင်ဂွကြား၌ တစတစ သွားစုလေရာ လီးက အလိုလိုတင်းမာလာသည်။
“ကျမ ဘယ်လောက်အထိ လိုက်လျောနိုင်တယ်ဆိုတာ ရှင် မသိချင်ဘူးလား”
နားနားကပ်ပြောရင်း လင်းလင်းထက်က ထပ်မံဆွဲဆောင်ပြန်သည်။ ဒါတွင်မက သူမရဲ့ လက်တစ်ဖက်က မနက်ခင်းတုန်းကမှ ရိတ်ထားသဖြင့် စိမ်းမြနေသည့် ကိုမြင့်မောင် ပါးတစ်ဖက်ကို ငြင်သာစွာ ပွတ်ပေးသည်။ သင်းပျံ့သည့် ရနံ့လေး ထွက်နေသည့် နှုတ်ခမ်းနီတာရဲလေးနှင့်လည်း ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မေးအောက်ပိုင်းကို ဖွဖွလေး ပွတ်နမ်းသည်။ သူမအနမ်းက သူ့အရေပြားကို နူးညံ့လှသည့် ငှက်မွှေးတစ်ချောင်းနှင့် ပွတ်ပေးနေသလို ဖြစ်စေသည်။
လင်းလင်းထက်ရဲ့ ခြေတန်တစ်ဖက်က ရှေ့ကိုရောက်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားထဲ တိုးဝင်လာသဖြင့် အဝတ်မဲ့နေသည့် သူမရဲ့ သလုံးသားလေးနှင့် ပွတ်မိပြန်သည်။ ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ သူ့လီးကို ထိန်းထားလို့ မရတော့။ မာတောင်တက်လာသည့် လီးက သိသိသာသာပင် ယူနီဖောင်းရှေ့ မှာ ဖုဖုကြီး ဖြစ်နေသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ပေါင်ခြံကို ထိကပ်ချင်ဟန်နှင့် အတင်းကုန်းထနေသည်။
“ပတ်စ်ဝေါ့လေး ပြောပါလား ရှင်ရယ်”
နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် နှစ်ကိုယ်ကြား လေသံဖြင့် မေးလိုက်ယုံမက၊ လင်းလင်းထက်ရဲ့ လျှာနီတာရဲလေးက ချွန်ထွက်လာပြီး ကိုမြင့်မောင့်ရဲ့ နားသံသီးလေးကို လှမ်းလျက်သည်။ တောင်းတင်းဆူဖြိုးသည့် သူမကိုယ်ကလည်း ထိုအချိန်၌ ကိုမြင့်မောင်ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နှင့်နေပြီမို့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းချင်း ပူးကပ်နေရာ လီးက သူမရဲ့ အင်္ဂါစပ်အား လုံးလုံးကို ထောက်နေသည်။
နှုတ်မှညည်းသံလိုလို ဘာလိုလိုနှင့် မသဲမကွဲအသံပြုရင်း ကိုမြင့်မောင် တစ်စုံတစ်ခု ပြောမည့်ဟန်ပြုသည်။ထိုစဉ်တွင် အခန်းရဲ့ အပြင်ဘက်နေရာကနေ ဝုန်းဆိုသည့် အသံတစ်ခုကို ကြားရသည်။
လင်းလင်းထက်ကိုယ်က ကိုမြင့်မောင်ထံမှ ချက်ချင်းကွာသွားပြီး အသံလာရာသို့ အံ့သြတကြီး လှည့်ကြည့်သည်။ သူမနည်းတူ အံ့အားသင့်သည့် မျက်လုံးများဖြင့် ကြောင်၍ အခန်းဝမှ တန်ပြန်ကြည့်နေသူကား တခြားမဟုတ်။ ပက်ထရိုလှည့်ရန် ထွက်သွားသည့် သစ်ထွန်းဖြစ်သည်။ အခန်းထဲမှ ရှိရှိသမျှ လူတွေ ထင်မှတ်မထားသည့် အဖြစ်ကြောင့် ကြက်သေသေပြီး စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ကြောက်စရာကောင်းအောင် တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
ပထမဆုံး အသိဝင်လာသူက လင်းလင်းထက် ဖြစ်သည်။ စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ပစ္စတိုကို ကောက်ယူသည်။ လင်းလင်းထက်နှင့် ပြိုင်တူလှုပ်ရှားသူက နီနီ။ သူမရဲ့ ရိုင်ဖယ်ပြောင်းက သစ်ထွန်းရှိရာ မြောက်တက်သွားသည်။
ရုတ်ချည်း အပေါက်ဝက နံရံကို ကွယ်ပြီး ထိုင်ချလိုက်သည့် သစ်ထွန်းရှိရာသို့ ကျည်ဆံတွေ ပလူပျံသလို တိုးထွက်သွားသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူ ကြောက်အားလန့်အားနှင့် အားခနဲ အော်ပြီး သူမလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် နားတွေကိုပိတ်သည်။ သူမရဲ့ အော်သံကြောင့် အသိဝင်လာသူက ကိုမြင့်မောင်။ တခြားဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ဖမ်းဆွဲပြီး နောက်ဘက်ရှိ မလွဲပေါက်ရှိရာသို့ တအားကုန်ပြေးသည်။ လင်းလင်းထက်တို့က သစ်ထွန်းရှိရာသို့ မဲနေသဖြင့် ကိုမြင့်မောင်တို့နှစ်ယောက်အား သတိမမူမိချေ ..။
တဒိုင်းဒိုင်း တဒက်ဒက်နှင့် မြည်နေသော သေနတ်သံများက တရုတ်နှစ်ကူးတွင်ဖောက်သော ဗျောက်အိုးများထက်ပင် အဆက်မပြတ် ဆူညံစွာ ပေါ်ထွက်နေသည်။ သစ်ထွန်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့မည်ဆိုတာကို ကိုမြင့်မောင် မစဉ်းစားရဲပါ။ သူ့ကို ကယ်ဖို့ဆိုတာကလည်း သေချာစွာ လေ့ကျင့်ထားသည့်ဟန် ရှိသော အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ယောက်နှင့် ယှဉ်၍ ကိုမြင့်မောင် လူစွမ်းကောင်း မလုပ်ရဲချေ။ သစ်ထွန်းတစ်ယောက် ကံကောင်းပါစေဟုသာ ဆုတောင်းရင်း ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ လက်ကို မလွှတ်တမ်းဆွဲကာ ဓါတ်ခွဲခန်းများရှိရာဘက်သို့ တဟုန်ထိုးပြေးသည်။
ကော်ရစ်တာ တလျှောက်ပြေးလာရင်းမှ နောက်ထပ် သံတခါးနှစ်ချပ်ကို တွန်းဖွင့်လိုက်သောအခါ ဓါတ်ခွဲခန်း ရှိရာသို့ ရောက်သည်။ မျက်စိကို အမြန်ကစားရင်း ပုန်းကွယ်ဖို့ရာ ရှာနေစဉ်မှာပင် သူတို့ ပြေးလာရာ ကော်ရစ်တာဘက်မှ အသံများကို ကြားရသည်။
“မြန်မြန် .. ကိုမြင့်မောင် ..”
သူ့ထက်စာလျှင် ဘယ်နေရာ ဘာရှိလဲဆိုတာ သိနေသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူက အခန်းတစ်ခုကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။ Storage Room ဆိုပြီး တံခါးဝရှိ Label က ပြနေသည်။ ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူ အကြံအတိုင်း စတိုခန်းထဲ ပြေးဝင်သည်။ အဆင်ပြေချင်တော့ အခန်းထဲတွင် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းများဖြင့် ရှုပ်ပွနေသည်။ ပစ္စည်းပစ္စယတွေနှင့် မတိုက်မိအောင် သတိထားလျှောက်ရင်း အခန်းထောင့်နားရှိ သံဗီဒိုတစ်လုံးဆီသို့ သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင်က ဗီဒိုတံခါးကို ဆွဲဖွင့်ရင်း ဒေါက်တာဝင့်သူအား အထဲသို့ တွန်းထည့်သည်။ ပြီးတော့ သူက နောက်ကလိုက်ဝင်သည်။
“အသံမထွက်နဲ့ .. တိတ်တိတ်နေ”
ဒေါက်တာဝင့်သူအား သတိပေးပြောရင်း သူမလက်တစ်ဖက်အား နောက်ဖက်မှ ထိန်းကိုင်ထားသည်။ သံဗီဒိုက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းဖြစ်သည့်အတွက် လူနှစ်ယောက်စာအတွက် နေရာက သိပ်မရှိ။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ နောက်ပိုင်းနှင့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ရှေ့ပိုင်းက အလိုလိုထိပြီး ပူးကပ်သွားသည်။ သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဒါကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်နိုင်အား။ အပြင်ဘက်တွင် ပေါ်လာသည့် အသံများကိုသာ နားစွင့်နေမိသည်။
တကယ်လည်း ကိုမြင့်မောင်တို့ စတိုခန်းထဲ ဝင်ပုန်းပြီး သိပ်မကြာလိုက်။ သေနတ်သံများ ရပ်စဲသွားပြီး ကော်ရစ်တာတလျှောက် ခြေသံတွေ ကြားလာရသည်။ ခနအကြာတွင် စတိုခန်းတံခါးက ဝုန်းခနဲ ပွင့်သွားသည်။ လူတစ်ယောက် အခန်းထဲ ဝင်လာသလို ထင်ရသည်။ ဗီဒိုထဲပုန်းနေသည့် ကိုမြင့်မောင်တို့ အသက်တောင် ပြင်းပြင်း မရှူရဲ။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ကိုယ်လေးလေးက မသိမသာလေး တုန်ခါနေပြီး၊ ကိုမြင့်မောင်ကမူ နားသယ်စပ်တွင် ချွေးစေးများပြန်လာသည်။
သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက် ကံကောင်းပါသည်။ ဝင်လာသူက စတိုခန်းထဲတွင် ပစ္စည်းတွေ ရှုပ်ပွနေလို့လား မသိ။ သေချာစွာ စစ်ဆေးကြည့်မနေတော့ဘဲ ခဏအကြာတွင် ပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်။ အသံတွေ ပြန်လည် တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင်တို့ကမူ မလှုပ်မယှက်နှင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပူးကပ်စွာ ရှိနေထားဆဲပင် ..။
အချိန်အနည်းငယ် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် သောကက အနည်းငယ်လျော့ပါးသွားသည်။ ထိုရောအခါ သူ့ဆီးစပ်နှင့် ပူးကပ်နေသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ တင်ပါးကြီးများကို သတိပြုမိသွားသည်။ သူသတိပြုမိသလို ဘယ်လိုကြောင့်မှန်းမသိ အခုအချိန်ထိ မာန်ကျခြင်း အလျဉ်းမရှိသည့် လီးကြီးကလည်း သိနေသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ တင်ပါးဝိုင်းကြီး နှစ်ဖက်ကြားရှိ အဓိကနေရာကို သွား၍ ထောက်ထားသည်။
ဒေါက်တာဝင့်သူကိုယ်ပေါ်တွင် Lab coat တော့ ရှိနေပါသည်။ ကုတ်အင်္ကျီအောက်တွင် business skirt ကလည်း တစ်ထပ် ထပ်ရှိနေသည်သာ။ သို့သော်လည်း အမြဲတမ်း သွားရည်ကျခဲ့ရသော စိတ်ကူးထဲက နတ်မိလေးရဲ့ တင်ပါးဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကို လီးနှင့်ထောက်ထားရသည် ဆိုသော အတွေးကြောင့် ကိုမြင့်မောင် ဘယ်လိုမှ စိတ်ထိန်းလို့မရ။
ဗီဒိုကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ကပ်သတ်၍ နေနေရသည့်တိုင် သူ့ခါးကို မတော်တဆနှယ် တွန့်မိသည်။ ထိုရောအခါ လီးတန်က ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ဖင်ကြားတလျှောက် လျှောတိုက်ပြေးသည်။ အဝတ်တွေသာ ခံမနေလျှင် သေချာပေါက် သူ့လီးက ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ အဖုတ်အား ပြေးထောက်ပေလိမ့်မည်။ ကိုမြင့်မောင် သွေးတွေ ဆူပွက်လာသည်။ အခုမှ သတိပြုမိသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ကိုယ်မှ ပျံ့ လွင့်လာသော ရေမွှေးနံ့က သူ့nerve ကြောတွေကို အစွမ်းကုန် နှိုးဆွနေသည်။
“ကျမတို့ တံခါးဖွင့်လို့ ရပြီလား ကိုမြင့်မောင်”
နောက်ထပ် ငါးမိနစ်ခန့်မျှ ကြာသောအခါ သူမရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးများအား သိသိသာသာ ပွတ်တိုက်နေသည့် လီးကြောင့် ဒေါက်တာဝင့်သူ အနေရခက်လာဟန် ရှိသည်။ အောင့်အီး၍ မနေနိုင်တော့သည့်အဆုံး သူမမျက်နှာလေးကို နောက်ဘက်သို့ အသာငဲ့စောင်း၍ မေးသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ နှာဝမှ ထွက်သော လေနွေးနွေးများက ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ပါးတစ်ဖက်ကို ကျီစယ်သလိ်ုဖြစ်သည်။
ကိုမြင့်မောင်အနေနှင့်ကလည်း ဒေါက်တာဝင့်သူ ငြိမ်ခံနေလို့သာ ကဲရတာ ဖြစ်သည်။ သူမက အခုလို ထုတ်မေးလာမှတော့ သူလည်းပဲ ဆက်မပွတ်ရဲပါ။
“ရပြီ ထင်တာပဲ” (ဝမ်းနည်းသံတစ်ဝက်နှင့်ပြောရင်း ကိုမြင့်မောင် သဘောတူလိုက်ရသည်)
နှစ်ယောက်သား သံဗီဒိုထဲမှ အသံမကြားအောင် တိတ်တဆိတ် ထွက်လာကြသည်။ အပြင်ဘက်တွင် ဘာသံမှ မကြားရသည့်တိုင် သူတို့နှစ်ယောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့် အရဲမစွန့်ရဲပါ။
“အပြင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ်” (ဒေါက်တာဝင့်သူကပဲ အပြင်ဘက်ကို နားစွင့်သလို လုပ်ရင်း စကားစသည်)
“အင်း .. ဒါနဲ့ .. ဒေါက်တာဝင့်သူ .. အထဲမှာ ထိမိသလို ဖြစ်နေတာ ဆောရီးပဲ … ခင်ဗျားလဲ မြင်မှာပါ .. ဟိုအမျိုးသမီးက ကျုပ်ဟာကို ရေလည်ကိုင်ပြီး နှိုက်နေတာကို”
သူ့အပြစ်လွတ်အောင် ပြောရင်း မတရားကို တင်းမာတက်နေသည့်လီးကြောင့် ကိုမြင့်မောင် သူ့ဂွကြားကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ထားရသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူက သူ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်း စိတ်ပျက်သည့် အမူအရာ ပြသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အောက်ပိုင်းကို တစ်ချက်သာကြည့်ပြီး ဆက်ကြည့်မနေတော့ဘဲ မျက်နှာလွှဲထားသည်။
“ရတယ် ကိုမြင့်မောင် .. အခု ကျမတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ” (စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းအောင် ဒေါက်တာဝင့်သူကပင် အစဖော်ပေးမိသည်)
ကိုမြင့်မောင်ခမျာလည်း တကယ်တော့ တော်တော်သနားဖို့ ကောင်းသည်။ တစ်ညလုံး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင် သူ့လီးက ဓါးစားခံလို ဖြစ်နေသည်။ တစ်ခါလည်းမဟုတ်၊ နှစ်ခါလည်းမဟုတ် အခြေအနေပေးလို့ လီးထောင်လာခဲ့သည်ဖြစ်ရာ အခုကျတော့ ရုတ်ချည်းပြန်ကို မကျတော့။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလည်း နဂိုကတည်းက ဝတ်တတ်သည့်သူ မဟုတ်လို့ မာတောင်နေသည့် လီးထိပ်က အရည်ကြည်များတောင် ထွက်နေရှာသည်။ ဘောင်းဘီသားကို အတင်းထောက်ထားသည်ဖြစ်ရာ ဆီးစပ်ရှေ့ ပိုင်းတွင် စိုတိုတိုတောင် ဖြစ်နေသည်။ နေရထိုင်ရ ခက်နေရာ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘဲ လီးကို အသာပွတ်မိသည်။
“ရှင် .. ဘာလုပ်နေတာလဲ … ရှင် security guard မဟုတ်ဘူးလား .. ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား”
“ကျုပ် မရတော့ဘူး ဒေါက်တာဝင့်သူ .. လီးကို အပြင်ထုတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်” (ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူ ပြောသမျှကို ဂရုမစိုက်နိုင်အားဘဲ လီးကို ဘောင်းဘီထဲမှ ဆွဲထုတ်ဖို့ပြင်သည်)
ဒေါက်တာဝင့်သူ မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူးနှင့် အမြန်ကန့်ကွက်၏။ သို့သော် သူမစကားတွေက ကိုမြင့်မောင်အတွက် မထိရောက်တော့ပါ။ ကိုမြင့်မောင်က ယူနီဖောင်း ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး အထဲမှ တင်းမာနေသည့် လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ မျက်လုံးများသည် မြွေဟောက်တစ်ကောင် ပါးပျဉ်းထောင်သလို ဖြောင်းခနဲ ထွက်လာသည့် လီးတန်ကြီးကြောင့် အစောကထက် မျက်လုံးပိုပြူးသွားရရှာသည်။
ကိုမြင့်မောင်သည် ရုပ်ကတော့ ပုံမလာပေမယ့် လူကတော့ လုံခြုံရေးအစောင့် ဆိုသည့်အတိုင်း ခပ်တောင့်တောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်ရှိသည့် ဗလတွေထက် ပိုတောင့်သည့် အရာက သူ့လီးဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လီးက အတော်ကို ကြီးသည်။ ထို့အပြင် အသားညိုသည့်လူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လီးကြတော့ ညိုယုံမက မည်းနက်သည့်အထဲ ရောက်နေသည်။ သို့သော် သူမည်းပုံက အရောင်မွဲမွဲနှင့် မည်းတာမဟုတ်၊ စိုပြေဝင်းပြီး မြင်လိုက်သည့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အား ရင်ထဲတွင် ဖိုလှိုက်သွားစေသည့် အမည်းမျိုး။
အခုလို လီးတစ်ချောင်းလုံး ဆွတာခံရပြီး ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် တင်းမာနေသည့် အချိန်တွင်တော့ သူ့လီးက လီးမွေးတွေကြားထဲမှ ရှင်းရှင်းကြီး ထိုးထောင်ပြီး ထွက်နေလေရာ ဒုံးကျည်တစ်စင်းနှင့်တောင် တူလှသည်။ လီးထိပ်အရေးပြားကလည်း ဖြတ်ထားသည် ဖြစ်၍ အရည်ကြည်စို့ပြီး မာလုံးနေသည့် ထိပ်ဖူးက ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးကို ရေဆေးထားသလို ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ပါးစပ်လေး ၀ိုင်းစက်ကာ ဟသွားသည်။
“ရှီး .. အခုမှပဲ နေရာထိုင်ရ အဆင်ပြေတော့တယ်” (ကိုမြင့်မောင်ကတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသူလို ထုတ်ဖော်ညည်းရင်း လေပူတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်)
“ရှင် ဘာမှ မတွေးနိုင်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်လောက်တယ်” (အစောပိုင်းတုန်းက ကိုမြင့်မောင် အောက်ပိုင်းကို မကြည့်ဖြစ်အောင် မျက်နှာလွှဲထားသလောက် အခုတော့ ဒေါက်တာဝင့်သူ မျက်ဝန်းတွေက လီးတန်ကြီးဆီမှ မခွာနိုင်ပါ)
“ဒီအခြေအနေက လွတ်အောင် ကျုပ် ကြိုးစားပါ့မယ် .. ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ်မှာ ကျုပ်ဟာကြီး ငြိမ်သွားအောင် လုပ်မှ ဖြစ်မယ်”
“ရှင် ဘာပြောချင်တာလဲ” (ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားကို ခပ်ရေးရေးဖြင့် ထောက်ခံမိသည့်တိုင် ဒေါက်တာဝင့်သူ သေချာတော့ နားမလည်ချေ)
“ကျုပ် လီးအထောင်သားနဲ့ လျှောက်ပြေးနေလို့မှ မဖြစ်တာ ဒေါက်တာရဲ့ ”
“ဒါဆိုလည်း ရေအေးနဲ့ လောင်းလိုက်လေ” (တတ်သမျှ မှတ်သမျှ အကြံပေးကြည့်ပေမယ့် ကိုမြင့်မောင် ဆိုလိုချင်တာ ဒီလိုမဟုတ်မှန်း ဒေါက်တာဝင့်သူ ထင်မြင်မိသည်)
“ရေအေး လိုက်ရှာဖို့ အချိန်မှ မရှိတာ .. သူတို့တွေ အချိန်မရွေး ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်”
“မှန်တယ် ဒေါက်တာ .. ဒါပေမယ့် ကျုပ်ဟာကျုပ်ဆို ကြာနေလိမ့်မယ်”
ကိုမြင့်မောင်က မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့သြသလို ဖြစ်နေသူ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ မျက်နှာ လှလှလေးကို ကြည့်၍ ခေါင်းခါပြသည်။
“ဒေါက်တာ စုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ မြန်လိမ့်မယ်”
“စုပ်ပေးရမယ် !! ကိုမြင့်မောင် .. ရှင်ခေါင်းမှ ကောင်းသေးရဲ့ လား .. ကျမ ရှင့်လီးကို ဘယ်လိုမှ မစုပ်ပေးနိုင်ဘူး”
ပထမဦးဆုံး အနေဖြင့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ လေသံက မြင့်တက်သွားပြီး ကိုမြင့်မောင်အား ကက်ကက်လန် ရန်တွေ့သည်။ ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူအား ပြောရခက်လိုက်တာဟူသော သဘောဖြင့် ခေါင်းကို ယမ်းခါရင်း သက်ပြင်းမောတစ်ခု မှုတ်ထုတ်သည်။ ပြီးမှ
“ဒီမှာ ဒေါက်တာဝင့်သူ .. ခင်ဗျား ခေါင်းကရော ကောင်းသေးလား .. ကျုပ်တို့မှာ အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ ခင်ဗျား အသိသားပဲ .. ဟိုဟာမတွေက ကျုပ်ဆီက ပတ်စ်ဝေါ့မရမခြင်း လိုက်ရှာနေမှာ .. အချိန်မရွေး ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ် .. ကျုပ်လီးကိစ္စကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် မဖြေရှင်းနိုင်ရင် သောက်ပြသနာက အကြီးအကျယ် တက်မှာပဲ .. ဟုတ်တယ် .. ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်း ကျုပ်ဖာသာကျုပ် ဂွင်းတိုက်လို့ရတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဂွင်းတိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါ့မလား .. ကျုပ်က ဘာကို အာရုံသွားပြုရမှာလဲ .. အဲဒါကြောင့် ကျုပ်က အဆင်ပြေအောင် ခင်ဗျားကို စုပ်ပေးဖို့ ပြောတာ .. ကျုပ်မှာ ကျုပ်အကြောင်းနဲ့ကျုပ် ရှိတယ် .. ခင်ဗျား ကျုပ်အကြံထက်ကောင်းတာ စဉ်းစားမိရင်ပြော .. မဟုတ်ရင်တော့ လီးစစုပ်တော့ဗျာ .. အချိန်ကြာတယ်”
တစ်ခုခု ပြောချင်ဟန်ဖြင့် ဒေါက်တာဝင့်သူ ပါးစပ်ဟလိုက်ပေမယ့် သူမ ဦးနှောက်ထဲတွင် ကိုမြင့်မောင်အား တုံ့ပြန်ဖို့ ဘာစကားမှ ရှာလို့မရ။ ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် လီးထောင်နေပေမယ့် ဒီလောက် အကျိုးအကြောင်းကျလှသည့် စကားရှည်ကြီးကို ပြောသွားဖိုတော့ မခက်ခဲလှသည်ကို ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ PhD ဦးနှောက်က မတွေးမိလိုက်ပါ။ သူမတို့ ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲကြောင့် Over stressed ဖြစ်ပြီး ကျောချမ်းအောင် သွေးပျက်နေရာ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားက ဆီလျော်သည်ဟု မြင်မိသည်။ သို့သော် ဘာမှလဲ မပတ်သက်ဖူးသည့် သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လီးကို စုပ်ရမှာတော့ ဒေါက်တာဝင့်သူ သဘောမကျ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သေမင်းနှင့်လက်တစ်လုံးခြား ဖြစ်နေသည့် အခုအခြေအနေတွင်တော့ ဒေါက်တာဝင့်သူအတွက် တခြားဘာမှ အရေးမကြီးပါချေ။ သူမလို ငယ်ငယ်လှလှ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် ဒီအသက်အရွယ်နှင့်တော့ မသေချင်သေးပါ။
“ကောင်းပြီ .. ကိုမြင့်မောင် .. ကျမ ရှင့်လီးကို စုပ်ပေးမယ် .. ဒါပေမယ့် ကျမ တစ်ခုမှာထားမယ် .. ဒီကိစ္စကို ကျမရည်းစား ပြန်မကြားစေနဲ့ .. ရှင် အဲဒါတော့ လိုက်နာပါ”
“အာ .. စိတ်ချ .. မဝင့်သူ”
ဝမ်းသာလုံးဆို့သွားရှာသည့် ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူအား ကတိအမြန်ပေးလိုက်ရင်း သူတို့ရောက်နေသည့် အခန်းကို ပတ်ချာလည်ကြည့်သည်။ စတိုခန်းဆိုသည့် ထုံးစံအတိုင်း ပစ္စည်းပစ္စယတွေနှင့် ရှုပ်ပွနေသည်။
“ဒီနေရာပဲ အဆင်ပြေမယ် မဝင့်သူ … စိတ်မရှိနဲ့ .. ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်လိုက်နော်”
မတတ်တာသည့် အဆုံး ဒေါက်တာဝင့်သူ ကိုမြင့်မောင် ပြောသည့်အတိုင်း သူ့ရှေ့က သမံတလင်းပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရသည်။ တချိန်လုံး ထောင်မတ်နေဆဲ ဖြစ်သော လီးတန်ကြီးက သူမမျက်နှာနှင့် တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိ။ အကြောတပြိုင်းပြိုင်းထနေသည့် လီးတန်ကြီးရဲ့ ပုံကိုကြည့်ကာ သူမစိတ်တွေ ထွေပြားစပြုသည်။
“ကဲ .. မဝင့်သူ ရေ.. ကျုပ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကောင်းအောင် စုပ်ပေးတော့ .. Clock is ticking နော် ဒေါက်တာ”
အနည်းငယ် ရွှင်မြူးနေဟန်ရှိသော ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားအဆုံးတွင် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက အလိုလို ဟသွားရှာတော့သည်။
ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းဆီလေး ဆိုးထားသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး အကျယ်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ဟသွားပြီး လီးထိပ်ကို ငုံလိုက်သည်နှင့် ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် မအောင့်နိုင်ပဲ အီးခနဲ အော်ကာ ညည်းမိသည်။ ထိုအသံကြောင့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ခေါင်းက ပြန်ဆုတ်သွားပြီး သူ့အား ဒူးထောက်ထားရာမှ မော်ကြည့်သည်။ စတိုခန်းတံခါးဝကို မျက်စပစ်ကာ ပြရင်း လေသံတိုးတိုးနှင့် ကျိတ်ဆူသည်။
“တိုးတိုး လုပ် ကိုမြင့်မောင် … အပြင်ဘက်ကနေ အသံတွေ ကြားမှဟုတ်ပယ့် ဖြစ်နေမယ်”
“ဆောရီး .. မဝင့်သူ .. ရတယ် .. ပြန်စုပ် .. ကျုပ်သတိထားပါ့မယ်”
ဒေါက်တာဝင့်သူ ဘာရယ်ကြောင့်မှန်း မသိ။ ကိုမြင့်မောင်ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်တောင် ဒိုင်းခနဲ ထိုးမိသည်။ ပြီးမှ မျက်နှာရှေ့ ခြမ်းကို ဖုံးသလို ဖြစ်သွားသည့် ဆံနွယ်တစ်ချို့ ကို နားရွက်နောက်ဘက်သို့ လက်ကလေးတစ်ဖက်ဖြင့် သပ်တင်လိုက်ပြီး လီးထိပ်ဖူးကို ပြန်ငုံသည်။ ကိုမြင့်မောင် လီးက သံချောင်းတစ်ချောင်းလိုပင် တင်းမာနေသည်မို့ လက်ဖြင့်ထိန်းပြီး ပင့်ထားစရာတောင် မလို။ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ မျက်နှာ ရှေ့ကို တိုးသွားတိုင်း လီးထိပ်ဖူးက ပါးစပ်ထဲကို မဆန့်မပြဲ ဝင်လာသည်။ သူမရဲ့ လျှာနှင့်လည်း လီးထိပ်အောက်ခြေလုံးပတ်ကို အလိုလို ပွတ်ကာ ဆွဲဖြစ်သည်။
“ကောင်းတယ် .. ဝင့်သူ .. စုပ် .. စုပ် … တအာား ကောင်းတယ်ကွာ .. ရှီး”
ကိုမြင့်မောင် တစ်ယောက် အသက်ရှူမြန်လာသည့် ကြားမှ ဒေါက်တာဝင့်သူအား လေသံတိုးတိုးဖြင့် လှမ်းအားပေးသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူက နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းစေ့ထားရင်း သူမခေါင်းကို နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် စတင်၍ လုပ်သည်။ လီးတန်ကြီးက နူးညံ့လှသည့် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို ပွတ်တိုက်၍ အဝင်အထွက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်တိုင်းလည်း ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ လျှာကလေးက လီးဒစ်ရဲ့ အောက်ခြေ မေးသိုင်းကြိုးနေရာကို မပြတ်တမ်း လျက်ပေးသည်။
ဘေးတိုက်သာကြည့်မည်ဆိုလျှင် လှပသည့် ဒေါက်တာမလေးရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်သည် တရံမပြတ်စုပ်ပေးနေမှုကြောင့် ချိုင့်ခွက်၍ ဝင်နေသည်ကို တွေ့ရမှာဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင် အနေနှင့်ကတော့ မကြုံဖူးအောင် ကာမအရသာ အကောင်းစားကို ခံစားနေရသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူတစ်ယောက် ဒီလောက်တောင် လီးစုပ်တတ်လိမ့်မည်ဟု သူဘယ်လိုမှ ထင်မထားပါ။ အစောတုန်းက ဒေါက်တာဝင့်သူ လီးစုပ်ပေးမှုကို ဇိမ်နှင့်ခံဖို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် ခံစားမှုအရှိန်က မြင့်တက်လာသောအခါ ကိုမြင့်မောင် ငြိမ်ငြိမ်နေလို့ မရတော့ပါ။
ပါးဖောင်းဖောင်းလေး နှစ်ဖက် လီးကိုအားနှင့် စုပ်လိုက်တိုင်း ခွက်ဝင်သွားခြင်း၊ လီးတန်လုံးပတ်အား လျှာလေးဖြင့် ပွတ်ကာလျက်ပေးခြင်း။ တစ်ချက်တစ်ချက်တွင် အာခေါင်သားနုနုလေးများနှင့် လီးထိပ်ဖြင့် ထိုးမိခြင်း .. စသည့် အချက်များအပြင် ဒေါက်တာဝင့်သူလို နုနယ်သော မိန်းမချောတစ်ယောက် လီးအရင်းကိုတောင် ထိန်းမကိုင်ဘဲ လက်အလွတ်ဖြင့် လီးစုပ်ပေးနေသည်ဆိုသော အချက်ပါ ထည့်ပေါင်းလိုက်တော့ ကိုမြင့်မောင်လို ရိုးရိုးသာမန် ညစောင့်တစ်ယောက်အဖို့ အရှင်လတ်လတ် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်နေသည်နှင့် မခြားပေ။
“တောက် .. အား .. ရှီး .. ဝင့်သူ .. မင်းပါးစပ်က စုပ်အားကောင်းလှချည်လား”
လီးကိုဝင်နိုင်သမျှ ဝင်အောင် ဆထက်တပိုး စုပ်ပေးနေရာ တစ်ချိန်တွင် သူ့ဆီးစပ်နှင့် ဒေါက်တာဝင့်သူ နှာတံချွန်လေး ထိမိမလို ဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင် သူ့လီးတန်မည်းမည်းနက်နက်ကြီး တိုးဝင်နေသည့် ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းလေးကို ကြည့်ရင်း အံကိုကြိတ်ကာ ညည်းမိသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူကတော့ တပြွတ်ပြွတ် အသံလေးတွေ အစီအရီထွက်လာအောင်ကို ဆက်၍ စုပ်ပေးနေသည်။ တဖြေးဖြေးနှင့် သူမပါးစပ်ထဲမှ တံတွေးရည်များ စီးကျလာသည်။ မေးစေ့ချွန်ချွန်လေးကို ဖြတ်၍ တစ်ချို့ က ရင်ဘတ်နေရာသို့တောင် ရောက်သည်။
လီးစုပ်တာ အရှိန်ရပြီး တော်တော်လေး ခရီးရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒေါက်တာဝင့်သူက ရုတ်ချည်း သူမပါးစပ်ကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရာ လီးတန်ကြီးက ပြွတ်ခနဲ မြည်ပြီး အပြင်သို့ ထွက်ကျသည်။ လုံးပတ်တလျှောက် တံတွေးရည်များဖြင့် စိုရွှဲနေလို့ ဆီလိမ်းထားသလို ဖြစ်ရာ မဲပြောင်ပြီး တက်နေသည်။ မြင်ရတာနှင့် အသည်းရော အဖုတ်ရော ယားစရာကောင်းနေသည်။
“ဒီအတိုင်းဆို ကြာလိမ့်မယ် ကိုမြင့်မောင် .. ရှင် မြန်မြန်ပြီးချင်ရင် ကျမပါးစပ်ကို လိုးပါလား”
ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ စကားကို ကိုမြင့်မောင် ကျေညက်စွာ မစဉ်းစားမိခင်မှာ လီးက အလိုလို တုံ့ပြန်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ နှစ်ချက်ဆက်တိုက် ထခုန်သည်။ ထို့အတူ နှုတ်မှလည်း (ရှီး)ဆိုပြီး ကျေနပ်အားရစွာ ညည်းသံထွက်သည်။ တကယ်လည်း ကိုမြင့်မောင်သာ နှလုံးရောဂါအခံရှိပါက အခုအချိန်တွင် အပျော်လုံးဆို့ပြီး ဂန့်သွားမလားတောင် မသိ။ ဒီလိုမျိုး ဒေါက်တာဝင့်သူထံမှ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားသည့် ဆုလာဒ် မဟုတ်ပါလား ..။
ကိုမြင့်မောင်လက်နှစ်ဖက်က ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ခေါင်းကို ညှပ်ကာကိုင်လိုက်သည်။ အားယူကာ ရှေ့ သို့ဆွဲလိုက်သည်နှင့် ဒေါက်တာဝင့်သူက ပါးစပ်ကို အကျယ်ဆုံးဟကာ လီးတန်ကို ဖမ်းငုံသည်။ လီးထိပ်ဖူးက နှုတ်ခမ်းသားနုနုလေးကို ပွတ်တိုက်ကာ ကျော်ဖြတ်ပြီး အာခေါင်ထဲထိ တောက်လျှောက်ဝင်သည်။ လေလုံအောင် တင်းတင်းစေ့ပြီး ငုံထားသည့်ကြားမှ (အု .. အိ) ဆိုသည့် အသံလေးများ ဒေါက်တာဝင့်သူ နှုတ်ဖျားမှ ထွက်ကျလာသည်။
“ရှစ် .. ကောင်းလိုက်တာ .. ဝင့်သူ .. မင်း ပါးစပ်က တအားကောင်းတာပဲ”
ကျေနပ်အားရစွာ ညည်းရင်း ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ခေါင်းကို ညှပ်ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကို အားရပါးရ လိုးဆောင့်သည်။ ကြည့်ရတာ ဒေါက်တာဝင့်သူသည် လီးတစ်ချောင်းလုံး ကုန်အောင် စုပ်ပေးခြင်း (ဒိသရုတ်)နှင့် မစိမ်းသည့် သဘောရှိသည်။ လည်ချောင်းသားလေးတွေကို ဖြေလျှော့ပေးထားရာ ကိုမြင့်မောင် လီးက အရင်းအထိရောက်အောင် သူမပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်နေသည့်တိုင် အသက်ရှူမှားတာမျိုး မဖြစ်။ လီးအဝင်တွင် အသက်ကို အောင့်ထားပြီး၊ လီးအထွက်တွင် အသက်ကို ရှူသည်။ လျှာဖျားလေးနှင့် သူ့လီးတန်အောက်ပိုင်းအား ပွတ်ဆွဲနေမှုအားလည်း မပျက်စေရ။
ဒီတော့ ကိုမြင့်မောင်လို ဆက်စ်ကိစ္စ ပြတ်လတ်နေသူအတွက် ဘာခံနိုင်တော့မည်နည်း။ ကွန်ကရစ်တွေကို ထိုးသည့် jackhammer တစ်ချောင်းနှယ် သူ့လီးအား သဘောထားကာ ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ခေါင်းကို ညှပ်ဆွဲရင်း အားကုန်လိုးသည်။ လေးငါးချက်လောက် အပြင်းထန်ဆုံး ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်တွင် လီးတန်တလျှောက် သွေးကြောကြီးတွေ ဖောင်းတက်ကာ လှုပ်ရှားပြီး အကြမ်းပတမ်းကို ပြီးသည်။ လီးထိပ်မှ အရင်ဆုံး ထွက်လာသည့် သုတ်ရည်တွေက ပူနွေးပြီး ပြစ်ချွဲနေသည်။ အရှိန်ကလည်း တအားကို ပြင်းထန်သည်။
ဒေါက်တာဝင့်သူတစ်ယောက် ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် ပြီးခါနီးနေမှန်း သိလိုက်ပေမယ့်၊ ခုလိုမျိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မထားပါ။ ထို့ထက်ဆိုးသည်က လီးချောင်းအကြီးကြီးနှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာ ရှိနေသည့် ဂွေးစေ့လုံးကြီးများထဲတွင် လရည်တွေ ဒီလောက်များများ ရှိနေလိမ့်မည်ဟုလည်း တွက်ဆမထားမိ။ ဒီတော့ သူမခမျာ အငိုက်မိသလို ဖြစ်သည်။ လည်ချောင်းထဲ ရောက်နေသလို ဖြစ်သည့် ထိပ်ဖူးထဲမှ လရည်တွေ တဖျောဖျောနှင့် ထွက်လာသည်တွင် ဘာမှလုပ်လို့ မရဘဲ မြိုသာချလိုက်ရသည်။ မဟုတ်လျှင် choke ဖြစ်ပြီး သူမ မျက်ဖြူလန်ဖို့သာ ရှိသည်။
“ကောင်းတာ .. ဝင့်သူရယ် .. အဆင်ပြေသွားပြီ .. ကျေးဇူးပဲ”
တစ်စက်မကျန် လရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်ပြီးတော့မှ ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ခေါင်းအား ဖမ်းကိုင်ထားမှုကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ တချိန်လုံး တောက်လျှောက်မာနေသည့် လီးက အခုတော့ သူ မဟုတ်သလိုပင် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျကာ ခပ်ပျော့ပျော့ ဖြစ်သွားသည်။ ဒေါက်တာဝင့်သူက သူမပါးစပ်နှင့် မေးစေ့တလျှောက် ပေကပ်နေသည့် အရည်များအား လက်ခုံဖြင့် သုတ်ရင်း ထိုင်နေရာမှ ထရပ်သည်။
“ကျမ အကြွေး ရှင့်ပေါ်မှာ ရှိသွားပြီနော် ကိုမြင့်မောင်”
ဒေါက်တာဝင့်သူက ဟန်အမူအရာပိုပိုနှင့် မျက်စလေးဝင့်ကာ ပြောလိုက်ရင်းမှ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို လျှာဖြင့် အပေါ်အောက်တစ်ချက်စီ သပ်သည်။ ပါးစပ်ထဲတွင် အခုထက်ထိ မပျောက်နိုင်သေးသည့် ငံကျိကျိအရသာကို ပျောက်အောင်လည်း ကြိုးစားပြီး တံတွေးမျိုချသည်။ သူမရဲ့ ထိုအပြုအမူက ကိုမြင့်မောင်အတွက်တော့ အရမ်းကို ဆက်ဆီကျလွန်းသည်။ လီးတောင်မှ ပြန်ထောင်ချင်လာသလို ဖြစ်ရာ အမြန်ပင် ဘောင်းဘီထဲထည့်ပြီး ဇစ်ပြန်ဆွဲကာ ဝှက်လိုက်ရသည်။
“ရှင် သေချာမှတ်ထားနော် .. ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူမှ သိလို့ မဖြစ်ဘူး” (ဒေါက်တာဝင့်သူက လီးမစုပ်ပေးခင်က ပြောခဲ့သောစကားကို ထပ်မံ၍ emphasize လုပ်ပြီး သတိပေးပြန်သည်)
“အာ .. စိတ်ချ .. ဝင့်သူ” (မြန်မြန်ဆန်ဆန် တုံ့ပြန်လိုက်ယုံမက ကိုမြင့်မောင်က ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာဖြင့် သူ့ပါးစပ်ကို ဇစ်ဆွဲပြီး ပိတ်သည့်ဟန် လုပ်ပြသည်)
“အိုကေ .. ဒါဆို အခု ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ??” (ဒေါက်တာဝင့်သူက ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စပ်ဖြီးဖြီးပုံစံကို ဂရုစိုက်မနေတော့ဘဲ လက်ရှိရင်ဆိုင်ရမည့်ကိစ္စကိုသာ ဦးတည်လိုက်သည်)
“လွယ်တော့ မလွယ်ဘူး .. ဝင့်သူ .. လူအင်အားချင်းပဲ စဉ်းစားကြည့် .. သူတို့ကသာနေတယ် .. နောက်ပြီး သူတို့မှာက သေနတ်တွေနဲ့ .. ကျုပ်တို့မှာ ဘာမှ မရှိဘူး”
“ဒါဆို ရင် .. ဘယ် .. ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ” (ဒေါက်တာဝင့်သူက အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်မိသွားပြီး အနည်းငယ် တုန်လှုပ်သည့် လေသံဖြင့် မေးမိသည်)
ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူအား မတုံ့ပြန်နိုင်အားသေးဘဲ အခန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်မိသည်။ ထိုရောအခါ အခန်းထောင့်တွင် တစ်ပေကျော်ကျော်ခန့် ရှည်မည့် သံပိုက်လုံးတစ်ချောင်းကို သွားတွေ့သည်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားကောက်ယူလိုက်သည်။ ပြီးမှ ဒေါက်တာဝင့်သူ ဘက်လှည့်ကာ သံပိုက်လုံးကို ထောင်ပြသည်။
“ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက် အရင်ဆုံး လူခွဲကြရအောင် .. ကျုပ် တိတ်တိတ်လေး လုံခြုံရေးအခန်းကို ပြန်သွားမယ် .. ဟိုမှာ ကျုပ်ဘော်ဒါ ကျန်ခဲ့သေးတယ် .. အခြေအနေကြည့်ပြီး လှုပ်ရှားရမှာပဲ .. စက်ရုံထဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်နေတယ်လို့ Emergency Team ကိုလည်း ရအောင် အကြောင်းကြားရမယ် .. မဝင့်သူ ဒီမှာပဲ နေခဲ့ပေါ့”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့reasonable ဖြစ်လှသော အကြံကို ဒေါက်တာဝင့်သူ ခပ်သွက်သွက်ပင် သဘောတူလိုက်သည်။ သူမစိတ်ထဲ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ကိုမြင့်မောင်အား အထင်ကြီးသလိုလို၊ အားကိုးသလိုလို ဖြစ်မိသည်။ အနည်းဆုံးတော့ လီးစုပ်ပေးလိုက်ရတာ အကျိုးမယုတ်ဟု ခံစားမိသည်။
“သွားပြီး မဝင့်သူ .. သေချာ ပုန်းနေဦး”
“ဟုတ် .. ဂွတ်လပ်ခ် ကိုမြင့်မောင်”
လက်ထဲတွင်ရှိသော သံပိုက်လုံးအား တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ရင်း ကိုမြင့်မောင် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ချောမောလှသည့် မျက်နှာလေးနှင့် တပ်မက်ဖွယ်ကိုယ်လုံးလေးအား နောက်ဆုံးတစ်ချက် သေချာကြည့်သည်။ သူ့အိပ်မက်ထဲက နတ်သမီးလေးဖြစ်ရှာသည့် ဒေါက်တာဝင့်သူရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲတွင် သူ့လရည်တွေ တပြုံလိုက် ရှိနေသည်ဆိုသောအချက်ကို ကိုမြင့်မောင် အခုထက်ထိ မယုံရဲသေးပါ။ သွားသုံးဆယ့်နှစ်ချောင်း နီးပါး ပေါ်လာသည်အထိ ဟီးခနဲ တစ်ချက် ရယ်မိပြီးနောက် ဒေါက်တာဝင့်သူအား ကျောခိုင်းလိုက်သည်။ စတိုခန်းတံခါးကို ဖြေညင်းစွာ တွန်းဖွင့်၍ အပြင်ထွက်သည်။ ကော်ရစ်တာသို့ ရောက်သောအခါ လုံခြုံရေးအခန်းရှိရာဘက်သို့ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနှင့် ခြေလှမ်းတွေကို ဦးတည်လိုက်သည်။
ဇာတ်လမ်းဆက်မရေးခင် စကားလေး နည်းနည်းတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ကျနော် အပြင်မှာ အလုပ်များနေတဲ့အပြင်၊ ပင်လယ်ထဲက စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်စရာ တစ်ခုကြောင့် စာရေးဖို့တောင် စိတ်ပျက်သွားမိတာ အမှန်ပါ။
ကျနော် ဒီလိုမျိုး စာတွေရေးတာ တခြား ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ် ကျနော့်စာဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်စေဖို့ (သာယာစေဖို့) တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ကျနော်က ဤကဲ့သို စိတ်ထားတဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ညီမျှတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပဲ ပြန်ရချင်ပါတယ်။
ကျနော် အလုပ်နဲနဲ အားရင် ပင်လယ်ထဲတော့ ဝင်ဝင်ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းရေးတဲ့ဆီတော့ မရောက်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရောက်တိုင်း အပေါ်က နောက်ဆုံးပို့စ်က သန့်ကျူပေးထားတဲ့ စာရင်းကို အမြဲတမ်း ကလစ်ကြည့်မိတယ်။ စိတ်ထဲကလည်း တွေးတယ်။ အော် .. ဒီလူတွေ .. ကလောင်အသစ်တွေ၊ အဟောင်းတွေ မခွဲဘဲ ကိုယ်စာဆက်ရေးဖို့ အားပေးထားတာပဲလို့။ အဲဒါလေး တွေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်လေးကိုယ် ပြန်တည်ဆောက်ပြီး ဇာတ်လမ်းရေးတဲ့ဘက်ရောက်အောင် အားစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
စာမရေးတဲ့ ပထမတစ်ရက်မှာ တစ်ရာကျော်လောက်ရှိတဲ့ မင်ဘာတွေက အားပေးခဲ့တယ်။ ဒုတိယတစ်ရက်မှာ ၁၅ဝကျော်ပြီး၊ တတိယတစ်ရက် အကူးမှာ ၁၇၀ နီးပါးတောင် ရှိနေပြီ။ ဒီနေ့မနက်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုပေါကြီးတောင် ကျနော် ရှောက်ဘောက်မှာ အော်ထားတာ တွေ့လို့လား (ဒါမှမဟုတ်) ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဖတ်ပြီးလို့လားတော့ မသိဘူး။ ၁ရဝမြောက် မင်ဘာအဖြစ် သန့်ကျူပေးသွားသေးတယ်။ 😀 😀
It is easier said than done !!!
လုံခြုံရေးအခန်းရှိရာသို့ အသွားလမ်းတွင် လင်းလင်းထက်တို့ အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ယောက်ယောက်နှင့်များ ရင်ဆိုင်ရမလားလို့ ကိုမြင့်မောင် ထင်ထားပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းအောင်ပင် မည်သူနှင့်မှ မတွေ့။ သူတို့ရောက်နေရာ ဓါတ်ခွဲခန်း အတွင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖုန်းတစ်လုံးကိုအတွေ့ အပြင်ဘက်သို့ အကြောင်းကြားရန် ကြိုးစားသေးသည်။ သို့သော် လင်းလင်းထက်တို့ အဖွဲ့က လျှင်လှသည်မှန်း သွားတွေ့ရသည်။ ဖုန်းလိုင်းတွေကို ဖြတ်ထားပြီးသား ဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင် ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲ လုံခြုံရေးအခန်းဆီသို့သာ ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။
မလွယ်ပေါက်တံခါးနား အရောက်တွင် ကိုမြင့်မောင် အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ထားပြီး အသက်ကို ဝအောင်ရှူသည်။ လက်ထဲကိုင်ထားသည့် သံပိုက်လုံးကိုလည်း ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ထပ်ဆုပ်သည်။ ပြီးနောက် အနည်းငယ်ဟနေသလို ဖြစ်သည့် တံခါးဝမှ အထဲသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။
အရင်ဆုံး သတိထားမိသည်က သစ်ထွန်းပေါ်လာရာ လုံခြုံရေးခန်း၏ အဓိက တံခါးပေါက်နားတွင် သွေးကွက်များ အိုင်နေသည်ကို။ ဒီမြင်ကွင်းကြောင့် ကိုမြင့်မောင် တကိုယ်လုံးရှိ သွေးတွေ ဆူပွက်ထွက်ပြီး မေးကြောကြီးများ ထောင်လာသည်အထိ အံကို တင်းတင်းကြိတ်သည်။ သစ်ထွန်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ မတွေ့။ သို့သော် ဒီသွေးတွေက သူ့ချာတိတ်ဆီက ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ၁ဝဝရာခိုင်နှုန်း သေချာသလောက်ရှိသည်။ ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးက အခန်းထဲတွင် ရှိနေသည့် ရန်သူဆီသို့ စွန်ရဲတစ်ကောင်နှယ် ရောက်သွားသည်။
လုံခြုံရေးခန်းထဲတွင် ရှိနေသူက သုံးယောက်ပေါင်းလာသည့် အဖွဲ့ထဲမှ ကိုမြင့်မောင် သေချာ မသိသေးသည် ဆံပင်ရွှေအိုရောင်နှင့် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လင်းလင်းထက်က ပစ္စည်းတွေ ပြန်ယူဖို့ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်သော ၀ါဝါဆိုသည့် တစ်ယောက်။ စစ်တပ်တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အစိမ်းပုတ်ရောင် သံသေတ္တာတစ်လုံးကို စားပွဲပေါ်သို့ လှမ်းတင်နေသည်။ သူမ မတ်တပ်ရပ်နေရာ နားတွင်လည်း နောက်ထပ် သံသေတ္တာနှစ်လုံးလောက် ရှိနေသေးသည်။
ကိုမြင့်မောင် နီနီထိုင်ခဲ့သည့် နေရာရှိ မိန်းကွန်ပျူတာကို လှမ်းကြည့်သည်။ စကရင်ဆေ့ဗာက ရှိနေသေးရာ လင်းလင်းထက်တို့ရဲ့ အကြံအစဉ် အထမမြောက်သေးမှန်း သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ၀ါဝါမှလွဲ၍ ကျန်သည့် နှစ်ယောက် ဘယ်ရောက်နေမှန်း ကိုမြင့်မောင် မှန်းဆလို့ မရပါ။ ကိုမြင့်မောင် အခန်းထဲကို လေ့လာအကဲခတ်နေစဉ် ၀ါဝါက အောက်တွင်ချထားသော သေတ္တာတစ်လုံးကို ကုန်း၍ လှမ်းကောက်သည်။ ဆိုခဲ့သလို ၀ါဝါရော နီနီပါ ပြောက်ကျားစစ်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားကြတာတော့ မှန်ပါသည်။ သို့သော်လည်း နှစ်ယောက်စလုံးက ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ဖွံ့ဖြိုးပြီး အချိုးကျလှသည်ဖြစ်ရာ ကုန်းကာထားသည့် ပိုစရှင်တွင် အသက်ရှူမှားလောက်သည့် ၀ါဝါရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို စစ်ဘောင်းဘီက မဖုံးကွယ်နိုင်ပါ။ ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံး နှစ်လုံးက ထိုနေရာတွင် အလိုလို သွားစုသည်။
သေတ္တာကို ကောက်ယူပြီးနောက် ၀ါဝါက စားပွဲပေါ်တွင် တင်သည်။ သေတ္တာအား ခတ်ထားသည့် သော့ခလုတ်နှစ်ခုကို ထောက်ခနဲ ဖွင့်ပြီး အဖုံးကို လှန်တင်လိုက်သည်။ အထဲတွင်တော့ ကွန်ပျူတာလိုလို စကရင်တစ်ခုက ရှိနေပြီး ထိုအပေါ်တွင် လျှပ်စစ်လှိုင်းများ ပြေးနေလေသည်။ ဒါကို မြင်လိုက်သည့် ကိုမြင့်မောင် ဘာမှန်း သေချာမသိပေမယ့် နောက်ထပ် အချိန်ဆွဲနေလို့ မဖြစ်ဆိုတာ တွေးမိသည်။ သစ်ထွန်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လက်စားချေဖို့ စိတ်ဓါတ်က ပြင်းပြနေရာ၊ ၀ါဝါနှင့် လက်တစ်ကမ်းတွင် ရိုင်ဖယ်သေနတ် ရှိနေသည့်တိုင် သူ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့။
ဝုန်းခနဲ မလွယ်ပေါက် တံခါးကို တွန်းဖွင့်သံ ကြားလိုက်သည်နှင့် ၀ါဝါက ဘေးနားရှိ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို အမြန်လှမ်းကောက်သည်။ ကိုမြင့်မောင်က သူမထက်မြန်ပါသည်။ လက်ထဲရှိ သံပိုက်လုံးက အရှိန်ဖြင့် မြောက်တက်သွားသည်။ ဒုတ်ခနဲ အသံကို ခပ်အုတ်အုတ် ကြားလိုက်ရပြီးနောက် ၀ါဝါ့ကိုယ်ရှေ့ပိုင်းက စားပွဲပေါ်တွင် ဟက်ထိုးမှောက်ကာ ပြုတ်ကျသည်။
(မင်း .. ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ)
ကိုမြင့်မောင် စိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးပြီး ဆန့်ဆန့်ကြီး ဖြစ်နေသည့် ၀ါဝါရဲ့ နှာတံဝကို လက်ညိုးဖြင့် ထိကြည့်သည်။ သူ့လက်ချက်ကြောင့် တစ်ချက်ထဲမေ့သွားပေမယ့် အသက်ရှူနေသေးတာ တွေ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်သွားသည်။ ဒါဆိုလျှင် ဒီကောင်မကို ဖမ်းထားပြီး စစ်မေးလို့ရနိုင်သည်ဆိုပြီး သူတွက်သည်။ စားပွဲပေါ်တွင် တစ်ပိုင်း၊ အောက်တွင် တစ်ပိုင်းဖြစ်နေသည့် ၀ါဝါ့ကိုယ်အား စားပွဲပေါ် လုံးလုံးရောက်အောင် ဂျိုင်းတစ်ဖက်စီမှ ဆွဲမသည်။ ထိုရောအခါ နို့ကြီးဂိုဏ်းလို့ ကိုမြင့်မောင် သတ်မှတ်ထားသည့်အလျောက် ထွားမွတ်သည့် ရင်ဆိုင်များနှင့် သူ့လက်ထိတွေ့သည်။ ကိုမြင့်မောင် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာမိသည်။
၀ါဝါ့ကိုယ်က စားပွဲပေါ်တွင် ဆန့်ဆန့်ကြီး ဖြစ်ကာ ရှိနေသည်။ အခုလို ပက်လက်အနေအထားတွင် သူမရဲ့ ရင်သားဆိုင်တွေက သိသိသာသာကို ကိုယ်ပေါ်မှ ဖွံ့ထားစွာ ထောင်တက်နေသည်။ နည်းတာကြီးတွေ မဟုတ်။ ကိုမြင့်မောင် ဂလုခနဲ တံတွေးကို မျိုချပြီး အကြည့်ကို လွှဲရသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်းဟု ခေါင်းကို အလုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက် ၀ါဝါ ကုန်းကောက်နေသည့် သေတ္တာကို သွားကြည့်သည်။
သံသေတ္တာများထဲတွင် ရှိသော ပစ္စည်းပစ္စယများကို နားမလည်ပေမယ့် ယမ်းတောင့်များကို ၀ါယာကြိုးတွေနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်ကိုတော့ တွေ့သည်။ သေချာပါပြီ။ ဒီဟာမတွေ အကြမ်းဖက်သမတွေ။ ရုပ်ကလေးတွေ ချောသလောက် အကြံပက်စက်လှသည့် အမျိုး။ သူတို့ စက်ရုံကို ဗုံးခွဲဖို့ပဲလား၊ အကြမ်းဖက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပဲလား .. တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရမည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းသည့် အကြံမဟုတ်မှန်းတော့ သေချာပါသည်။
စိတ်ချဉ်ပေါက်လာသည်နှင့် ကိုမြင့်မောင် ၀ါဝါ့အနား ပြန်ရောက်လာသည်။ သတိမေ့နေတာ မှန်ပေမယ့် ဒီဟာမကို အလစ်ပေးလို့ မရမှန်း သူသဘောပေါက်သည်။ လင်းလင်းထက်နှင့် စတွေ့စဉ်အခါတုန်းက ငမ်းမိလို့ တစ်ချီခံလိုက်ရပြီမို့ ဒီတစ်ခါတော့ အငိုက်မိလို့ မဖြစ်ဆိုပြီး တွေးသည်။ သူနှင့် နီးစပ်ရာ စားပွဲစွန်းတွင် ရှိနေသော ၀ါဝါရဲ့ ခြေတန်တွေကို လက်ဖြင့်စမ်းပြီး လက်နက်တစ်ခုခု ရှိနေမလားဆိုပြီး စရှာသည်။
ခြေဖျားပိုင်းမှ စစမ်းသွားသော သူ့လက်တွေသည် ခါးစပ်အရောက်တွင်တော့ လက်နက်အစား တင်ပါးအိအိဖြိုးဖြိုးကြီးတွေကို စမ်းမိသည်။ ထိုသို့ စမ်းမိမှ ကိုမြင့်မောင် ပို၍ အံ့အားသင့်မိသည်။ ၀ါဝါဆိုသော အကြမ်းဖက်သမသည် ပင်တီအစား ဂျီစထရင်းသာ ဝတ်ထားသည်ကို သတိထားမိလို့ဖြစ်သည်။ ဘာလက်နက်မှ မတွေ့သည်တိုင် ကိုမြင့်မောင် လက်တွေက အရသာရှိလှသည့် တင်ပါးဖြိုးဖြိုးကြီးတွေပေါ်က ချက်ချင်း မခွာနိုင်ပေ။
(အင်း … အောက်ဘက်မှာ ဘာမှ မရှိတာတော့ သေချာသွားပြီ.. အပေါ်ဘက်ကို ဆက်စမ်းရမှာပဲ)
ကိုမြင့်မောင် သူ့ဖာသာသူ အဆိုတင်သွင်း၊ သူ့ဖာသာသူ ထောက်ခံပြီး သူ့ဖာသာသူပင် အကြံကို စတင်အကောင်အထည် ဖော်သည်။ စားပွဲအလယ်ဘေးဘက်သို့ လျှောက်သွားပြီး လက်တစ်ဆုပ်စာမကသည့် နို့လုံးကြီးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရပင် လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။
(ဟ .. ဒီဟာမ ဘရာ ဝတ်မထားပါလား)
ကိုမြင့်မောင် မတရားကို အံ့အားသင့်သွားသည်။ သူ ထင်ထားသည်က ၀ါဝါသည် အနည်းဆုံးတော့ လင့်လင်းထက်လို ဘရာသား ခပ်ပျော့ပျော့တော့ ဝတ်ထားလိမ့်မည်ဆိုတာကို။ အခုတော့ ဘာဆိုဘာမှ ဝတ်ထားတာ မဟုတ်မှန်း၊ တင်းရင်းအိစက်သည့် အသားဆိုင်များကို အခုအခံမရှိ စမ်းမိနေလို့ သိလိုက်ရသည်။ ကိုမြင့်မောင် သူ့မူလ ဦးတည်ချက်ကိုတောင် မေ့သွားသည်။ ဘရာရယ်လို့ မရှိသည့် ၀ါဝါ့နို့ကြီးတွေထဲတွင် ဘာလက်နက်မှ ဝှက်ထားစရာ မရှိဆိုတာ မသိသည့်အလား ပယ်ပယ်နှယ်နှယ်ကို နှိုက်ကာ စမ်းသည်။ တော်တော် အရွယ်ကြီးမည့် ထင်ရသည့် နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုကိုတောင် လက်ဖြင့် စမ်းမိသေးသည်။
(တောက် !!! … အားရစရာကြီးတွေ)
ကိုမြင့်မောင်လက်ထဲရှိ နို့ကြီးတွေက တကယ်ကိုကြီးလှသည်။ မသိလျှင် ဆီလီကွန်ထည့်ထားသည်လို့တောင် ထင်စရာရှိသည်။ ထို့အပြင် ကြီးပေမယ့် သားသည်အမေတွေလို ပျော့အိတွဲနေတာမျိုးလည်း မဟုတ်။ လေထိုးထားသည် ဘောလုံးတစ်လုံးလိုပင် တင်းတင်းရင်းရင်းရှိနေရာ ကိုင်ရတာ မတရားကို ကောင်းပြီး ဇိမ်ရှိလှသည်။ တင်းရင်းအိစက်မှုက ဘာနှင့်မှ မလဲနိုင်ပါ။
စစချင်းတုန်းကတော့ ကိုမြင့်မောင် ၀ါဝါတို့ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ယောက် လုံခြုံရေးအခန်းကို ပြန်ရောက်လာနိုင်သည်ကို တွေးမိပါသည်။ သို့သော် အခုအချိန်တွင် ထိုအတွေးက ဦးနှောက်၏ နောက်ဆုံးအကန့်သို့ အလိုလို ရောက်သွားပြီးသားဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာတွင် တစ်ကြိမ်သာ ကြုံနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတွင် အလိုအလျောက် သာယာသွားမိပြီး လောလောဆယ် ဘယ်လိုအခြေအနေနှင့် ကြုံနေရသည်ရော၊ သူ့စက်ရုံ ဘယ်လိုဖြစ်နေသည်ကိုပါ မေ့လျော့သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင်လက်က ၀ါဝါ ဝတ်ထားသည့် ပြောက်ကျားစစ်ဝတ်စုံရဲ့အရှေ့ ဘက်ဇစ်ဆီ ရောက်သွားသည်။
(၀ိုး … ရှစ်)
တဇွိဇွိနှင့် ဇစ်ကို ခါးစပ်ရောက်အောင် ဆွဲချလိုက်သည်တွင် ၀ါဝါရဲ့စစ်အင်္ကျီရှေ့ခြမ်းက အလိုလိုဟသွားသည်။ ထို့အတူ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ပါးစပ်လည်း အဟောင်းသား ဖြစ်ကာ ဟသွားရှာသည်။ ဟုတ်ပါသည် … မှန်ပါသည်။ ၀ါဝါ တစ်ယောက် တကယ်ကို ဘာဆိုဘာမှ အထဲတွင် ခံဝတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ဖြူဖွေးဝင်းဝါပြီး ကြီးမားဖွံ့ ထားသည့် နို့ကြီးနှစ်လုံးက symmetrical ကျစွာနှင့် အပြိုင်အဆိုင် လဲလျောင်းနေကြသည်။
ဘာပြောကောင်း မနည်း။ ကိုမြင့်မောင် လက်က ဖြူဖွေးတင်းရင်းသည့် နို့ကြီးတွေကို ချက်ချင်းပင် ထပ်ကိုင်သည်။ ဘာဆိုဘာမှ အကာအကွယ် မရှိဘဲ ပကတိ ထိမိနေသည့် နို့လုံးတွေသည် သူ့လက်ထဲတွင် နွေးထွေးပြီး နူးညံ့လှသည်။ ကြီးမားသည်ဆိုတာကတော့ အထူးတလည် ထပ်ပြောနေစရာကို မလိုပါ။ ကိုမြင့်မောင်လို လက်ဝါးဆိုက် ကြီးသည့်သူတောင် အပြည့်အဝအုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိ။ နို့တစ်လုံးလုံးကို ဧရိယာကုန် cover ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ခါလောက် လက်ကို နေရာရွှေ့ မှဖြစ်သည်။
တစ်ခုအံ့သြဖို့ ကောင်းတာက လင်းလင်းထက်မှစ၍ ၀ါဝါအဆုံး Terrorists သုံးယောက်စလုံးသည် ဖြူဖွေးကာ သန့်ပြန်ချောမောသည့် မိန်းမချောလေးများဖြစ်သည်။ အခုလည်း ၀ါဝါရဲ့နို့တွေက တခြားနေရာက အသားတွေထက်ပင် ပိုပြီးဖြူဖွေးသယောင်ရှိသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်ချောင်း ညိုညိုမည်းမည်းများက နို့လုံးဖြူဖြူတွေပေါ် လျှောက်သွားလေရာ ပင့်ကူတစ်ကောင် မျက်နှာကျက်အဖြူကို တွယ်ကပ်နေသည်နှင့်တောင် တူနေသည်။
(စောက်ကျိုးနဲ .. နို့သီးတွေ စူထွက်နေပါလား)
ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးက သူ့လက်ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်မှုကြောင့် တင်းမာတက်လာသည့် နို့သီးညိုညိုတွေဆီသို့ ရောက်သည်။ သူ့မျက်လုံးထဲတွင် ရမ္မက်အရောင် တောက်လာပြီးနောက် ခေါင်းက အလိုလိုနိမ့်ကျသည်။ ပါးစပ်ကို အကျယ်ဆုံးဟပြီး ဟတ်လိုက်သဖြင့် ၀ါဝါရဲ့ နို့အုံသား တော်တော်များ သူ့ပါးစပ်ထဲ ပါလာသည်။ ကိုမြင့်မောင် ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာသည့် နို့အုံသားတွေကို အားပြင်းပြင်းဖြင့် စုပ်သည်။ နို့သီးခေါင်းကိုလည်း လျှာဖြင့် ထိုးကာ အဆက်မပြတ်လျက်သည်။
သူ့ကိုယ်နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော ဘယ်ဘက်ခြမ်းက နို့ကို ကျေနပ်အားရသည်အထိ စို့ပြီးသောအခါ ညာဘက်ခြမ်းက နို့ကို စို့ပြန်သည်။ အရသာက ရှိလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ နို့အုံကြီးတွေက အိထွေးကာ နူးညံ့နေသည်။ ထို့နောက် တစ်ဖက်စီ စို့ရတာ အားမရသည့်နှယ် နို့အုံနှစ်ဖက်ကို ဘေးမှ လက်ဖြင့်တွန်းလိုက်သည်။ ၀ါဝါရဲ့ နို့တွေက ဟဲဗီးလ်ဆိုက်တွေမို့ ဒီလိုတွန်းလိုက်သောအခါ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုက အလယ်မှာ သွားစုသည်။ ကိုမြင့်မောင် ပါးစပ်ကို ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်အောင် ဟရင်း တစ်ချိန်ထဲ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုကို ရအောင်စို့သည်။
(တောက် … စောက်ရမ်း ကောင်းတယ်ကွာ)
တော်တော်လေးကြာလို့ နို့စို့တာ ဝသွားသည်တွင် ကိုမြင့်မောင် သူ့ပါးစပ်ကို ၀ါဝါရဲ့ နို့တွေပေါ်က ခွာလိုက်ရင်း ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ထုတ်ညည်းသည်။ အားရပါးရ စို့ခဲ့သည့် နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးတွေကား သူ့တံတွေးရည်များဖြင့် ပြောင်လက်နေသည်။ ၀ါဝါ့နို့တွေကို နယ်ဖတ်နေစဉ်ကတည်းက ပြန်လည်ထောင်မတ်လာသည့် လီးသည် အခုတော့ ဒေါက်တာဝင့်သူနှင့် သံဗီဒိုထဲမှာ ပုန်းနေခဲ့ရစဉ်ကလိုပင် ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီသားကို အတင်းအကျပ် နင်းကန် ထောက်လျှက်ရှိသည်။
(မထူးတော့ပါဘူး … ဒီဟာမ အဖုတ်ကို လိုးလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်)
ရမ္မက်လှိုင်းတွေသာ ကြီးစိုးထားသည့် ကိုမြင့်မောင် ဦးနှောက်က ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးမနေတော့ဘဲ မျက်စိရှေ့တွင် မြင်နေရသည့် ရေဆေးငါးကြီးလို ဆူဖြိုးသည့် ၀ါဝါ့ရဲ့ ကိုယ်ကို သုံးဆောင်ဖို့သာ တိုက်တွန်းသည်။ ထို့နောက်တွင် သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအနေနှင့် ဘောင်းဘီထဲမှ လီးကို ဇစ်ဖြုတ်၍ ဒီနေ့ညအဖို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်တော့သည်။
လီးက ဖြောင်းခနဲပင် လှံတစ်ချောင်းလို တန်းမတ်၍ ထွက်လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း တင်းမာထောင်တက်နေပြီး Adrenaline များ စုဝေးနေမှုကြောင့် မသိမသာတောင် တုန်ခါနေ၏။ ကိုမြင့်မောင် လီးအား ဘယ်လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး၊ ညာလက်က ၀ါဝါရဲ့ ပြောင်းကျားဘောင်းဘီရှိ် ကြယ်သီးကို လှမ်းဖြုတ်သည်။ ကြယ်သီးပြုတ်၍ ဘောင်းဘီစနှစ်ခု ဟသွားသည်တွင် ကိုမြင့်မောင် လက်နှင့်စမ်းတုန်းက သတိထားမိသည့် ကြိုးတစ်ချောင်း ဂျီစထရင်း အနက်ရောင်လေး ပေါ်လာသည်။ ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်ပြီး ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းနှင့်ပင် ခုန်သည်။
“ဟ .. စောက်မွှေးတောင် မရှိပါလား”
ဘောင်းဘီကို ပေါင်လည်လောက်အထိ ဆွဲချလိုက်သောအခါ အဖုတ်ကို မလုံ့တလုံ ဖုံးထားသည့် တြိဂံပုံ ဂျီစထရင်းသာ ကျန်တော့သည်။ ပြောင်လက်နေသည့် အစက ခပ်သေးသေးဖြစ်သည့်အပြင် ကိုမြင့်မောင် လက်နှင့်စမ်းကတည်းက နေရာတကျ ရှိမနေတော့ရာ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူများကို မြင်နေရသည်။ လက်ညိုးတစ်လုံးစာလောက်တောင် ရှိမလား မသိသည့် အသားဖတ်များသည် ပကတိပြောင်ရှင်းပြီး တင်းတင်းစေ့ကာ ရှိနေရာ အဖုတ်ဝကိုတောင် သေချာမမြင်ရ။
“ကဲ .. အချိန်ကြာတယ်ကွာ .. လာလေရော့”
ပုံမှန်အချိန်သာ ဒါမျိုးနှင့် ကြုံလျှင် ကိုမြင့်မောင် ဖောင်းဥနေသည့် အဖုတ်ကို ကုန်း၍ လျက်မိမှာ သေချာပါသည်။ အခုတော့ မတရားတင်းမာနေသည့် လီးကို ဖြေရှော့ဖို့ကိုသာ ရှေ့တန်းတင်လိုက်သည်။ ၀ါဝါရဲ့ ခြေတန်နှစ်ချောင်းကို ခြေကျင်းဝတ်မှ စုကိုင်ပြီး အပေါ်သို့ မြှောက်တင်သည်။ ပေါင်တန်နှစ်ချောင်း ပူးကပ်သွားပြီး ၀ါဝါတစ်ယောက် တစ်တီတူး ပုံစံ ဖြစ်သွားသည်။ ခြေတန်တွေကို ထိန်းကိုင်ထားရင်း ကျန်သည့် လက်တစ်ဖက်နှင့် ၀ါဝါရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ပွေ့ဆွဲလိုက်ရာ ၀ိုင်းစက်သည့် တင်ပါးကြီးတွေက စားပွဲစွန်းသို့ ရောက်လာသည်။
“ထွီ … ထွီ”
ကိုမြင့်မောင် သူ့လက်ဝါးထဲသို့ တံတွေးကို နှစ်ခါလောက် ထွေးထည့်သည်။ လီးဒစ်ထိပ်ပိုင်းကို လက်ဝါးဖြင့် အုပ်ပြီး တံတွေးများဖြင့် စိုရွှဲအောင် ပွတ်သည်။ ပူနွေးနေသည့် လိင်တန်သည် တံတွေးအစွမ်းနှင့် အနည်းငယ် အေးစိမ့်သွားရာ နေသာထိုင်သာ ရှိသည်။ ဒီထက်ကောင်းတာ မင်း အခုပဲ ခံစားရတော့မှာပါကွာ ဟု ကိုယ့်လီးကိုယ် လှမ်းပြောရင်း အဖုတ်ပေါ်က အနက်ရောင်ပိုးသားစကို လုံးလုံးဘေးရောက်သွားအောင် ဆွဲဖယ်သည်။
၀ါဝါရဲ့အဖုတ်က တောင့်တင်းဆူဖြိုးသော လူကောင်နှင့်လိုက်အောင် ကြီးမားလှသည်။ အဖုတ်အောက်ခြေတွင် ရှိသည့် စအိုပေါက် နီနီလေးနှင့်တောင် ထိစပ်မိအလား ရှည်လျားသည်။ ကိုမြင့်မောင် တံတွေးတစ်ချက်ကို ဂလုခနဲ မြည်အောင် မျိုချမိပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားသို့ သူ့လီးနှင့် ထောက်သည်။ ဖြူဖွေးနုအိနေသည့် အဖုတ်၏ နောက်ခံဘက်ဂရောင်းတွင် သူ့လီးတန် မည်းမည်းကြီးက ထင်ရှားစွာ ပေါ်ထွက်နေရာ ဆေးသားကောင်းသည့် လက်ရာမြောက် ဘလက်ခ်အန်ဝှိုက် ဓါတ်ပုံတစ်ခုနှယ် ရင်ခုန်လှိုက်မောဖွယ် ကောင်းနေသည်…။
“အီး … အားပါး .. ကျပ်လှချည်လား”
လီးထိပ်ကို အဖုတ်အောက်ခြေအဝနှင့် တေ့ပြီး သွင်းလိုက်သည်တွင် ထင်မှတ်မထားသည့် တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ကိုမြင့်မောင် အံ့အားသင့်မိသည်။ အားအရှိန်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း သုံးလိုက်သည်မို့ ဒစ်ဖူးက အထဲတော့ ဝင်သွားပါသည်။ သို့သော် တင်းကျပ်စီးပိုင်နေမှုကြောင့် ရှေ့ဆက်တိုးလို့မရ။ မာကျောပြီး သံချောင်းလို ဖြစ်နေသော ကိုမြင့်မောင် လီးတန်တောင် ကွေးသွားမည့်သယောင် ဖြစ်သည်။
“ဒီဟာမှ အဖုတ်က အပျိုနဲ့ မခြားပါလား .. ကောင်းကွာ .. တွေ့ကြသေးတာပေါ့”
ကိုမြင့်မောင် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ ကြုံးဝါးရင်း ဆောင့်ထည့်လိုက်ပြန်သည်။ စောက်ဖုတ်နှင့် လီးထိစပ်ထားရာမှ တဗျစ်ဗျစ်ဆိုသော အသံ အကျယ်ကြီး မြည်ပြီး လီးက တစ်ဝက်ကျော်ကျော် အဖုတ်လမ်းကြောင်းတလျှောက် ပြေးဝင်သည်။
“အိုး … ရှစ် … အား ပါးပါး”
လီးတစ်ချောင်းလုံး ပြုတ်တူနှင့် ညှပ်ထားသည့်အလား တင်းကျပ်စီးပိုင်လှသည့် အရသာကြောင့် ကိုမြင့်မောင် ခေါင်းမော့၍ပင် ညည်းညူယူရသည်။ လီးတန်လုံးပတ်တလျှောက်လုံးလည်း ပူခနဲ နေအောင် ခံစားရသည်။ သေချာပါသည်။ ဒီ ၀ါဝါဆိုသည့် ဟာမသည် ယောက်ျားအတွေ့အကြုံ ရှိဖူးပုံမရ။ အပျိုအမြှေးပါးတော့ ရှိမနေသည့်တိုင် အဖုတ်သည် လီးဝင်ဖူးတာ ခံဖူးထားပုံမပေါ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုမြင့်မောင်လို လီးကြီးကြီးနှင့် အလိုးခံထားဖူးပုံ မရ။ တင်းကျပ်တာမှ စပယ်ရှယ်ကို ကျပ်နေသည်။ အဖုတ်အတွင်းသား နုနုလေးတွေက သူ့လီးတန်အား တအားကို ဖျစ်ညှစ်ထားသည်။
“ဗြစ် … ဇွိ … ဇွိ … ဗြစ် … ဇွိ … ဇွိ … ဖတ်”
ကိုမြင့်မောင် ၀ါဝါရဲ့ခြေတန်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကာကိုင်ထားရာမှ လက်နှင့်ပွေ့ထိန်းရင်း ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ် ထမ်းတင်သည်။ ထို့နောက် ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ပြောင်းကိုင်ပြီး အားရပါးရကို လိုးဆောင့်တော့သည်။ သူ့ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ ပက်လက်ကလေး ဖြစ်နေသာ ၀ါဝါရဲ့ ကိုယ်ကလေး စားပွဲပေါ်တွင် အပေါ်အောက် ရွေ့လျားနေသည်။ သတိမေ့နေလို့သာ တော်တော့သည်။ မဟုတ်လျှင် ကိုမြင့်မောင် ဆောင့်ပုံမျိုးနှင့် ၀ါဝါတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ အခုလို အသံတိတ်အနေအထားနှင့် အောင့်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
“ဖုံး … ဇွိ …. ဖတ် …. ဖုံး … ဇွိ …. ဖတ် …. အီး … ရှီး … ရှီး”
ကိုမြင့်မောင်ကတော့ တကယ်ကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲနေသည်။ ခါးအားရော၊ ခြေတန်တွေရဲ့ အားပါ သုံးပြီး အကြမ်းပတမ်းကို ဆောင့်နေသည်။ ၀ါဝါရဲ့ ကိုယ်လေး တင်ထားသည့် စားပွဲခုံသည် အားအရှိန်ကြောင့် တကျိကျိနှင့်တောင် မြည်စပြုသည်။ စားပွဲခုံထောက်တွေကို ဝက်အူနှင့်သာ မစုတ်ထားလျှင် ဝုန်းဆိုပြီး ရွေ့ သွားမှာ သေချာလှသည်။ ဖြူဖွေးနေသည့် နို့လုံးကြီးတွေသည်မူ ပရမ်းပတာကို ရမ်းခါနေသည်။ ကိုမြင့်မောင်လက်က တုန်ခါနေသည့် နို့တွေကို အပေါ်ကနေ ထပ်ကိုင်ရင်း လက်ဖြင့် ဖိညှစ်သည်။ နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်ဖြင့် ဖျစ်ဆွဲရင်း ဆက်တိုက်လိုးသည်။ ဆောင့်ချက်တွေကတော့ ဒီရေလှိုင်းများ အလား .. တစတစ အရှိန်ပြင်းပြင်း လာသည် … ။
“အား … ထွက် … ထွက်ပြီ ဟ”
ကိုမြင့်မောင် နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့ကာ ထားရင်း မျက်စိစုံမှိတ်ကာ အော်ညည်းသည်။ မှောင်မည်းနေသည့် အမြင်အာရုံတွင် ကြယ်တွေပြိုးပြက်ထွက်သလို အလင်းတန်းတွေ ဖြတ်ပြေးသည်။ လူတကိုယ်လုံး ထူပူတက်ပြီး အဖုတ်ထဲ ဝင်နေသည့် လီးကမူ အတင်းမာဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်သည်။ နို့လုံးကြီးနှစ်ဖက်တွင် လက်ရာ အနီကြောင်းတွေ ထင်လာသည်အထိ အားကုန်ဆွဲထားရင်း ဆီးစပ်ချင်း တအားကို ပူးကပ်ထားသည်။ သားအိမ်သို့ ရောက်မိမတတ် တိုးဝင်နေသည့် ဒစ်ထိပ်မှ လရည်တွေ တထုတ်ထုတ်နှင့် ပန်းထွက်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းလှသည့် အဖုတ်လမ်းကြောင်း တလျှောက် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လရည်များနှင့် ပြည့်လျှံသွားသည်။
“ငါ .. ဘယ်လို ဖြစ်သွားတာပါလိမ့်”
တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေ ၀ါဝါရဲ့ အဖုတ်ထဲ စီးဝင်သွားသလို ခံစားရသည့်အတွက် ကိုမြင့်မောင် ဒူးတောင်မှ ချောင်ချင်သလို ဖြစ်သည်။ လရည်တွေနှင့် စိုရွှဲနေသည့် အဖုတ်ထဲမှ သူ့လီး ကျွတ်ထွက်လာသောအခါ စားပွဲစွန်းကိုတောင် လက်ဖြင့် လှမ်းကိုင်ထားရသည်။
တအောင့်နေမှ လက်ရှိကမ္ဘာထဲ ကိုမြင့်မောင် အတွေးအာရုံက ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ခပ်ပျော့ပျော့ ဖြစ်သွားသော လီးကို ချိတဲ့တဲ့လက်ဖြင့်ကိုင်၊ ဘောင်းဘီထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ဇစ်ဆွဲပိတ်သည်။ အိုကေပြီဆိုပြီး ၀ါဝါ့ကို လှမ်းကြည့်တော့ ရင်ဘတ်က ဟောင်းလောင်း၊ အဖုတ်က ဟောင်းလောင်း အနေအထားနှင့် ဖြစ်နေသည်။ ဆောင့်ချက်ဒဏ်ကြောင့် နီရဲနေသည့် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများ တလျှောက် လရည်ဖြူပြစ်ပြစ်တွေကလည်း စိမ့်ပြီး စီးထွက်နေသည်။
မဖြစ်သေးပါဘူးဟု ကိုမြင့်မောင် တွေးပြီး ဘေးကိုဆွဲဖယ်ထားသည့် ဂျီစထရင်းအစနှင့် ပြန်အုပ်ပေးလိုက်ယုံမက၊ ဘောင်းဘီကိုပါ ခါးထိရောက်အောက် ပြန်ဆွဲတင်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လူကို တစောင်းဖြစ်သွားအောင် ဘေးကို တွန်းထုတ်သည်။ ဒါမှ ၀ါဝါရဲ့ တပ်မက်ဖွယ် ကောင်းသည့် ကိုယ်လုံးလေးကို သူ အာရုံထဲက ဖျောက်လို့ရမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်လျှင် ဒီဟာမကို ကြည့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် လီးပြန်ထောင်လာမှာလား ဆိုတာ ကိုမြင့်မောင်အတွက် မသေချာ။ လီးထောင်လာလျှင် ဘာမှ စဉ်းစားလို့မရဆိုတာ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စရိုက်ပင် မဟုတ်ပါလား …။
“မလှုပ်နဲ့ .. အဲ့ဒီမှာ ရပ်နေစမ်း !!”
ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ် ရှုပ်နေလို့ ကိုမြင့်မောင် ၀ါဝါရဲ့ ရိုင်ဖယ်ကို ကောက်ယူဖို့ မေ့နေသည်။ သတိရလို့ ကွန်ပျူတာခုံတွင် တင်ထားသည့် ရိုင်ဖယ်ကို သွားယူမည်လုပ်တော့ သူ့ခြေလှမ်းတွေက နောက်ကျနေချေပြီ။ လုံခြုံရေးအခန်းပေါက်ဝတွင် ပေါ်လာသည့် နီနီက သူ့ကို တင်းမာသည် လေသံနှင့် အမိန့်ပေးရင်း ပစ္စတိုတစ်လက်နှင့် တည့်မတ်စွာ ချိန်ထားသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျိန်ဆဲရင်း မတတ်တာသည့် အဆုံး ကိုမြင့်မောင် လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်မြှောက်တင်လိုက်ရသည်။
အခန်းထဲသို့ ခပ်မြန်မြန် ဝင်လာသည့် နီနီရဲ့ အကြည့်က စားပွဲခုံပေါ်တွင် အသက်မဲ့သည့်နှယ် လဲလျောင်းနေသည့် ၀ါဝါရဲ့ ကိုယ်ကို တွေ့သည်။
“ဟေ့ကောင် … မင်း .. ငါ့ ဘော်ဒါကို ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ??” (နီနီက ကိုမြင့်မောင်အား အော်ငေါက်ကာ မေးရင်း အနားတိုးလာသည်)”ကျုပ် မသိဘူး … ဒီအတိုင်း သူ့ကို တွေ့တာပဲ” (ကိုမြင့်မောင် ထုံးစံအတိုင်း ဘူးခံ၍ ငြင်းသည်)
ကိုမြင့်မောင် စကားကို နီနီက ယုံကြည့်သည့် အသွင်မပေါ်ပါ။ သူ့အား ဒေါသအရောင်လက်နေသည့် မျက်ဝန်းများဖြင့် တစ်ချက် စူးခနဲ ကြည့်သည်။ ပြီးနောက် တခြားဘာမှ ထပ်မမေးသေးဘဲ သူမခါးတွင် ချိတ်ထားသော ဝေါ့ကီတော့ကီကို ဖြုတ်ယူလိုက်သည်။
“မလင်း .. နီနီ ပြောနေတယ်””ပြော .. နီနီ” (လင်းလင်းထက်ရဲ့ တုံ့ပြန်သံက ဝေါ့ကီတော့ကီထဲမှ ချက်ချင်းထွက်လာသည်)”နီနီ တစ်ယောက် မိထားတယ် .. ဟိုလဒူကောင် .. ဒေါက်တာမတော့ မတွေ့ဘူး”
“ဘာ!!” (လဒူကောင်ဆိုသည့် အသုံးကြောင့် အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားသည့် ကိုမြင့်မောင်နှုတ်မှ မကျေနပ်သံ ထွက်လာသည်)”အေး .. ကောင်းတယ် .. မင်း အဲဒီကောင်ဆီက ပတ်စ်ဝေါ့ရအောင်တောင်း .. ငါ ဒေါက်တာမကို လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်”
လင်းလင်းထက်ရဲ့ လေသံက လှိုဏ်သံပါနေသည်။ ကြည့်ရတာ စက်ရုံရဲ့ အတွင်းပိုင်းကိုများ ရောက်နေတာလား မသိ။ ကိုမြင့်မောင်အား နီနီရဲ့ လက် ဝကွပ်အပ်သလို မှာကြားသွားပြီးနောက် သူမအသံက ပျောက်သွားသည်။ နီနီက သူ့ကို မျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်ကာထားရင်း ဝေါ့ကီတော်ကီကို ခါးမှာ ပြန်ချိတ်သည်။
“ဒီမှာ မနီနီ .. ခင်ဗျားတို့ ကိစ္စထဲ ကျုပ်ဝင်မပါဘူးဗျာ .. ကျုပ်ကို လွှတ်လိုက်ပါလား”
ကိုမြင့်မောင် အနေနှင့် နီနီတို့ အဖွဲ့ထဲမှ လင်းလင်းထက်ကိုသာ ဂရုစိုက်တာဖြစ်သည်။ အခုလည်း လင်းလင်းထက်က စက်ရုံတစ်နေရာတွင် ရှိနေပြီဆိုတော့ နီနီဆိုသည့်တစ်ယောက်နှင့် အပေးအယူလုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်သည်။ နီနီက ကိုမြင့်မောင်၏ မျက်ဝန်းတည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်ပြီး လက်ထဲချိန်ထားသည့် သေနတ်ဖြင့် ထိုင်ခုံတစ်လုံးကို ညွှန်ပြသည်။
“အဲဒီမှာ ထိုင်”“ကျုပ်ပြောတာ ဘယ်လိုသဘောရလဲ .. နဲနဲ စကားပြောကြည့်ရအောင်လား မနီနီ” (ကျိုးနွံသည့် အမူအရာနှင့် ထိုင်ခုံတွင် ဖင်ချထိုင်ရင်း ကိုမြင့်မောင် ထပ်မံ၍ ဖြောင်းဖြကြည့်သည်)“ကောင်းပြီ .. ဒီလိုလုပ်မယ် … နင် .. ငါ့ကို ပတ်စ်ဝေါ့ပေးလိုက် .. အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင် နင့်ဘောလ် တည့်တည့်ကို ငါ ပစ်ထည့်လိုက်မယ် .. ဘယ်လိုလဲ”(ဟိုက်)
ကိုမြင့်မောင် အတွက်အချက်မှားသွားသည်။ နီနီက သူတို့ခေါင်းဆောင် လင်းလင်းထက်ထက်ပိုဆိုးနေ၏။ မျက်နှာထားတင်းတင်း လေသံမာမာနှင့် ဖိကြိမ်းရင်း ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ဂွကြားသို့ သေနတ်ပြောင်းကို ရွှေ့ ကာချိန်သည်။ ကိုမြင့်မောင် တကိုယ်လုံး ချွေးစေးများ ပြန်လာပြီး လူက အသားတွေတောင် တုန်ချင်သလို ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် နှုတ်ခမ်းကိုမူ တင်းတင်းစေ့ကာ ထားသည်။
နီနီ၏ လက်က လျှပ်ပြက်သလိုကို မြန်ဆန်လွန်းလှ၏။ ပစ္စတိုသေနတ်ကို အပြားလိုက်ဆုပ်ကိုင်ပြီး မြောက်တက်သည်။ အောက်ပြန်ကျလာသည့် သေနတ်ရဲ့ သံကိုယ်နှင့် ကိုမြင့်မောင်ခေါင်းက ခွပ်ခနဲနေအောင် မိတ်ဆက်၏။ ဘာမှန်း မသိခင်မှာပင် နားထင်ရင်းတွင် ပူခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အသည်းခိုက်အောင် နာကျင်မှုကြောင့် ကိုမြင့်မောင် အားခနဲ အော်မိသည်။
“ပတ်စ်ဝေါ့??” (ပစ္စတိုကို သူ့ပေါင်ဂွကြားအား ပြန်ချိန်ထားပြီး လေသံပြတ်နှင့် ထပ်မေးပြန်သည်)“နေ .. နေဦး!!” (ကိုမြင့်မောင် အလန့်တကြားနှင့် တားရသည်)“ပေးမှာလား ပတ်စ်ဝေါ့”“ပေးမယ် … ဒါ .. ပေမယ့်”
“ဘာ ဒါပေမယ့်လဲ” (ကိုမြင့်မောင် စကားကို အလိုမကျဟန်ဖြင့် သေနတ်ကိုင်ထားသည့် သူမလက်က ထပ်မံ၍ မြောက်တက်မည့်ဟန် ပြသည်)“ပတ်စ်ဝေါ့ပေးမယ် .. ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ကျုပ်ကို တစ်ခုလိုက်လျောရမယ်” (လက်နှစ်ဖက်ကို မျက်နှာရှေ့ ကာလိုက်ရင်း ကိုမြင့်မောင် စကားကို အလုအယက်ပြောသည်)“ဘာလိုက်လျောရမှာလဲ .. နင့်ကို ပြန်လွှတ်ဖို့လား ဝေးသေး”“အိုကေ .. မလွှတ်ဘူးဆိုလည်း ဖြစ်တယ် .. ဒါပေမယ့် နဲနဲတော့ သက်သက်ညှာညှာ စဉ်းစားဦးဗျာ”“အို .. ဘာမှ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး .. ပတ်စ်ဝေါ့ပေး .. မပေးရင် ပစ်ထည့်လိုက်မယ်”
စိတ်ရှုပ်သည့် အသံနှင့် နီနီ အော်ထည့်လိုက်ရင်း သေနတ်ကို ဂွကြားသို့ တဆဆလုပ်သည်။ ကိုမြင့်မောင် စိတ်ထဲ ကျောချမ်းသလို ဖြစ်နေသည့်တိုင် တစ်စုံတစ်ခုကိုလည်း တွက်ဆနေသည်။ သူ့အကျင့်အတိုင်း မျက်ခုံးမွှေးပေါ် စင်္ကြန်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သည် …။ နီနီ အသံတောင် မပျောက်သေး သူကလည်း လေသံမာမာနှင့် တုံ့ပြန်ပြီးသာဖြစ်သည်။
“ဒီမှာ နီနီ .. ခင်ဗျားဖာသာ ပစ်ချင်တဲ့နေရာပစ် .. ရိုက်ချင်တဲ့နေရာရိုက် .. ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ် .. ကျုပ်ပြောတဲ့ အပေးအယူကို သဘောမတူရင် ပတ်စ်ဝေါ့ မပေးနိုင်ဘူး”“ဘာအပေးအယူလဲ??” (နီနီရဲ့ သေးသွယ်သော မျက်ခုံးမွှေးတန်းလေး နှစ်ခု အလယ်ခေါင်သို့ ကျုံ့ သွားပြီး ကိုမြင့်မောင်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်မေးသည်)“လွယ်လွယ်လေးပါ … ကျုပ်ကို ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းသာ ဆက်ဆံ .. အောက်တာငေါက်တာတွေ မလုပ်နဲ့ဗျာ .. နဲနဲလေး pleasure ရရင် ကျေနပ်ပြီ”
မချိုမချဉ်ရုပ်နှင့် ပြောနေသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားတွေက ဘာကိုဆိုလိုမှန်း နီနီ သဘောပေါက်လိုက်သောအခါ သူမမျက်နှာ ခပ်ပျက်ပျက်ဖြစ်သည်။ ဒီညစောင့် ဘိုးတော်သည် ဒီလောက်တောင် ဟော်နီဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သူမ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားပါ။
“ခင်ဗျား ဘာမှ မနစ်နာပါဘူး ဗျာ .. ပတ်စ်ဝေါ့ကို ကျုပ် တကယ်ပေးမှာပါ .. ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းဆောင်တောင်မှ ကျုပ်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံလည်း မြင်ခဲ့တာပဲ .. သူနှင့်ယှဉ်ရင် ခင်ဗျားက အပုံကြီးပိုသာပါတယ် .. ရုပ်ရည်ရော .. ဘော်ဒီရော အပျံစားပဲ”“တော် .. တော် .. ရှင် အပိုတွေ ပြောမနေနဲ့”
ပထမဦးဆုံး အနေနှင့် နီနီထံမှ မိန်းမသံ ဆန်ဆန် အပြောကို ကြားလိုက်ရ၏။ ကိုမြင့်မောင် နီနီ ဘာလုပ်မလဲဟု သူမအမူအရာအား အကဲခတ်ကြည့်နေစဉ်မှာပင် လက်ထဲရှိ သေနတ်ကို ဘောင်းဘီနောက်သို့ ထိုးလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြီးနောက် ကိုမြင့်မောင်အား အလွတ်မပေးဘဲ ကြည့်ရင်းက သူတို့တွေ၏ ပစ္စည်းတွေထဲမှ အိတ်တစ်အိတ်ရှိရာသို့ သွားသည်။ အိတ်ရဲ့ ရှုံ့ကြိုးကို ဆွဲဖွင့်ပြီး အထဲသို့ နှိုက်သည်။ သူမလက်ပြန်ထွက်လာသောအခါ လက်ထဲပါလာသည်က စတီးလက်ထိပ်တစ်ခု …။
“ကျုပ်ကို သနားပါဦး နီနီရာ … အကြမ်းပတမ်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့ .. ဟင်း ဟင်း”
လက်ထိပ်ဖြင့် သူ့လက်နှစ်ဖက်အား နောက်ပြန်ခတ်လိုက်သည်တွင် ကိုမြင့်မောင်က နီနီအား ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာနှင့် လှမ်းစသည်။ နီနီက သူ့အား ဘာမှ မတုံ့ပြန်ဘဲ လက်ထိပ်ခတ်ပြီးသည်နှင့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ပေါင်ပေါ်သို့ ခြေတန်တွေကို ခွဲ၍ ထိုင်ချသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မျက်နှာနှင့် နီနီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလှသည့် စနေနှစ်ခိုင်သည် တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားသည်။ ထိုရောအခါ ကိုမြင့်မောင် မျက်လုံးသူငယ်အိမ် အနည်းငယ်ကျယ်လာသည်။ နီနီရဲ့ ညာလက်က ပေါင်ဂွကြားသို့ ဆင်းသက်လာပြီး လီးကို အုပ်ကိုင်လာသည်တွင်တော့ မျက်လုံးအိမ်က ပို၍ ပြူးထွက်သည်။ နှစ်ချီ ဆက်တိုက် ပြီးထားတာ ဖြစ်သည့်တိုင် လီးတန်က ခေါင်းထောင်ချင်သလို ဖြစ်လာသည်။
“ဒီမှာ ကိုညစောင့် .. ရှင် လိုချင်တဲ့ သာယာမှုကို ကျမပေးမယ် … ကျမ လိုချင်တဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့ကို ပေးဖို့သာ မမေ့ပါနဲ့”“အာ .. မမေ့ဘူး .. စိတ်ချ”
နီနီရဲ့ လက်က ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး လီအား ဆွဲထုတ်လိုက်သည်တွင် ကိုမြင့်မောင် အားတက်သရောပင် ကတိပေးလိုက်သည်။ ၀ါဝါ့အား လိုးပြီးသည့်အချိန်တွင် လီးကို ဘောင်းဘီထဲ ဒီအတိုင်း ပြန်ထည့်ထားသဖြင့် လီးတန်တလျှောက် အရည်အချို့ က ပေကျံကာ ရှိဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် နီနီက လီးဒစ်အောက်ပိုင်းမှနေ၍ ဆုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်အောက်ဆွဲကာ ဂွင်းတိုက်ပေးသည်တွင် အရည်တွေနှင့် လီးအားပွတ်လိမ်းသလို ဖြစ်သည်။ ချောချောမွေ့မွေ့ ရှိပြီး အရသာလည်း ကောင်းလှသည်။ တဖြေးဖြေးနှင့် နီနီရဲ့ လက်ဖဝါး နုနုလေးထဲတွင် ကိုမြင့်မောင်လီးက အလမ္မာဆရာရဲ့ ပုလွေသံကြောင့် ပါးပျဉ်းထောင်လာသည့် မြွေဟောက်တစ်ကောင်နှယ် အလိုလိုခေါင်းထောင် တက်လာသည်။
“မနီနီ .. ဒီလိုမျိုး ဂွင်းတိုက်ပေးတာကတော့ ကျုပ်ဖာသာ လုပ်လဲ ရပါတယ်”
ချောကျွိကျွိ အရည်များကြောင့် ချောဆီသုတ်လိမ်းသလို ဖြစ်ပြီး မဲနက်တင်းပြောင်းလာသည့် လီးအား ငုံ့ကြည့်ရင်း ကိုမြင့်မောင် စောဒက တက်ပြန်သည်။
“လဲသေလိုက် .. လီးစုပ်ပေးဖို့ ဆိုရင်တော့ နိုးပဲ”
နီနီက သူ့ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးသည့်ဟန်ဖြင့် ကြည့်ရင်း လှမ်းငေါက်သည်။ မတတ်တာလို့ ဒီလို လုပ်ပေးနေရပေမယ့် ကိုမြင့်မောင်နှင့် သူမ အခုလို နီးနီးကပ်ကပ် ဖြစ်နေတာကို လုံးဝ သဘောမကျ။ ဘာဖြစ်လို့ နှာဘူးကောင်ကို ဒီလောက်တောင် လိုက်လျောမိသည်ဆိုတာ သူမကိုယ်သူမ စဉ်းစားလို့မရ။ နောက်ဆုံးတွင် အဖြေရှာမရသည့် သူမ ဦးနှောက်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ လင်းလင်းထက်ကိုသာ လွှဲချလိုက်သည်။ ပတ်စ်ဝေါ့ကို ရအောင်တောင်းဆိုလို့ သူမ လိုက်လုပ်ရသည်လို့သာ ဆင်ခြေပေးလိုက်သည်။
နီနီတစ်ယောက် အတွေးတွေနှင့် ရှုပ်ထွေးနေရာ လက်ဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးနေတာ အနည်းငယ် အရှိ်န်နှေးသွား၏။
“အာ .. ညှိနှိုင်းနေတုန်း ရှိသေးတာ .. မရပ်နဲ့လေ”“ကျွတ်!!” (စိတ်ပျက်ဟန်ဖြင့် စုတ်သပ်လိုက်ပေမယ့် ခုနကအတိုင်း ပြန်လည်၍ ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ ဖောင်းအိနေသည့် လက်ချောင်းလေးများရဲ့ ကြားတွင် ကိုမြင့်မောင် လီးက ကြီးသထက်ကြီးလာသည်)
နီနီက လီးစုပ်ပေးသည့်အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောပေမယ့် တကယ်တမ်း ကိုမြင့်မောင် ခေါင်းထဲတွင် ရှိသည်က အဲဒါမဟုတ်။ သူ့အနေနှင့် လီးစုပ်ပေးတာ မပြောနှင့် ၀ါဝါ့စောက်ဖုတ်ကိုတောင် အပီအပြင်လိုးခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်ပါလား။ သူသာ နီနီကို ပတ်စ်ဝေါ့ ပေးလိုက်ပြီးလျှင် ဒီဟာမက သူ့ကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မည်ဆိုတာ ကိုမြင့်မောင် သေချာတွေးလို့မရ။ အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုတ်ထားရသည့် ပမာ ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ တန်အောင်တော့ လုပ်မှဖြစ်မည်။
“လီးမစုပ်ပေးချင်လဲ ရတယ် မနီနီ .. ဒီလောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့ကို အဖုတ်နဲ့ လဲမယ်ဆိုရင်ရော”“သေဦးမယ် ..” (နီနီ မျက်နှာတစ်ခုလုံးက နီရဲသွားပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည့် လက်က အလိုလိုရပ်သွားပြန်သည်)“ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး .. ကျမ ဘာဆေးမှ သောက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး … ရှင့်လို ညစောင့်လီးကြောင့်တော့ ဗိုက်မကြီးချင်ဘူး”
ကိုမြင့်မောင် စိတ်ထဲမှ သောက်ကောင်မလို့ ကျိန်ဆဲမိသည်။ သို့သော် နှုတ်ကတော့ (လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးဦးလေ) ဟုသာ မျက်နှာချိုသွေးပြီး ပြောလိုက်သည်။ နီနီက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီး လီးကို အပေါ်အောက်ဆွဲရင်း ဂွင်းပြန်တိုက်ပေးသည်။ ဒီငနာကောင်ရဲ့ လီးကလည်း ဘာတွေလုပ်ထားမှန်း မသိ။ ဂွင်းတိုက်ပေးနေတာ တော်တော်လေး ကြာလာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် လရည်ထွက်ဖို့ အရိပ်အယောင်တောင် မပြ။
“ဗိုက်မကြီးချင်ဘူး ဆိုရင် နောက်ပေါက်ကို လုပ်လို့ရတာပဲ ..”“ရော… ကိုညစောင့် .. ရှင်ဟာလေ မလွယ်ပါလား” (နီနီ ကိုမြင့်မောင်ကို တကယ်ကို မယုံနိုင်သည့်အသွင်နှင့် ကြည့်၏)“ခနပဲ ကြာမှာပါ .. ခင်ဗျားရဲ့ ဖင်ကြီးတွေက လုံးဝန်ပြီးကားနေတာဆိုတော့ဗျာ … ဟင်း .. ဟင်း”“ဖက်ခ် ယူ .. လုံးဝ နိုးပဲ … လုပ်ချင်ရင် ကျမ နို့တွေကို လုပ် .. အဲဒါထက် ပိုမလိုက်လျောနိုင်ဘူး .. ဒါပဲ”
ကိုမြင့်မောင် သူ့မျက်နှာကို နီနီသာ စိုက်ကြည့်မနေဘူးဆိုရင် ပါးစပ်ကို နားရွက်တက်ချိတ်အောင်ပင် ပြုံးမိမလား မသိ။ သူ့ကံကြမ္မာအပြောင်းအလွဲကိုလည်း မယုံရေးချမယုံ ဖြစ်မိသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းက နီနီရဲ့ သေနတ်ပြောင်းအောက်တွင် အသက်ပျောက်မလို ဖြစ်နေသည့် သူက၊ အခုတော့ ဖွံ့ထွားမို့မောက်နေသည့် သူမရဲ့ နို့ကြီးတွေကိုတောင် လိုးရဦးမယ်တဲ့။ သေချာတွေးကြည့်မှာဆိုရင် ဒီခရစ်စမတ်နေ့သည် သူ့တစ်သက်တာတွင် အကောင်းဆုံးနေ့ဟုလို့တောင် သတ်မှတ်လို့ ရနိုင်ပါသည်။ အင်း .. သစ်ထွန်းတစ်ယောက် သေသလား ရှင်သလား မသိတာကလွဲလို့ပေါ့ ..
“အိုခေ .. ပတ်စ်ဝေါ့နဲ့ မင်းရဲ့နို့နဲ့ လဲမယ် .. ရော့ပတ္တမြား ရော့နဂါးပဲ .. ငါ့ နဂါးက မင်းလက်ထဲ ရောက်နေပြီ .. မင်းရဲ့ ပတ္တမြားခဲတွေသာ ပြတော့”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ခပ်ရွှင်ရွှင်စကားကြောင့် နီနီတောင် ရောယောင်ပြီး ပြုံးမိမလို ဖြစ်၏။ ထိုအချက်ကို သူမဟာသူမ သတိပြုမိသွားသောအခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် လန့်သွားသည်။ မျက်နှာကို မနည်းပင် တင်းအောင်ပြန်ထားလိုက်ပြီး အလုပ်သဘောနော် အလုပ်သဘောဟု ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်ပြောရင်း ပြောက်ကျားအင်္ကျီရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ ဇစ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်၏။
ကိုမြင့်မောင် တွက်ဆထားသည့် အတိုင်းပင်။ နီနီသည်လည်းပဲ ဘာအတွင်းခံ ဘရာစီယာမှ ဝတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ဝင်းခနဲ ပေါ်လာသည့် နို့ကြီးတွေက ၀ါဝါနှင့် မခြား ကြီးထွားဆူဖြိုးသည်။ ထို့အပြင် ကိုမြင့်မောင် တင်စားလိုက်သည့် ပတ္တမြားခဲဟူသော အခေါ်အတိုင်း နီနီရဲ့ နို့သီးတွေက ၀ါဝါလို့ မဟုတ်ဘဲ နီတီတီလေးတွေ ဖြစ်သည်။ ကိုမြင့်မောင်တို့အတွက်တော့ အကြိုက်တွေပင် …။
“သောက်ရမ်း မိုက်တယ် !!” (မနေနိုင်သည့်အဆုံး နှုတ်မှ ထုတ်ဖော်၍ ချီးကျူးသည်။ နီနီကသာ သူ့ကို လက်ထိပ်ခတ်မထားလျှင် ကိုမြင့်မောင် ဒီနို့ကြီးတွေကို ဖမ်းဆုပ်ညှစ်မိမှာ သေချာပါသည်)
နီနီဆီမှ ဘာမှ တုံ့ပြန်သံ မကြားပါ။ တုံ့ပြန်သံအစား သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်နှင့် နို့ကြီးတွေကို အောက်ကနေ ပင့်ကိုင်ပြီး ညှစ်ပြရှာသည်။ နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးတွေကြား ရင်ကြားမြောင်းက နက်ရှိုင်းစွာ ပေါ်လာပြီး နို့သီးနီနီလေး နှစ်ခုက တစ်ခုခုနှင့် ထိမကပ် နီးစပ်သွားသည်။ ကိုမြင့်မောင် လည်ဇလုတ်ကြီး လှုပ်ရှားပြီး တံတွေးကို ဂလုခနဲ မျိုချသည်။ မျက်လုံးတွေထဲတွင်တော့ ရမ္မက်ခိုးတွေက အလိုလို ဝေတက်လာသည်။
ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ရှိနေသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားသို့ တွန်းခွဲကာဝင်ပြီး နီနီက ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် နို့ကြီးတွေကို ပူးကာတွန်းထားမှုကို အားပြန်လျှော့လိုက်ရာ အလယ်ခေါင် ရင်ကြားမြောင်းနေရာက အနည်းငယ်ဟသည်။ ထိုဟသွားသည့် နေရာတွင် ညှပ်ပြီး အဖမ်းခံလိုက်ရသူကား ကိုမြင့်မောင်ရဲ့မာတောင်နေသည့် လီးတန်မည်းမည်းကြီး။ နွေးထွေး နူးညံ့သည့် ရင်သားဆိုင် ဖြူဖြူများကြားထဲတွင် သူ့လီးက ပျောက်ပြီး ထိပ်ဖူးလေးသာ ပြူတစ်ပြူတစ် ထွက်နေသည်။
“အား … ရှီး” (ဆန်းပြားသည့် အတွေ့အကြုံသစ်ကြောင့် ကိုမြင့်မောင် နှုတ်မှ ထုတ်ဖော်၍ ညည်းသည်)
နီနီက သူမနို့ကြီးတွေကို လက်ဖြင့်ထိန်းကာ တွန်းထားရင်း လီးတန်ကြီးပေါ်တွင် အပင့်အချ စတင်ပြုလုပ်သည်။ နူးညံ့လှသည့် ရင်သားဆိုင်တွေမှ ရသည့် အတွေ့က incredible feeling ဖြစ်ရာ ကိုမြင့်မောင် ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်မနေနိုင်ပါ။ လက်ထိပ်ခတ်ထားလို့ လှုပ်ရှားဖို့ အဆင်မပြေသည့်တိုင် ဖင်ကြီးကို ထိုင်ခုံပေါ်မှ ကြွပြီး နို့အုံကြားကို လိုးဖို့ ကြိုးစားသည်။
“ကြိုက်တယ်ပေါ့ ဟတ်လား” (နီနီက ကိုမြင့်မောင် အဖြစ်ကိုတွေ့ပြီး မထိတထိ လှမ်းစသည်။ နို့ကြီးတွေ အပေါ်အောက် လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ခပ်မြန်မြန် လုပ်ပေးသည်)“အား … ကောင်းတယ် … လိုး .. လိုး … နို့တွေနဲ့ လိုးးးး” (ကိုမြင့်မောင်အဖို့တော့ စက္ကန့်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်းက အားရကျေနပ်စရာကြီးသာ)
တစ်ချက်တွင် .. နီနီက နို့ကြီးတွေနှင့် လီးကို ညှပ်ကာ လိုးပေးနေရင်းမှ အောက်သို့ ဆောင့်အချ၊ ကိုမြင့်မောင်က ခုံပေါ်မှ ဖင်ကြီးကြွပြီး လီးကိုကော့တင်လိုက်ရာ သူမ မျက်နှာကို လီးဖြင့် တက်ထိုးမိသည်။ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို ထောက်ခနဲ ထိပြီး ကျော်ထွက်ကာ ပါးတစ်ဖက်ကို လီးထိပ်ဖြင့် သွားရိုက်သည်။
စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ကိုမြင့်မောင်အား အော်ငေါက်ရင်း နို့ကြီးတွေအား တွန်းထားသည့် လက်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ သူမပါးပြင်တွင် ပေရေသွားသည် လီးရည်ကြည် ချွဲချွဲကို လက်ခုံဖြင့် သုတ်သည်။ အချုပ်အနှောင် ကင်းမဲ့သွားသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လီးတန်ကြီးကတော့ တင်းမာထောင်တက်နေသည်များ မြင်တာနှင့်တောင် အသည်းယားစရာ ကောင်းနေသည်။ လီးတန်လုံးပတ်တလျှောက် အကြောကြီးတွေက ဖောင်းလို့၊ လီးထိပ်ဖူးကလည်း အရည်တွေစို့ပြီး နီရဲလို့ ..။
“ရှင် မပြီးနိုင်သေးဘူလား!!”“ဟင့်အင်း .. လိုသေးတယ် … ပြန်လုပ်လေဗျာ .. ရပ်မထားနဲ့”“ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ” (နီနီက ထပ်မံ၍ ငေါက်လိုက်ပြန်ပေမယ့် ပါးပြင်ကို သုတ်လိုက်သည်လက်ဖြင့်ပင် လီးကို ပြန်လည်၍ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးသည်)“လက်ထိတ်ခတ်ထားတာကို ဖြုတ်ပေးပြီး မင်းနို့တွေ့ကို ကိုင်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးတာ ပိုမြန်လိမ့်မယ်”“ဟား .. ဟား … ဒါမျိုး ရမနေဘူး” (နီနီက သရော်တော်တော် လေသံနှင့် တုံ့ပြန်သည်)“မင်းနို့တွေပေါ်မှာ ကျုပ်လက်ရှိနေမှာလေ .. မင်းလက်နဲ့ သေနတ်ကို ကိုင်ထား … ရတာပဲ”
နီနီရဲ့ ကော့ညွှတ်နေသည့် မျက်ခုံးမွှေးတန်းလေးနှစ်ခု စုသွားအောင်ပင် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားကို စဉ်းစားမိသည်။ မတတ်တာလို့သာ လိုက်လျောရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ သူမ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လီးကို နို့တွေနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် လိုးမပေးချင်။ ကိုမြင့်မောင်က သူ့ဟာသူ လုပ်မယ်ဆိုလျှင် ဒါက အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ (အိုခေ)လို့ သဘောတူပြီး ထိုင်နေရာမှထကာ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်ထိပ်ကို ဖြေပေးလိုက်သည်။
လက်ထိပ်ကွင်းကြောင့် နီရဲသလို ဖြစ်နေသော လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ကိုမြင့်မောင် ပွတ်ကြည့်သည်။ ထိုအချိန်တွင် နီနီက သူမခါးနောက်တွင် ထိုးထားသော ပစ္စတိုသေနတ်ကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့အား ချိန်သည်။ ပစ္စတို မကိုင်ထားသည့် လက်တစ်ဖက်နှင့် နို့နှစ်လုံးကို အလယ်ခေါင်နေရာမှ မ၍ ရှေ့သို့ တိုးပေးသည်။
အင်္ကျီရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်း ဖြစ်ကာ နို့ကြီးတွေ အဖွေးသားဖြစ်နေသည့် အကြမ်းဖက်သမ မိန်းမချောက သေနတ်နှင့် ချိန်ထားသည့် မြင်ကွင်း .. အဖမ်းဆီးခံထားရသော လုံခြုံရေး ညစောင့်က ထိုမိန်းမရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်၍ လိုးရမည့် ကိစ္စ .. တော်တော်တော့ ရယ်ဖို့ကောင်းနေသည်။
ကိုမြင့်မောင် ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ မှတ်ချက်ပြုလိုက်ပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နီနီရဲ့ နို့ကြီးတွေကို လက်ဖြင့်လှမ်းကိုင်သည်။ တင်းရင်းအိနွေးသည့် အထိအတွေ့ကြောင့် နှုတ်က ညည်းသံ ခပ်စိတ်စိတ်ထွက်သည်။ ကိုမြင့်မောင် လက်နှင့် သူမနို့တွေ အထိတွင် နီနီက လက်တစ်ဖက်ကို ပြန်ရုတ်သည်။ သို့သော် ရင်ဘတ်ကို ရှေ့သို့ ကော့ပေးထားသည်ကိုတော့ မပျက်။ ကိုမြင့်မောင့်လက်က နို့တွေပေါ် ပြေးလွှားပြီး နို့သီးနီနီလေး နှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်ပွတ်ကြည့်သည်။ သူမကိုယ်သူမ သတိထားနေသည့် ကြားမှ နီနီကိုယ်ကလေး ဆတ်ခနဲနှင့် တုန်သည်။
“မင်းနို့တွေက တကယ်ထွားတာကွာ .. မြောင်းလေးဆို နက်နေတာပဲ”“ပြောမနေနဲ့တော့ … ရှင်လိုးမယ်ဆိုလဲ မြန်မြန်သာလိုး” (ကိစ္စပြီးပြတ်ချင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ နီနီက အလောတကြီး တိုက်တွန်းရှာသည်)“ဟုတ်ကဲ့ပါ .. ဗိုလ်ကြီးမမ”
ကိုမြင့်မောင် နောက်တောက်တောက်နှင့် ဖြေလိုက်ပြီး နို့နှစ်ဖက်ကို နီနီလုပ်သလို ဘေးနှစ်ဖက်ကနေ တွန်းသည်။ အလယ်ခေါင်မြောင်းနေရာတွင်တော့ သူ့လီး မြုပ်ကာ ညပ်နေသည်။ တစ်ချက်ချင်း နို့တွေကို အပေါ်အောက်ဆွဲဖိကာ လိုးသည်။ သို့သော် ကိုမြင့်မောင်က ထိုင်ခုံပေါ်မှ ထိုင်လျက်၊ နီနီက အောက်ကနေ ဒူးထောက်ထားလျက်ဆိုတော့ angle က သိပ်မမှန်ချင်။ အဆင်မချော ..
“ကျုပ် မတ်တပ်ထပြီး လုပ်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်နဲ့ တူတယ်”“အိုခေ .. လုပ်ချင်တာလုပ်တော့ မေးမနေနဲ့တော့”
စိတ်မရှည်တော့သည့် နီနီက မြန်မြန်ဆန်ဆန် သဘောတူလိုက်သည်။ သူမရှေ့တွင် မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ မျက်နှာကိုတော့ ဒူးထောက်ထားရာမှ သေနတ်နှင့် မော့ကာချိန်ထားသည်။
ကိုမြင့်မောင် အရင်ဆုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားလို့ရအောင် ယူနီဖောင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြစ်သည်။ ပြီးမှ ဒူးထောက်ထိုင်နေသည့် နီနီရှိရာ ရှေ့သို့ တိုးကပ်ပြီး လီးကို ညာလက်ဖြင့် အရင်းမှကိုင်သည်။ ဖွေးအိလုံးဝန်းနေသည့် နို့ကြီးတွေကြားထဲကို ထည့်လိုက်မည်ပြုပြီးမှ စိတ်ကူးတစ်ခုရသဖြင့် လီးတန်နှင့် နို့အုံတစ်ဖက်ကို ဖတ်ခနဲ ရိုက်သည်။ ကိုမြင့်မောင် လီးကကြီးလဲကြီး၊ ရှည်လဲရှည်၊ မာလဲမာနေသဖြင့် ရာဘာတုတ်တစ်ချောင်းနှင့် အရိုက်ခံရသလိုမျိုးဖြစ်သည်။ နီနီကိုယ်ကလေး တွန့်သွားပြီး အရိုက်ခံရသည့် နေရာက အသားက နီရဲ၍ပင် တက်သည်။
“ဒါ .. ဘာလုပ်တာလဲ”“ဆောရီး … စိတ်ထသွားလို့”“ပေါက်တတ်ကရတွေ လုပ်မနေနဲ့ .. ကျမ စိတ်မရှည်တော့ဘူး”
နီနီက လေသံတင်းတင်းဖြင့် ပြောယုံမက သေနတ်ကိုပါ ဆပြလို့ ကိုမြင့်မောင် လီးမကိုင်ထားသည့် လက်ကို တောင်းပန်သလို လက်ဝါးလေးမြှောက်ဖြန့်ပြသည်။ ထို့နောက် သူမ သဘောအတိုင်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲ နို့အုံကြားကို လိုးရအောင် လီးကို ရင်သားမြောင်းနေရာရောက်အောင် ဖိတွန်းသည်။ အခုလို အနေအထားတွင် ကိုမြင့်မောင်က မတ်တပ်မို့၊ နီနီက လီးဝင်လာအောင် နောက်သို့ကိုယ်ကို အနည်းငယ် လှန်ပေးရသည်။
ဒီတော့ သူမလက်က ကြမ်းပြင်ကို နောက်ပြန်ထောက်မှ အဆင်ပြေမည့်ဟန် ရှိသည်။ ကိုမြင့်မောင်က လီးကို နို့ကြီးတွေ ယိမ်းခါအောင်ပင် အားအင်အပြည့်ဖြင့် လျှောတိုက်လိုးသည်တွင် နီနီ ဘယ်လိုမှ သူမကိုယ်ဟန်ကို မထိန်းနိုင်တော့။ ပစ္စတိုသေနတ်ကို ဘေးကြမ်းပြင်ပေါ်ချပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ထောက်ကာ ကြံ့ကြံ့ ခံထားရသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လီးက လွှတစ်ချောင်းလိုပင် နို့အုံသားတွေကို ဖြတ်တော့မတတ် အတင်းအကြမ်းပင် လျှောတိုက်ကာ ပွတ်နေသည်။
“အား … ရှစ် … မနီနီ .. မင်း .. တစ်ခါမှ မဝတ်ဖူးသေးမယ့် ပုလဲလည်ဆွဲကြီး လက်ဆောင် ပေးလိုက်မယ် … အားးး … လာ … လာတော့မယ် .. ပြီး”
“ရှင် … ဒါ .. ဘာ!!!”
နောက်ထပ် သုံးမိနစ်ခန့် ကြာပြီးသောအခါ ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် ရင်ခေါင်းသံပါအောင် ကြိမ်းဝါးရင်း နီရဲနေသည့် နို့သားတွေကြားထဲက လီးကို ပြန်ထုတ်ပြီး လက်ဖြင့် အဆက်မပြတ် ဂွင်းတိုက်သည်။ မှိုပွင့်ကြီးလို အရည်တွေလဲ့ပြီး ရဲအာနေသည့် လီးဒစ်ကြီးသည် နီနီမျက်နှာနှင့် တစ်တန်းတည်း ဖြစ်နေသည်။ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အကြံက ဘာဆိုတာ နီနီ သိမိလိုက်သည့် အချိန်တွင် မျက်လုံးပြူး မျက်ဆန်ပြူးနှင့် အလန့်တကြား တားသည်။ သို့သော် …
ကိုမြင့်မောင်တစ်ယောက် နှာတဖြားသာသည်ဟု ပြောရမလား၊ လီးတဖြားသာသည်ဟုပဲ ပြောရမလား မသိ။ အီးခနဲ နှုတ်မှ အသံကျယ်ကြီးနှင့် အော်ညည်းမိသည့်အဆုံး လီးဒစ်ထိပ်အကွဲကြောင်းမှ လရည်တွေ ဗျစ်ခနဲ ပန်းထွက်သည်။ ဆက်တိုက်နှစ်ချီတောင် ပြီးထားသည် ဖြစ်သည့်တိုင် လရည်ထွက်မှုက ပြင်းထန်ဆဲ ဖြစ်သည်။ ပြွတ်နှင့်ထိုးသလို တန်းခနဲ ထွက်လာသည့် သုတ်ရည်တန်းက နီနီရဲ့ ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားသည့် မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို ချိန်သားကိုက်ထိသည်။ အားခနဲ အော်ပြီး နီနီတစ်ယောက် လက်နှစ်ဖက်နှင့် မျက်စိကို စင်သွားသည့် လရည်တွေကို သုတ်သည်။
ကိုမြင့်မောင်အတွက်တော့ ဒီဟာက အကွက်ပင်။ လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ပြီး ရှိသမျှ အားကိုသုံး၍ နီနီရဲ့ မေးရိုးကို ထိုးချသည်။ ခွက်ခနဲ မြည်သံနှင့်အတူ ကိုမြင့်မောင် လက်တောင် အနည်းငယ်နာသည်။ နီနီဆိုတာကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ အသံတောင် မထွက်နိုင်ဘဲ တခါထဲ မျက်ဖြူလန်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဆန့်ဆန့်ကြီး လဲကျသွားတော့သည်။
စိတ်သက်သာရာရသွားသည့်အလျောက် ကိုမြင့်မောင် ဟူးခနဲ လေပူတစ်ချက်ကို အကျယ်ကြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ နီနီရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လိုးနေစဉ်ကာလအတွင်း နဖူးပြင်တွင် ရစ်သိုင်းလာသည့် ချွေးစေးများကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သုတ်ရင်း သူ့လက်ချက်နှင့် မေ့မျောနေသည့် Terrorist နှစ်ယောက်ကို ကြည့်သည်။ တစ်ယောက်က အဖုတ်ထဲတွင် သူ့လရည်တွေနှင့် အပြည့်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ယောက်က မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး လရည်တွေနှင့် ပေကျံနေသည်။
“မြင့်မောင် .. မင်းတော်တယ် .. သုံးယောက်ထဲက နှစ်ယောက်တော့ ဒေါင်းသွားပြီး .. မဆိုးဘူး .. မဆိုးဘူး .. ကဲ .. ဟိုနို့ကြီးဂိုဏ်းခေါင်ဆောင်နဲ့ တွေ့ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ် ..”
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုမြင့်မောင် တခြားကိစ္စတွေ အရင်မလုပ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ကျနေသော နီနီရဲ့ ပစ္စတိုကို အရင်ကောက်ယူသည်။ ပြီးမှ သူ့လီးတွင် ပေကျံနေသည့် လရည်အကြွင်းအကျန်တွေကို နီနီရဲ့ ပြောက်ကျား အင်္ကျီအစနှင့် သုတ်သည်။ သွေ့ခြောက်ခြောက် ဖြစ်သွားသည်နှင့် ဘောင်းဘီထဲ ပြန်ထည့်သည်။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီးနောက် စက်ရုံမှုးထံ အကြမ်းဖက်သမားတွေအကြောင်း ပြောမှဖြစ်မည်ဆိုပြီး အံဆွဲထဲ ထည့်ထားသော သူ့ဖုန်းကို သွားရှာသည်။
သို့သော် ဖုန်းကို ထားနေကြ နေရာတွင် မတွေ့။ အံဆွဲတစ်ခုလုံးရှိ ပစ္စည်းတွေလည်း ရှုပ်ပွကာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေသည်။ နီနီတို့က ပတ်စ်ဝေါ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး သံလွန်စရအောင် အကုန်လိုက်ရှာထားသည် ထင်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် သူ့နားထဲတွင် တဒေါက်ဒေါက်ဆိုသော အသံတွေကို ခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်ရသည်။
ဒီအသံက ဘာကြောင့်ထွက်လာသည်ဆိုတာ ကိုမြင့်မောင် နားလည်လိုက်သည်မို့ အသံထွက်လာရာ ကော်ရစ်တာဘက်က မိန်းတံခါးပေါက်ဝနားတွင် ကိုယ်ကိုကွယ်ကာ ပုန်းသည်။ ခါးကြားထိုးထားသည့် သေနတ်ကို အသင့်ထုတ်ကိုင်ထားပြီး ခေါင်းကို တံခါးဘက်သို့ စောင်း၍ ကြည့်နေလိုက်၏။
ထင်သည့်အတိုင်းပင်။ အခန်းတံခါးပွင့်ပြီး အရင်ဆုံးပေါ်လာသည်က အနီရောင် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လေး စီးထားသော ဖြူလွလွ ခြေတန်တစ်စုံ၊ ထိုခြေတန်များရဲ့ နောက်မှ ကိုယ်လုံးပေါ်လာသူက လင်းလင်းထက် ..
“What the ဖက်!!”
အခန်းထဲမှာ ရှိနေသည့် နီနီနဲ့ ၀ါဝါရဲ့ ပုံစံကို မြင်လိုက်သည်နှင် လင်းလင်းထက် အလန့်တကြား ရေရွတ်ရင်း ခြေလှမ်းတွေ တုန့်ခနဲရပ်သည်။ နောက်ထပ် ဘာမှ ထပ်မလှုပ်ရှားနိုင်ခင်မှာပင် သူမရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ဆီသို့ အေးစက်သည့် သေနတ်ပြောင်းနှင့် ထောက်ထားခြင်း ခံရသည်။
“သေနတ်ချလိုက် လင်းလင်းထက် ..”“ရှစ် !!”
နမော်နမဲ့ နိုင်လွန်းလှသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျိန်ဆဲရင်း လင်လင်းထက် လက်ထဲကိုင်ထားသည့် ပစ္စတိုသေနတ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ချလိုက်ရသည်။ ဒေါက်ခနဲ မြည်ပြီး ကျသွားသည့် သေနတ်ကို ကိုမြင့်မောင်က ခြေထောက်ဖြင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ ခတ်ထုတ်သည်။
ထို့နောက် လင်းလင်းထက်အား သေနတ်နှင့် ထောက်ထားရင်း ကိုမြင့်မောင် သူမကိုယ်ကို နောက်ကျောမှ တွန်းကာ security မော်နီတာများ ရှိရာသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။
“မင်း လက်တွေကို ခုံပေါ်မှာ တင်ထား .. နဲနဲလေးမှ လှုပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့”
လင်းလင်းထက်က သူပြောသည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်တာတွေ့ရသည်။ ကိုမြင့်မောင် သူမကို သေနတ်နှင့် ချိန်ထားရင်းမှ နီနီ အသုံးပြုခဲ့သည့် လက်ထိပ်ကို ကောက်ယူသည်။ စားပွဲခုံ၏ သံထောက်တစ်ခုတွင် လက်ထိပ်ကို အရင်လျှိုလိုက်ပြီးမှ နီနီရဲ့ လက်တစ်ဖက်ဆီကို အသေအချာ ခတ်သည်။ စိတ်ချရပြီ ဆိုမှ သူ့လက်ထဲက သေနတ်ကို ပြန်ရုတ်ကာ ခါးကြားထိုးလိုက်သည်။ နီနီတစ်ယောက် စားပွဲပေါ် လက်ထောက်ကာ ရှိနေပြီး သူမကိုယ်က ကိုမြင့်မောင် ရှိရာဘက်သို့ ကျောပေးထားသည်။
“ငါးပျံတစ်လှည့် ဗုံလုံတစ်လှည့်ဆိုတဲ့ စကား သိပ်မှန်တာပဲ မဟုတ်လား လင်းလင်းထက်”
ခပ်ထေ့ထေ့ ပြုံးကာပြောရင်း နောက်ကျောဘက်မှနေ၍ လင်းလင်းထက်ဆိုသော အကြမ်းဖက်သမရဲ့ နောက်ပိုင်းကို ကိုမြင့်မောင် စိတ်ကြိုက် ရှုစားနေမိသည်။ ပေါင်လည်လောက်အထိပဲ ရှည်သည့် သားရေစကပ်အနက်က တင်းပြောင်ပြီး တင်သားဖြိုးဖြိုးတွေပေါ် ပြေးကပ်နေသည်။ ပျော့ပြောင်းသည့် စကပ်သားကြောင့် ကော့စွင့်ကာထွက်နေသော တင်သားများ၊ တောင်တင်းရှည်လျားပြီး သွယ်လှသည့် ခြေတန်များ .. အားလုံးလိုလိုသည် incredible လို့ ဆိုရမည် .. very ဆက်ဆီ !!!
“သိန်းငါးဆယ် !!” (ကျောပေးထားသည့် လင်းလင်းထက်ထံမှ စကားသံထွက်လာသည်)“ဘာပြောတယ်” (တင်သားတွေကို ငမ်းနေမိသည့် ကိုမြင့်မောင် မျက်မှောင်ကျုံ့ ပြီး ပြန်မေးသည်)“ရှင် အခုချက်ချင်း ဒီနေရာက ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျမ ရှင့်ကို သိန်းငါးဆယ်ပေးမယ်”“အော် .. ဒီလိုလား .. နေစမ်းပါဦး .. ခင်ဗျားက ဘယ်သူလဲ .. နောက်ပြီး ဒီဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေက ဘာလုပ်ဖို့လဲ??” (ကိုမြင့်မောင် နှာခေါင်းတစ်ချက် ရှုံ့ ရင်း မေးခွန်းပြန်ထုတ်သည်)
သူ့အမေးကို လင်းလင်းထက်က မတုံ့ပြန်ပါ။
ကိုမြင့်မောင်က လင်းလင်းထက်နားသို့ လူချင်းနီးကပ်သည်အထိ တိုးကပ်ပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို တင်ပါးဖြိုးဖြိုးကြီးတွေပေါ် အသာအယာ တင်လိုက်သည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ကိုယ်ကလေး မသိမသာ တုန်သွားသည်။ အကြောက်အကန် ရုန်းခြင်းတော့ မရှိပါ။
“မင်း .. ဘာဖြစ်လို့ ကျုပ်တို့ စက်ရုံကို ဖောက်ခွဲချင်ရတာလဲ”လင်းလင်းထက်က သူ့ကို စကားမပြန် …။“အိုကေလေ .. မဖြေချင်လဲ ရတယ် .. ငါလည်း ဒီကိစ္စတွေ သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး”
လင်းလင်းထက်ရဲ့ အကြံကို ဆက်လက်မေးမြန်းမနေတော့ဘဲ ကိုယ့်အကြံကိုသာ အကောင်အထည်ဖို့ တွေးလိုက်ပြီး ကိုမြင့်မောင် သူ့ဆီးစပ်နှင့် အရသာကောင်းကောင်း ပေးမည်ဆိုတာ သိနေသည့် တင်ပါးကြီးတွေကို ပြေးကပ်သည်။
“အစောပိုင်းတုန်းက တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ရပ်လိုက်ရတဲ့ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားက ကိစ္စပဲ ဆက်လိုက်ရအောင်”
ထိုသို့ပြောရင်း ကိုမြင့်မောင်က ဆီးစပ်နှင့် တင်အိုးနှစ်လုံးနှင့် စတင်ပြီး ပွတ်သည်။ အောက်ခံ သားရေစကပ်ရှိနေသည့်တိုင် တင်သားတွေရဲ့ အတွေ့က ကောင်းလွန်းလှရာ သူ့လီးက တဖြေးဖြေးခြင်း ပြန်၍ မာလာသည်။
“ဘာလုပ်တာလဲ … နောက်ထပ်တစ်ခါ ကျမကိုယ်မှာ ဗုံးရှာဖို့ ကြံနေတာလား” (မကျေမချမ်း ဖြစ်နေရှာသူ လင်းလင်းထက်က အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားသည့် အသံဖြင့် မေးသည်)“ဟဲ ဟဲ ဆိုပါတော့ .. မင်း ငြိမ်ငြိမ်လေးသာနေ .. ကျုပ် စိတ်ပါရင် မင်းတို့ အသည်းအသန်လိုချင်နေတဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့တောင် ပြောပြဦးမယ် ..”
ကိုမြင့်မောင်လက်တွေက သားရေစကပ်ရဲ့ အောက်ခြေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ရောက်သွားပြီး အပေါ်ဘက်သို့ အသာဆွဲမတင်သည်။ တဖြေးဖြေးခြင်းနှင့် သားရေစကပ်က လိပ်ကာ ခါးသွယ်သွယ်လေးပေါ်တွင် စုပုံသည်။
“ရှင်ဟာ တကယ့်နှာဘူးကောင်ပဲ” (လင်းလင်းထက်က မခံချိမခံသာ အသံနှင့် ထပ်ပြောသည်)“တောက် .. လှတယ်ကွာ”
စကပ်အခံ ကင်းလွတ်သွားလို့ ပေါ်လာသည့် တင်သားဖွေးဖွေးကြီး နှစ်လုံးက ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကောင်းလှသည်။ အစက်အပျောက်ဆို၍ အမည်းစက်ရော၊ အနီစက်ရော တစ်ခုတစ်လေမှ မရှိဘဲ ကြွေသားရောင်တောက်သလို ဖြူဖွေးတင်းပြောင်နေသည်။ ထို့အပြင် လင်းလင်းထက် အတွင်းခံဟူ၍ ဝတ်ထားသည်က ကြိုးတစ်ချောင်းထဲ ရှိသော ဂျီစထရင်းသာ။ အပြစ်ပြောစရာ မရှိသည့် လုံးဝန်းဖြိုးမောက်သည့် တင်သားကြီးနှစ်ခုကို သေးငယ်လှသည့် ငွေရောင် lace ကြိုးလေးကသာ ပိုင်းခြားထားသည်။ တောက် !!!
တအားဖျစ်ညှစ်ဖို့ ကောင်းနေသည့် တင်သားလုံးလုံးတွေပေါ် ကိုမြင့်မောင်လက်က ချက်ချင်း နေရာယူသည်။ လက်ဖဝါးဖြင့် အသာအယာပွတ်ကြည့်ပြီးနောက် တင်သားနှစ်ဖက်ကို ဖျစ်ညှစ်ကာ ဆွဲရင်း ဟသွားသည့် ဖင်ကြားထဲသို့ သူ့လီးကိုကပ်ကာ တယောထိုးသလို စတိလိုးသည်။
“ဒီညအဖို့ ကျုပ် လေးကြိမ်မြောက် လိုးနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ”
ကိုယ့်စိတ်ကူးနှင့် ကိုယ်ပြောလိုက်ရင်း ကိုမြင့်မောင် လက်က တင်အိုးထွားထွားတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားရာမှ အပေါ်ဘက်သို့ ကင်းခြေများတစ်ကောင်လို တရွေ့ ရွေ့ နှင့် တက်လာ၏။
“ကျုပ်ဟာကျုပ်တောင် အံ့သြမိတယ် .. ဒီလောက်တောင် စွမ်းလိမ့်မယ် ထင်မထားတာ အမှန်ပဲ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်အတွက်တော့ ဒီနေ့ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အကောင်းဆုံးနေ့ပဲ”
ကိုမြင့်မောင်လက်တွေက ဘလောက်စ်အပေါ်ကနေ လင်းလင်းထက်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို လှမ်းဆွဲလိုက်သောအခါ သူမကိုယ်လေး တောင့်တင်းကာသွားရှာသည်။ အင်းခနဲ ကိုမြင့်မောင် နှုတ်က ကျေနပ်စွာ ထုတ်ဖော်ညည်းပြီး လက်တွေက နို့အုံသားတွေကို တင်းတင်းဆွဲဖျစ်သလို၊ ဆီးစပ်နှင့်လည်း သူမဖင်ကြားကို လျှောတိုက်ပွတ်နေသည်။ (ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မင်းနို့ကြီးတွေက ဆွဲလို့ကောင်းနေတာပဲ ဟ) .. ။ လင်းလင်းထက်ဆီက ဘာသံမှ မထွက်ဘဲ ငြိမ်ခံနေရာ ကိုမြင့်မောင် ပို၍ အတင့်ရဲလာသည်။ ဘလောက်စ်ပေါ်မှ နို့တွေကို နယ်ဖတ်နေရာမှ လက်ကို ဘလောက်စ်အောက်မှ လျှိုကာ အထဲသို့ ထည့်မည့်ဟန် ပြင်သည်။
“တော်ပြီ .. ကျမ အရှုံးပေးတယ် .. ရှင် ကျမကို ရဲလက်ထဲ အပ်ချင်အပ်တော့”“နေပါဦးလေ .. ဆန္ဒတွေ မစောစမ်းပါနဲ့ “
စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် ပြောလိုက်သည့် လင်းလင်းထက်စကားကို လျစ်လျူရှုရင်း ကိုမြင့်မောင်လက်က ဘလောက်စ်အင်္ကျီရဲ့ အောက်နားစကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်သည်။ လက်ဖြင့် တအားဆွဲလိုက်ရာ ဗြိခနဲ ဆိုသည့် အသံက အကျယ်ကြီး မြည်ပြီး ဘလောက်စ်အင်္ကျီက လည်ပင်းနေရာထိ နှစ်ခြမ်းကွဲထွက်သည်။
“စောက်ရူးးးး .. အဲ့ဒါ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတာဟဲ့”
ငြိမ်ခံနေသည့် လင်းလင်းထက် ဒေါသဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီး ကုန်းအော်သည်။ ဘလောက်စ်ဖြူဖြူလေး ရှိခဲ့သည့် နေရာကို ခေါင်းငုံ့ကြည့်မိတော့ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က အနီရဲရဲ lacy ဘရာလေးကို အုပ်ကိုင်ပြီးသား ဖြစ်နေတာ တွေ့သည်။ လင်းလင်းထက် ဒေါသထွက်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ သူမကိုယ်တစ်ခုလုံး ဒေါသမီးကြောင့် လောင်မြိုက်နေရာ လူတောင်မှ ချက်ချင်းပင် အခိုးအငွေ့များ ထွက်ကာ ပျောက်သွားမလား ထင်ရသည်။ သူမ ဒီလိုဖြစ်နေပေမယ့် ကိုမြင့်မောင်ကတော့ မမှု။ ဘရာသားတစ်ဝက်လောက်သာ ဖုံးထားနိုင်သည့် နို့ကြီးတွေကို ကောင်းကောင်းနယ်ဖတ်နေယုံမက၊ ဖင်ကြားထဲ လီးကိုထောက်ပြီး လိုးနေသည်ကိုလည်း တစ်ချက်လေးမှ မရပ်။ ယူနီဖောင်း ဘောင်းဘီသာ ခံမထားလျှင် သူမဖင်ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဖုတ်ပေါက်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုထဲ လီးက တိုးဝင်နေမှာ သေချာပါသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုမြင့်မောင်သည် အနေအထား မမှန်တော့ပြီဖြစ်သော ဘရာနီနီလေးရဲ့ နောက်ကျောက ချိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဘရာကြိုးသေးသေးလေး နှစ်ဖက်က လင်းလင်းထက်ရဲ့ ပခုံသားများပေါ်က ပြေကျပြီး စားပွဲစွန်းကို ကိုင်ထားရသည့် လက်တန်တွေတလျှောက် လျှောဆင်းကာ အဖျားမှာ သွားစုသည်။ ဘာမှအဖုံးအကွယ် မရှိတော့ပြီ ဖြစ်သည့် လင်းလင်းထက်ရဲ့ နို့ကြီးတွေခမျာ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားနှင့် သူမရဲ့ ရင်ဘတ်နေရာမှ ကြွတက်ကာ ရှိနေသည်။ နို့သီးမာမာလေးတွေကမူ ငှားငှားစွင့်စွင့်ရှိနေသည့် နို့အုံကြီးတွေ၍ ထိပ်ပိ်ုင်းအား လှပစွာ အဖျားသတ်ပေးထားသည်။
လင်းလင်းထက်ရဲ့ ပခုံးပေါ်မှ ကျော်၍ ကြည့်လိုက်သောအခါ မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် ကိုမြင့်မောင် နှုတ်မှ ထုတ်ဖော်ချီးကျူးမိသည်။ (မင်း နို့တွေက အရမ်းကြီးပြီး တအားလှတာပဲ) .. အလေးချိန် မနည်းလှမည့် နို့အုံလုံးကြီးတွေကို အောက်ကနေ ပင့်ကာ ကိုင်ထားရင်း ကိုမြင့်မောင် ထပ်ပြောပြန်သည်။ လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ပြီး ညှစ်ကြည့်သောအခါ တင်းရင်းနေသည့် အသားဆိုင်တွေက သူ့လက်ကိုပင် တောင့်ခံထားရှာသည်။ ကိုမြင့်မောင်တော့ သဘောကျလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ နို့ကြီးဂိုဏ်းရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ် ဘုရင်မ ပီသပါဘိ ..။
“တောက် … နည်းတာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး .. ဒါကြီးတွေ ခေါင်အုံးအိပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း”
ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကာကိုး ဟွန့်ခနဲ နှာခေါင်းရှုံ့ ၍ လင်းလင်းထက် တုံ့ပြန်သည်။ သူမ ပခုံးပေါ်မှ ကျော်၍ ကိုမြင့်မောင်က သူ့လက်တွေ နို့အုံကြီးတွေပေါ် ပြေးလွှားနေပုံကို ငုံ့ကြည့်နေရာ လင်းလင်းထက် မျက်နှာက တခြားကို စောင်းငဲ့ထားသည်။
“ကဲ .. ကျုပ်တို့တွေ ဘာလုပ်ကြမလဲ ပြောရအောင် .. မင်းကို ကျုပ်ကောင်းကောင်းလိုးပြီး ယောက်ျားလီး ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပြမယ် .. ပြီးမှ ရဲတွေ အကြောင်းကြားတာပေါ့ .. မကောင်းဘူးလား”
လုံးဝကို ကျေနပ်မှာ မဟုတ်မှန်း သိနေပေမယ့် လင်းလင်းထက်ဆီမှ တုံ့ပြန်စကားကိုတော့ မရရှိပါ။ မျက်နှာကို လွှဲမြဲအတိုင်း လွှဲထားသည်။
နို့လုံးလုံးကြီးတွေအား စိတ်ကြိုက်နယ်ဖတ်နေမှုကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကိုမြင့်မောင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချ၍ ပင်တီဆီသို့ လက်လှမ်းသည်။ သေးသွယ်သည့် ခဲရောင်ဂျီစထရင်းလေး သွယ်လှသည့် ပေါင်တန်တွေ တလျှောက် လျှောကာ ကဗျာဆန်ဆန် ကျလာသောအခါ ကိုမြင့်မောင် သူ့စိတ်ကိုသူ မထိန်းနိုင်။ သူ့ကိုယ်နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သော ညာဘက်ခြမ်းက ဖင်သားဖွေးဖွေးလုံးလုံးကြီးအား ဖိကာနမ်းသည်။ လျှာပြားလိုက်ကြီး ထုတ်၍လည်း ရွှတ်ခနဲ လျက်သည်။
တံတွေးရည် စိုကာ ပြောင်လက်သွားသည့် တင်ပါးကြီးတစ်ခြမ်းကို ဖြန်းခနဲမြည်အောင်ပင် ခပ်ဆတ်ဆတ်ပုတ်လိုက်ပြီး ကိုမြင့်မောင် မတ်တပ်ပြန်ရပ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့ဘောင်းဘီကို ကြယ်သီးဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်ယုံမက ခြေကျင်းဝတ်ထိရောက်အောင်လည်း တွန်းချသည်။ အသင့်အနေအထားနှင့် မတ်ထောင်နေသည့် လီးကတော့ သူ့အတွက် ခိုနားစရာ ချိုမြမည့် အဖုတ်အသစ် ဘယ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိနေဟန်ဖြင့် တင်ပါးဖွေးဖွေးကြီး နှစ်ခုကြားသို့ တန်းကာချိန်ထားသည်။
အမဲနံ့ရသော ကျားလို ဆန္ဒဇောဖြင့် တဆတ်ဆတ်တုန်ချင်နေသည့် လီးကို သေချာ ထိန်းကိုင်ပြီး ကိုမြင့်မောင် လင်းလင်းထက်ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ နောက်သို့ တိုးကပ်သည်။ အနည်းငယ် စွတ်စိုနေသည့် အဖုတ်ဝနှင့် လီးထိပ် အရင်ထိသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ သက်ပြင်းချသံ သဲ့သဲ့နှင့်အတူ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ ကျေနပ်အားရစွာ ညည်းသံက ထွက်ပေါ်လာ၏။ ထိုအသံနှစ်ခုရဲ့ နောက်တွင်တော့ အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားသည့် ပြစ်ခနဲမြည်သံက ထပ်ကျပ်မကွာ လိုက်ပါလာသည်။
လီးဒစ် အဖုတ်ခေါင်းထဲ ဝင်သွားသည်နှင့် ကိုမြင့်မောင်လက်နှစ်ဖက်က လင်းလင်းထက်ရဲ့ ပခုံးသားများကို အားပြုသလို ဆုပ်ကိုင်သည်။ ထို့နောက် ဆီးစပ်ကို ဆတ်ခနဲ ကော့ထိုးလိုက်ရာ လီးတန်က အဖုတ်လမ်းကြောင်း တလျှောက် အားအရှိန်အပြည့်ဖြင့် ပြေးဝင်သည်။
“မှတ်ပြီလား .. ပါဝါပလန့်ကို ဗုံးခွဲချင်ဦး”
ကိုမြင့်မောင်ကတော့ အပီအပြင်ကို ကြုံးဝါး၍ လိုးဆောင့်သည်။ လင်းလင်းထက် အဖုတ်က နီနီလိုမျိုး တအားကျပ်နေသည် မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့လီးအား အဆင်ပြေစွာ လက်ခံနိုင်သည့်အတွက်လည်း လုပ်ရတာ ပိုမိုက်သည်။ စိတ်ပါတာလား၊ မပါတာလား မသိသည့်တိုင် သဘာဝအလျောက် ထွက်လာသည့် စောက်ရည်ကြည်များကြောင့် လီးတန်အသွင်းအထုတ်က အခက်အခဲမရှိ။ ရှောခနဲဝင် .. ရှောခနဲ ပြန်ထွက်နှင့် စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်းတွင် လီးတစ်ချောင်းလုံးက အဖုတ်ထဲ လိုးဝင်သည်။
လင်းလင်းထက်ရဲ့ပခုံးအား အားပြုထားသည့် လက်တွေကိုလွှတ်၍ ဖါးလျားကျနေသည့် ဆံနွယ်နီညိုရောင်တွေကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ဆွဲသည်။ အားခနဲ အော်ပြီး လင်းလင်းထက် ခေါင်းက မော့ပြီး ကျောပြင်လေးက အလိုလို ကော့တက်သည်။ ဒီအနေအထားတွင် ခါးက ခွက်ဝင်သလို ဖြစ်ရာ၊ အဖုတ်ထဲတိုးဝင်နေသည့် လီးက အနေအထား တစ်မျိုးပြောင်း၍ တိုးဝင်ပြန်သည်။
“အိုး … ရေး”
သူ့လီးက အိထွေးနေသည့် အဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးအထိ ဝင်သွားတိုင်း၊ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးတွေ လှိုင်းလုံးပမာတုန်ခါတက်သည်ကို ကြည့်ရင်း ကိုမြင့်မောင် အကောင်းကြီးကောင်းနေသည်။ လင်းလင်းထက်ရဲ့ ဆံပင်ကို လက်ပြန်လိမ်ကာ ဆွဲထားရင်းမှ အချက်နှစ်ဆယ် နီးပါးမျှ တဟုန်ထိုးဆောင့်သည်။ ထို့နောက် ဆံပင်တွေကို လိမ်ဆွဲထားမှုကို ဖြေလွှတ်သည်။ သို့သော် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ လက်တွေကမူ ဆံနွယ်တွေအစား လင်းလင်းထက်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို နောက်ကနေ ဖမ်းဆုပ်အားပြုသည်။ တအားကို ဖျစ်ညှစ်ထားရင်းမှ တဖန်းဖန်းနှင့် မြည်အောင်ကို ဆောင့်သည်။
“အား … ပြီး .. ပြီးပြီ !!!!!!!!”
စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ကြုံးအော်လိုက်ပြီးနောက် ကိုမြင့်မောင် သူ့လီးကို ပြန်မနှုတ်တမ်း အဖုတ်အဆုံးထိရောက်အောင် ထိုးထည့်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်း အကျဆုံးသို့ ရောက်ရှိနေသည့် လီးထိပ်မှနေ၍ ချွဲပြစ်နေသည့် လရည်တွေကို အားရပါးရ ပန်းထုတ်သည်။ သုံးလေးခါထက်မနည်း လီးတန်တလျှောက် ပူဆင်းသွားအောင် လရည်တွေကို သွန်ထုတ်ပြီးမှ ကိုမြင့်မောင် သူ့လီးကို အဖုတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်သည်။ နှုတ်ဆက်လက်ဆောင် အနေနဲ့ သွေးရောင်သမ်းကာ နီးမြန်းနေသည့် ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီး တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်လိုက်သည်။
“ကောင်းကွာ .. ဟူး … ရေလည်မိုက်တယ်”
နောက်ကို ခြေလှမ်း အနည်းငယ်ဆုတ်ရင်း အသက်ကိုမှန်မှန် ပြန်ရှူနေရသည့် ကိုမြင့်မောင် သူ့အတွက်သူ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် ကြွေးကြော်မိသည်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်တာပဲလေ။ ပြည့်စွမ်းအား နူးကလီးယားပါဝါပလန့်ကို ဖောက်ခွဲဖို့ လာတာ ဖြစ်ရမည့် အကြမ်းဖက်သမ သုံးယောက်တွင် .. နို့ကြီးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ လင်းလင်းထက်ဆိုသည့် လုံးကြီးပေါက်လှ ကောင်မက မော်နီတာများ တင်ထားသည့် စားပွဲစွန်းကို လက်ထောက်၍ ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားနှင့် မတ်တပ်ရပ်နေရသည်။ ဖင်သားဖွေးဖွေးတွေကြားမှ အနောက်သို့ ပြူးထွက်နေသည့် အဖုတ်ဝသည်မူ ကိုမြင့်မောင် လီးဒဏ်ကြောင့် ဟစိဟစိတောင် ဖြစ်နေသည်။ နီနီရဲရဲ အသားနုလေးတွေ အပေါ်တွင်တော့ တစိမ့်စိမ့် စီးကျနေသည့် သုတ်ရည်ဖြူပြစ်ပြစ်များက နေရာယူထားသည်။
နို့ကြီးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ နောက်လိုက်ဖြစ်သည့် နှစ်ယောက်အနက် နီနီက မျက်နှာပေါ်တွင် သုတ်ရည်တွေ အဖွေးသားနှင့် ကြမ်းပြင်ထက်တွင် မေ့လဲနေပြီး၊ ၀ါဝါကမူ အဖုတ်အတွင်းတွင် သုတ်ရည်တွေ အပြည့်နှင့် စားပွဲပေါ်တွင် လဲလျောင်းလျက်ရှိသည်။
ကိုမြင့်မောင် မခိုးမခန့်လေသံဖြင့် ဟက်ခနဲ တစ်ချက် ရယ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကို ပြန်ဝတ်သည်။ ညဘက်စောစော အိမ်က ထွက်မလာခင်က ချွန်ခဲ့သည့် Jingle Bells တီးလုံးကိုပင် လေကလေး ချွန်ရင်း လင်းလင်းထက်ရှိနေရာ မော်နီတာများ တင်ထားသည့် စားပွဲနားသို့ လျှောက်လာသည်။ ထိုင်ခုံတစ်လုံးကို ဆွဲကာထိုင်ရင်း စကရင်ဆော့ဗာပေါ်နေသေးသည့် မိန်းကွန်ပျူတာတွင် ပတ်စ်ဝေါ့ကို စိမ်ပြေနပြေ ရိုက်ထည့်သည်။ ဖြတ်ခနဲ ပေါ်လာသည့် စကရင်တွင်ရှိသော Security System ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနောက် မော်နီတာရှေ့က နံရံတွင်ရှိသော အနီရောင်ခလုတ်ကို နှိပ်သည်။ Emergency Team မကြာခင် ရောက်လာတော့မည်မှန်း ကိုမြင့်မောင်ရော၊ လင်းလင်းထက်ပါ သိလိုက်သည်။
“ပတ်စ်ဝေါ့က ဘာလဲ” (နာကျည်းစက်ဆုပ်သည့် လေသံဖြင့် လင်းလင်းထက် ဘေးတိုက်ရှိနေသည့် ကိုမြင့်မောင်ကို လှမ်းမေးသည်)“ပတ်စ်ဝေါ့”“ဘာပြောတယ်”
ကိုမြင့်မောင်ဆီက ပြန်ဖြေသံကို ကြားလိုက်ပေမယ့် ဘာဆိုလိုမှန်း မသိသဖြင့် လင်းလင်းထက် ထပ်မေးပြန်သည်။ ထိုရောအခါ လေသံအေးအေးလေးနှင့် ရှင်းပြရှာသည့် ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ စကားကို ကြားပြီးနောက် လင်းလင်းထက် စိတ်ဓါတ်က ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ကို ကျသွားသည်။ ဒီလိုမျိုး စက်ရုံရဲ့ ညစောင့် အလိုးခံလိုက်ရတာတောင် သူမ ဒီလောက် မခံစားရ။ ဘာမဟုတ်တာလေးကို မတွေးမိရကောင်းလားဆိုသည့် သူမရဲ့ အဖြစ်ကို သူမ ဝမ်းနည်းနာကျည်းကာ လက်ထိပ်သာ ခတ်မထားဘူးဆိုရင် နံရံနဲ့ ခေါင်းပြေးဆောင့်ကာ သူမကိုယ်သူမ သတ်သေမိမလား မသိ … ။
Terrorist အရင့်အမာကြီး ဖြစ်လျက်နှင့် မျက်လုံးအိမ်တွင် မျက်ရည်များ ရစ်ဝဲလာသည့်အထိ ခံစားသွားရရှာသည့် လင်းလင်းထက်အား ကိုမြင့်မောင် လှမ်းပြောလိုက်သည့် စကားကား ..
“ပတ်စ်ဝေါ့က ပတ်စ်ဝေါ့ပဲလေ .. pas s w o rd.. ဒီကောင်က system default အနေနဲ့ လာတာ … ကျုပ်က ဒါကြီးကို ကြည့်ပြီး ဟာသပဲဆိုပြီး မချိန်းဘဲထားတာ .. ချိန်းရမှာ ပျင်းတာလဲ ပါတာပေါ့”
ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ဟန်ပါပါ တွန့်ပြလိုက်ယုံမက လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို ဖြန့်၍ပါ သူဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုသည့် အမူအရာဖြင့် ကိုမြင့်မောင် ရှင်းပြလိုက်သော စကားပင် …။
မိန်းကွန်ပျူတာရှေ့ရှိ ထိုင်ခုံတွင် ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေရင်းမှ ကိုမြင့်မောင်ရဲ့ အတွေးက ဓါတ်ခွဲခန်းရဲ့ စတိုခန်းထဲတွင် ကျန်ခဲ့သည့် ဒေါက်တာဝင့်သူဆီသို့ ရောက်သွားသည်။ စက်ရုံကို ဝင်စီးသည့် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို သူချေမှုန်းလိုက်ပြီလို့ ဝမ်းသာအားရ သွားပြောရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် အန္တရာယ်မှ မလွတ်မြောက်သေးဘူးဟု ဖောရှောလုပ်ကာ နောက်ထပ်တစ်ချီလောက် လီးစုပ်ခိုင်းလို့ ရမလား တွေးလိုက်သေးသည်။ သို့သော် ဒီနေ့အဖို့ ငါးကြိမ်မြောက်အဖြစ် လီးထောင်လာနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ ကိုမြင့်မောင်အတွက်တော့ မသေချာပါချေ .. ။
ခင်ဗျားတို့လည်း ကိုမြင့်မောင် နေရာမှာဆိုလျှင်ရော ဘယ်လိုနေကြမလဲဗျာ ….